အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၂) | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သဘောထား
ယခု သင်တို့ ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှေ့ပိုင်းမှ မိတ်သဟာယပြုမှုကို နားထောင်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်တို့ဆီမှာ စကားလုံးများ အစီအတန်းလိုက် ရှိပြီးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ သင်တို့ မည်မျှ လက်ခံနိုင်သည်၊ သဘောပေါက်နိုင်သည်၊ နားလည်နိုင်သည်ဆိုခြင်းအားလုံးက ဤအရာအပေါ်မှာ သင်တို့ မည်မျှ အားစိုက်ထုတ်မည်ဆိုသည့် အပေါ်မှာ မူတည်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို သင်တို့ လေးလေးနက်နက် ချဉ်းကပ်နိုင်ရေးသည် ငါ၏ မျှော်လင့်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့ ဤအရာကို စိတ်မပါ့တပါနှင့် လုံးဝမကိုင်တွယ်သင့်ပေ။ ယခု ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာကို သိခြင်းက ဘုရားသခင်၏ အလုံးစုံကို သိခြင်းနှင့် ညီမျှသလော။ ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာကို သိခြင်းက အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကို သိခြင်း၏ အစဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာကို သိခြင်းက အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ အနှစ်သာရကို သိခြင်းတံခါးဝထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ဤနားလည်ခြင်းက ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် အခြားအပိုင်းက အဘယ်နည်း။ ဤအရာက ယနေ့ မိတ်သဟာယပြုလုပ်ချင်သည့် အကြောင်းအရာဖြစ်သည်—ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သဘောထား။
ယနေ့ခေါင်းစဉ်နှင့် မိတ်သဟာယပြုလုပ်ဖို့ သမ္မာကျမ်းစာက အခန်းနှစ်ခန်းကို ရွေးထားပါသည်။ ပထမတစ်ခုက ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၁-၁၁ နှင့် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၄-၂၅ မှာ တွေ့နိုင်သည့် သောဒုံမြို့ကို ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ခုက ယောနဝတ္ထု ၁:၁-၂ နှင့် ယောနဝတ္ထု၏ တတိယနှင့် စတုတ္ထအခန်းမှာ ဖြည့်စွက်ချက်အနေနှင့် တွေ့နိုင်သည့် နိနေဝေမြို့ကို ဘုရားသခင် လွတ်မြောက်စေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်တို့အားလုံးက ဤအခန်းနှစ်ခန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငါပြောမည့်စကားကို ကြားနာဖို့ စောင့်နေကြပြီဟု ထင်ပါသည်။ ငါပြောမည့်အရာက ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကို သိခြင်းနှင့် သူ၏အနှစ်သာရကို သိခြင်းအကြောင်းတို့ထံမှ ပင်ကိုအားဖြင့် လမ်းလွဲသွား၍မရပေ။ သို့သော် ယနေ့မိတ်သဟာယ၏ အာရုံစိုက်မည့်အရာက ဘာဖြစ်မည်နည်း။ သင်တို့ထဲက မည်သူ သိသနည်း။ “ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာ” နှင့်ပတ်သက်ပြီး ငါမိတ်သဟာယပြုခြင်း၏ ဘယ်အပိုင်းက သင်တို့ကို အာရုံစူးစိုက်စေပါသနည်း။ ဤကဲ့သို့သြဇာအာဏာနှင့် တန်ခိုးကို ပိုင်ဆိုင်သည့် တစ်ဦးတည်းသောသူက ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ဘာကြောင့်ငါပြောခဲ့သနည်း။ ဤသို့ပြောပြီး ဘာကို ငါက ရှင်းပြလိုသနည်း။ ငါသင်တို့ကို ဘာအသိပေးလိုသနည်း။ တဖန် ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာနှင့် တန်ခိုးက သူ၏အနှစ်သာရကို ပြသသည့်ပုံစံ တစ်ခုလော။ ဤအရာတို့က သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ဂုဏ်ဒြပ်ကို သက်သေပြသည့် သူ့အနှစ်သာရ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလော။ ငါဘာကိုပြောသွားမည်ဆိုသည်ကို ဤမေးခွန်းတို့က သင်တို့ကို ပြပြီးပြီလော။ ငါသင်တို့ကို ဘာကို နားလည်စေချင်သနည်း။ ၎င်းကို ဂရုတစိုက်နှင့် စဉ်းစားပါ။
ဘုရားသခင်ကို ခေါင်းမာမာနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်အတွက် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသအားဖြင့် ဖျက်ဆီးခံရသည်
ပထမဆုံး “သောဒုံမြို့ကို ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်း”ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်။
သူသည် လူမဆန်သည့် လူရမ်းကားအဖွဲ့နှင့် ဝိညာဉ်များကို ဝါးမျိုမည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပြည့်နေသည့် လူတို့နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည့်အခါမှာ လောတက မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သနည်း။ ကျမ်းစာအရ “ညီအစ်ကိုတို့၊ အဓမ္မအမှုကို ဤမျှလောက် မပြုကြပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်၌ ယောက်ျားနှင့် မဆက်ဆံသော သမီးနှစ်ယောက်ရှိပါ၏။ သူတို့ကို သင်တို့ထံသို့ထုတ်ရသော အခွင့်ကိုပေးကြပါလော့။ သူတို့၌ ပြုချင်သမျှပြုကြပါလော့။ ဤလူတို့၌ အလျှင်းမပြုကြပါနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် အကျွန်ုပ်အိမ်မိုးအရိပ်ကို ခိုနေပါ၏။” သူ့စကားလုံးများနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆိုလိုက်သည်။ သတင်းစကားပို့ဆောင်သူများကို ကာကွယ်ဖို့ သူသည် သူ့သမီးနှစ်ဦးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေခဲ့သည်။ စဉ်းစားမနေဘဲနှင့် ဤလူများသည် လောတ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို သဘောတူပြီး သတင်းစကားပို့ဆောင်သူနှစ်ဦးကို ထားခဲ့လိုက်သင့်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်မူ သတင်းစကားပို့ဆောင်သူတွေက သူတို့အတွက် သူတို့နှင့် ဘာမှမသက်ဆိုင်သည့် လူတွေဖြစ်သည့် စင်စစ်လူစိမ်းများပင်ဖြစ်သည်။ ဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူ နှစ်ဦးက သူတို့အကျိုးစီးပွားကို တစ်ခါမှ မထိခိုက်ဖူးပေ။ သို့သော်လည်း သူတို့၏ မတရားသည့် သဘောသဘာဝ၏ တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ဤကိစ္စကို ဤနေရာမှာ ချန်မထားပေ။ ထိုအစား သူတို့၏ အားထုတ်မှုများကို ပို၍ပင် အရှိန်မြှင့်လိုက်ကြသည်။ ဤနေရာမှာ သူတို၏ ခွန်းကြီးခွန်းငယ်စကားနောက်တစ်ခုက ဤလူများ၏ အမှန်တကယ်ကြမ်းတမ်းသည့် သဘောသဘာဝကို ပိုပြီးသိမြင်စေနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်က ဤမြို့ကို ဘာကြောင့်ဖျက်ဆီးချင်သည်ဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကိုလည်း သိပြီး နားလည်သဘောပေါက်စေသည်။
သည်တော့ သူတို့ ဘာထပ်ပြောခဲ့ကြသနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြချက်အရ “သူတို့က ဆုတ်လော့ဟု ဆိုကြ၏။ တဖန်ကား၊ သင်သည် တည်းခိုခြင်းငှာသာ ရောက်လာသည်နှင့် တရားသူကြီးလုပ်ရမည်လော။ ယခုမှာ ထိုသူတို့၌ ပြုသည်ထက်၊ သင်၌သာ၍ဆိုးသောအမှုကိုပြုမည်ဟုဆိုလျက်၊ လောတကို ကျပ်ကျပ်ဖိ၍ တံခါးကိုလည်း ပေါက်ခွဲချိုးဖဲ့ခြင်းငှါ ချဉ်းလာကြ၏။” သူတို့ ဘာကြောင့်တံခါးကို ချိုးဖျက်ချင်သနည်း။ အကြောင်းရင်းက သူတို့သည် ဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူနှစ်ယောက်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေဖို့ အလွန်စိတ်လောနေ၍ပင် ဖြစ်သည်။ ဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူနှစ်ယောက်က သောဒုံမြို့မှာ ဘာလုပ်နေကြသနည်း။ ဤနေရာကို လာခြင်း၏ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က လောတနှင့် သူ့မိသားစုကို ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် အာဏာဆိုင်ရာ ရာထူးများကို ယူဖို့လာသည်ဟု ဤမြို့မှလူများက မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို မမေးဘဲ ဤမြို့မှလူများက ဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူနှစ်ယောက်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ အန္တရာယ်ပြုချင်အောင် လုပ်စေခြင်းက ထင်မြင်ချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်သည့် ဤလူနှစ်ယောက်ကို သူတို့က အန္တရာယ်ပေးချင်ခဲ့ကြသည်။ ဤမြို့မှလူများသည် သူတို့၏ ကြင်နာမှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကို လုံးဝ ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုသည်မှာ ရှင်းပါသည်။ သူတို့၏ ရူးသွပ်မှုနှင့် ကြမ်းတမ်းမှု အဆင့်က စာတန်၏ အန္တရာယ်ပြုတတ်သည့် ကြမ်းတမ်းသည့် သဘာဝနှင့် လူသားကို ဝါးမျိုခြင်းနှင့် ဘာမှမကွာခြားတော့ပေ။
ဤလူတို့ကို လောတဆီမှ သူတို့ တောင်းဆိုသည့်အခါ လောတက ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။ စာသားများအရ လောတက သူတို့ကို လွှဲမပေးခဲ့ဘူးဆိုသည်ကို ငါတို့သိရသည်။ လောတက ဘုရားသခင်၏ ဤသတင်းစကားပို့ဆောင်သူနှစ်ယောက်ကို သိသလော။ မည်သို့သိမည်နည်း။ သို့သော်လည်း သူက ဘာကြောင့် ဤလူတို့ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သနည်း။ သူတို့ ဘာလာလုပ်သည်ဆိုသည်ကို သူသိခဲ့သလော။ သူတို့လာရခြင်း အကြောင်းကို သူမသိခဲ့သော်ငြားလည်း သူတို့က ဘုရားသခင်၏ အစေခံများဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုတော့ သူသိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဤအစေခံများကို သူက အရှင်တို့ဟု ခေါ်နိုင်ခြင်းက လောတသည် သောဒုံမြို့အတွင်းမှာရှိသည့် အခြားလူများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ ပုံမှန် နောက်လိုက်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သတင်းစကားပို့ဆောင်သူတွေက သူ့ဆီကို လာသည့်အခါမှာ ဤအစေခံနှစ်ယောက်ကို လက်ခံဖို့ သူ့အသက်ကို သူစွန့်စားသည်။ ထို့အပြင် ဤအစေခံနှစ်ယောက်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သူ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်း အလဲအလှယ်အဖြစ် ပေးလိုက့်သည်။ ၎င်းသည် လောတ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် လုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ လောတ၏ သဘောသဘာဝနှင့် အနှစ်သာရတို့၏ ရှင်းလင်းမြင်သာသည့် ဖော်ပြချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကလည်း ဘုရားသခင်က လောတကို ကယ်တင်ဖို့ သူ၏ အစေခံတို့ကို လွှတ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါမှာ လောတက ဘာကိုမှ ငဲ့ကွက်မနေဘဲ ဤအစေခံနှစ်ယောက်ကို ကာကွယ်ခဲ့သည်။ အစေခံများ ဘေးကင်းရေးအတွက် သူ့သမီးနှစ်ယောက်နှင့်ပင် လဲလှယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ လောတကလွဲပြီး ဤအရာမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်သူ မြို့ထဲမှာ မည်သူရှိမည်နည်း။ အချက်အလက်များက သက်သေပြထားသည့်အတိုင်းပင်၊ မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် လောတကလွဲပြီး သောဒုံမြို့မှာရှိသည့် လူတိုင်းက ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ဖျက်ဆီးခံရသင့်သည့် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာ ပြောနေစရာမလိုတော့ပေ။
သောဒုံမြို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ကို ထိခိုက်သည့်အတွက် ဖျက်ဆီးခံရဖို့ ဖြစ်လာသည်
သောဒုံမြို့က လူများသည် ဤအစေခံနှစ်ယောက်ကို မြင်သည့်အခါမှာ သူတို့ လာရခြင်းအကြောင်းကို မမေးခဲ့ကြသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ဖြန့်ဝေဖို့ သူတို့လာခဲ့ကြခြင်းလားဆိုသည်ကိုလည်း မမေးခဲ့ပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် သူတို့သည် ဆူပူသောင်းကျန်းသည့်လူအုပ်ကြီးဖြစ်လာပြီး ရှင်းပြချက်ကို မစောင့်ဘဲ ဤအစေခံနှစ်ယောက်ကို ခွေးရိုင်းများ သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းရက်စက်သည့် ဝံပုလွေများကဲ့သို့ အမိဖမ်းဖို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ၎င်းတို့ ဖြစ်ပျက်နေချိန်မှာ စောင့်ကြည့်နေခဲ့သလော။ ဤကဲ့သို့လူသားအပြုအမူ၊ ဤအရာမျိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘုရားသခင်က သူ့နှလုံးသားမှာ မည်သည်ကို စဉ်းစားနေခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်က ဤမြို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူက တွန့်ဆုတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် စောင့်နေခြင်းမျိုး လုပ်မှာမဟုတ်သကဲ့သို့ ဆက်ပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနေမှာလည်း မဟုတ်ပေ။ သူ၏နေ့ရက်က ရောက်လာပြီ။ ထို့ကြောင့် သူလုပ်လိုသည့် အလုပ်ကို ပြင်ဆင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၄-၂၅ မှာ ပြောထားသည်။ “ထိုအခါ ယေဟောဝါသည် သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရမြို့တို့အပေါ် မိုးကောင်းကင်ထဲက ယေဟောဝါထံမှ ကန့်နှင့် မီးမိုးကို ရွာချစေတော်မူ၏။ ထိုမြို့ကြီးများ၊ လွင်ပြင်များအားလုံး၊ မြို့ကြီးများ၌ နေထိုင်သောသူတို့နှင့် မြေပေါ်တွင် ပေါက်သောအပင်များကို ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။” ဤကျမ်းပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်က ဤမြို့ကို ဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးသည့် နည်းလမ်းကို လူတို့အား ပြောပြသည်။ ဘုရားသခင်က ဘာကို ဖျက်ဆီးသည်ဆိုသည်ကိုလည်း လူတို့အား ပြောပြသည်။ ပထမဆုံး ဘုရားသခင်က ဤမြို့ကို မီးနှင့် လောင်ကျွမ်းစေပုံ၊ မီး၏ ပမာဏက လူတို့အားလုံးနှင့် မြေပြင်မှာပေါက်သည့်အရာတွေအားလုံးကို ဖျက်ဆီးဖို့ လုံလောက်ပုံကို သမ္မာကျမ်းစာမှာ ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိုးကောင်းကင်မှ ကျလာသည့် မီးသည် မြို့ကို ဖျက်ဆီးရုံတင်မကဘဲ မြို့ထဲက လူအားလုံးနှင့် အသက်ရှင်သည့်အရာအားလုံးကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ အားလုံး ဘာတစ်ခုမျှ မကျန်ရစ်ပေ။ မြို့ကို ဖျက်ဆီးပြီးနောက်မှာ မြေပြင်မှာ အသက်ရှင်သည့်အရာ ဘာမျှ မရှိတော့ပေ။ သက်ရှိမရှိသကဲ့သို့ ရှိသည့်အရိပ်အယောင်လည်း မရှိပေ။ မြို့သည် စွန့်ပစ်နယ်မြေဖြစ်လာပြီး တိတ်ဆိတ်မှုနှင့် ပြည့်နေသည့် ဘာမှမရှိသည့် နေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤနေရာမှာ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် မကောင်းသည့်လုပ်ရပ်များ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပေ။ သတ်ဖြတ်ခြင်းများ သို့မဟုတ် သွေးစွန်းခြင်းများ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပေ။
ဘုရားသခင်က ဘာကြောင့် ဤမြို့ကို သေသေချာချာ မီးရှို့ပစ်ချင်ခဲ့သနည်း။ ဤနေရာမှာ သင်တို့ ဘာကိုတွေ့နိုင်သနည်း။ ဘုရားသခင်က သူကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာများဖြစ်သည့် လူသားမျိုးနွယ်နှင့် သဘာဝကို ဤကဲ့သို့ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကို ကြည့်နိုင်ပါ့မည်လော။ မိုးကောင်းကင်မှ ကျရောက်လာသည့် မီးမှတဆင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ဒေါသကို သင်သိမြင်နိုင်လျှင် သူ၏ဖျက်ဆီးမှု ဦးတည်ချက်မှတဆင့်၊ ဤမြို့ ဖျက်ဆီးခံရသည့် အဆင့်မှတဆင့် သူ၏ဒေါသအဆင့်ကို သိမြင်ဖို့ မခက်ခဲပေ။ ဘုရားသခင်က မြို့တစ်မြို့ကို စက်ဆုပ်ရွံရှာသည့်အခါ သူ၏ အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကို ဤမြို့ပေါ်မှာ သူကျရောက်စေမှာပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က မြို့တစ်မြို့ကို ရွံရှာစိတ်ပျက်သည့်အခါ သူသည် လူတို့အား သူ၏ဒေါသကို အသိပေးရင်း၊ သတိပေးချက်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ ထုတ်ပြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က မြို့တစ်မြို့ကို အဆုံးသတ်ဖို့၊ ဖျက်ဆီးဖို့ ဆုံးဖြတ်သည့်အခါ၌၊ ဆိုလိုသည်မှာ သူ၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ဘုန်းအာနုဘော်ကို ထိခိုက်ခံရလျှင် သူသည် နောက်ထပ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းများ သို့မဟုတ် သတိပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပေ။ ထိုအစား ထိုမြို့ကို တိုက်ရိုက် ဖျက်ဆီးမှာဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် သူလုပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်အပေါ် သောဒုံမြို့၏ ထပ်ခါထပ်ခါ ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ရန်လိုခြင်းများပြီးနောက်မှာ သူသည် မြို့ကို လုံးဝ အမြစ်ဖြတ် ဖျက်ဆီးသည်
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ် အကြမ်းဖျင်းနားလည်မှုရှိပြီးသည်နှင့် အပြစ်တရား၏မြို့အနေနှင့် ဘုရားသခင်မြင်ခဲ့သည့် သောဒုံမြို့ကို ငါတို့ ပြန်ပြီး အာရုံစိုက်၍ရပါသည်။ ဤမြို့၏ အနှစ်သာရကို နားလည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က ဘာကြောင့် ဤမြို့ကို ဖျက်ဆီးချင်သည်ဆိုသည်နှင့် ဘာကြောင့် သူ လုံးဝအကုန်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ခြင်းကို သိနိုင်သည်။ ဤအချက်မှတဆင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို သိလာနိုင်သည်။
လူသား၏ ရှုထောင့်အမြင်မှတဆင့်ကြည့်လျှင် သောဒုံမြို့သည် လူသား၏ ဆန္ဒနှင့် လူသား၏ မကောင်းမှုကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့် မြို့ဖြစ်သည်။ တေးဂီတတို့နှင့် တစ်ညပြီးတစ်ည ကခုန်ရင်း၊ ဆွဲဆောင်ရင်း၊ ဖမ်းစားရင်းနှင့်၊ ဤမြို့၏ ကြွယ်ဝခြင်းက လူသားကို စွဲမက်ခြင်းနှင့် ရူးသွပ်မှုများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူ၏ မကောင်းမှုက လူတို့၏နှလုံးသားကို တိုက်စားခဲ့ပြီး ဆုတ်ယုတ်ခြင်းဖြစ်အောင် သူတို့ကို ဖမ်းစားခဲ့သည်။ ယင်းသည် မသန့်ရှင်းသည့် ဝိညာဉ်များနှင့် ဆိုးယုတ်သည့် ဝိညာဉ်များ သွားလာရမ်းကားနေသည့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြစ်တရားများ၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများနှင့် ပြည့်လျှံနေခဲ့ပြီး သွေးနံ့များ၊ အပုပ်နံ့များနှင့် ပြည့်နေခဲ့သည်။ ယင်းသည် လူတို့ကို အလွန်ပင်ကြောက်ရွံ့စေသည့်၊ ပြန်ထွက်ပြေးစေသည့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဤမြို့၌ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ ငယ်ရွယ်သူ၊ အသက်ကြီးရင့်သူများ မည်သူကမျှ်မှန်ကန်သည့်လမ်းခရီးကို မရှာဖွေခဲ့ကြပေ။ မည်သူမျှ အလင်းကို မတောင့်တခဲ့ကြပေ။ သို့မဟုတ် အပြစ်မှ ဝေးရာသို့ လျှောက်သွားဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ကြပေ။ သူတို့သည် စာတန်၏ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုနှင့် လှည့်စားမှုတို့အောက်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ လူ့သဘာဝတို့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ သူတို့၏ အသိစိတ်တို့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လူသား၏ မူလ ဖြစ်တည်မှုပန်းတိုင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ခုခံဆန့်ကျင်သည့် မရေမတွက်နိုင်သည့် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော လုပ်ရပ်များကို သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏လမ်းညွှန်မှုကို ငြင်းဆန်ပြီး သူ့အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ဤလူများ၊ ဤမြို့နှင့် မြို့ထဲ၌ရှိသည့် သက်ရှိတိုင်းကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပျက်စီးခြင်းလမ်းသို့ သယ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ သူတို့၏ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသည့် လုပ်ရပ်များပင်ဖြစ်သည်။
သောဒုံမြို့မှလူတို့၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း အတိုင်းအတာကို ဖော်ပြသည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်တို့ကို ဤစာနှစ်ပိုဒ်မှာ မှတ်တမ်းမတင်ထားသော်လည်း မြို့ထဲကို ဤလူနှစ်ယောက်ရောက်ပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ အစေခံနှစ်ယောက်အပေါ် သူတို့၏ အပြုအမူများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရင်း၊ ရိုးရှင်းသည့် အမှန်တရားက သောဒုံ၏ လူတို့သည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည်၊ ဆိုးယုတ်သည်၊ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည်ဆိုသည့် အတိုင်းအတာများကို ဖွင့်ပြနိုင်သည်။ ဤအချက်နှင့် ဤမြို့မှ လူတို့၏ စရိုက်အမှန်နှင့် အနှစ်သာရကိုလည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်ကို သူတို့ လက်မခံခဲ့ရုံတင်မကဘဲ သူ၏ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကိုလည်း မကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် ဘုရားသခင်၏ ဒေါသကို အရေးမလုပ်ခဲ့ပေ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မျက်ကန်းတောတိုး ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သူမည်သည်ကိုလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မည်သို့လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ သူတို့၏ ကြမ်းတမ်းရက်စက်သည့် သဘောသဘာဝက ပိုပြင်းထန်လာပြီး ဘုရားသခင်ကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ သောဒုံမြို့၏လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှု၊ သူ၏ လာရောက်မှု၊ သူ၏ ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုနှင့် ၎င်းထက်ပို၍ သူ၏သတိပေးချက်ကိုပင် ရန်လိုခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု ဘာတစ်ခုမှ သူတို့မမြင်ခဲ့ကြပေ။ အန္တရာယ်ပြုပြီး ဝါးမျိုဖျက်ဆီး၍ရသည့် လူအားလုံးကို သူတို့ အန္တရာယ်ပြုပြီး ဝါးမျိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ အစေခံတို့ကိုလည်း သူတို့ ဤကဲ့သို့ပင် ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ သောဒုံမြို့၏လူတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဆိုးယုတ်သည့် လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုလုံးနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဘုရားသခင်၏ အစေခံတို့ကို အန္တရာယ်ပြုခြင်းက သေးသေးလေးပင် ရှိပါသေးသည်။ ထို့နောက် ဤနေရာမှာ သူတို့ဖွင့်ပြသည့် သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့် သဘောက ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲက ရေတစ်စက်ထက် အနည်းငယ်ပိုရုံပင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို မီးနှင့် ဖျက်ဆီးဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က မြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို အသုံးမပြုသကဲ့သို့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း၊ ငလျင်၊ ဆူနာမီ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းတို့ကိုလည်း အသုံးမပြုခဲ့ပေ။ ဤမြို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ဘုရားသခင်က မီးကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းသည် ဘာကိုညွှန်ပြသနည်း။ ၎င်းသည်မြို့၏ လုံးဝ ပျက်စီးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ မြို့သည် ကမ္ဘာပေါ်မှ၊ တည်ရှိနေရာမှ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဤနေရာမှာ “ဖျက်ဆီးခြင်း”က ဤမြို့၏ ပုံစံ၊ အဆောက်အဦး သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်ကိုသာ ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြို့ထဲမှာရှိသည့် လူတို့၏ ဝိညာဉ်များသည် လုံးဝ ဖယ်ရှားခံရပြီး ဆက်လက်မတည်ရှိတော့ဘူးဟု ရည်ညွှန်းသည်။ ရိုးရိုးပြောရလျှင် မြို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် လူအားလုံး၊ အဖြစ်အပျက်နှင့် အကြောင်းအရာအားလုံးက ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ သူတို့အတွက် နောက်ဘဝ သို့မဟုတ် ပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်း ရှိမှာမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖန်ဆင်းထားချက်များဖြစ်သည့် သူတို့ကို လူသားမျိုးနွယ်မှ ဖယ်ရှင်းခဲ့သည်။ “မီးကိုအသုံးပြုခြင်း”က အပြစ်တရားကို ရပ်တန့်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်တရား၏ အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအပြစ်တရားက ဖြစ်တည်မှု၊ ပျံ့နှံ့မှုတို့ ဆက်လက် တည်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပေ။ စာတန်၏ ဆိုးယုတ်မှုက သူ့ကိုပျိုးထောင်ပေးနေသည့် မြေကြီးနှင့် သူနေဖို့၊ အသက်ရှင်ဖို့ ပေးအပ်ခဲ့သည့် သင်္ချိုင်းလည်း ပျောက်ဆုံးသွားပြီဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် စာတန်ကြားက စစ်ပွဲ၌ ဘုရားသခင်၏ မီးကို အသုံးပြုခြင်းက စာတန်ကို အမှတ်အသားလုပ်ခဲ့သည့် သူ၏အနိုင်ယူမှု အမှတ်တံဆိပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သောဒုံမြို့၏ ပျက်စီးခြင်းသည် လူသားကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ဝါးမျိုခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ဖြစ်သည့် စာတန်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြီးကျယ်သည့် အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုယ်သူ မကောင်းမှုဒုစရိုက်ဆီသို့ စွန့်လွှတ်လိုက်သည့်အခါ လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အချိန်တစ်ခု၏ ရှက်စရာကောင်းသည့် သင်္ကေတတစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ စစ်မှန်သောဖွင့်ပြချက် မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မိုးကောင်းကင်မှ ဘုရားသခင် စေလွှတ်လိုက်သည့် မီးသည် သောဒုံမြို့ကို ပြာများအဖြစ် ပြောင်းပစ်လိုက်သည့်အခါမှာ “သောဒုံ”ဟုခေါ်သည့်မြို့သည် မြို့ထဲမှာ ရှိသည့်အရာရာတိုင်း ပျောက်ကွယ်သွားသကဲ့သို့ ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုမြို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဒေါသအားဖြင့် ဖျက်ဆီးခံရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ဘုန်းအာနုဘော်အောက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကြောင့် သောဒုံမြို့သည် သူ၏ထိုက်တန်သည့် အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကြောင့် ဤမြို့၏ ထိုက်တန်သည့်အဆုံးသတ်ကို ဤမြို့က ရရှိခဲ့ပါသည်။ သောဒုံမြို့၏ တည်ရှိမှု အဆုံးသတ်ရခြင်းက သူ၏ မကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဤမြို့နှင့် ဤမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့သည့် လူတိုင်း သို့မဟုတ် မြို့ထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့သည့် သက်ရှိမှန်သမျှကို ဘယ်တော့မှ မကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ ဆန္ဒကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်။ “ဤမြို့ကို ဘယ်တော့မှ မကြည့်ရှုတော့ဖို့ ဘုရားသခင်၏ ဆန္ဒ”သည် သူ၏ အမျက်ဒေါသဖြစ်ပြီး သူ၏ ဘုန်းအာနုဘော်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤမြို့၏ မတရားမှုနှင့် အပြစ်တရားတို့သည် သူ့ကို ဒေါသထွက်စေသည်၊ ဤမြို့အပေါ်မှာ ရွံရှာ မုန်းတီးစေပြီး ဤမြို့ကို သို့မဟုတ် ဤမြို့ထဲက လူမှန်သမျှနှင့် သက်ရှိတို့ကို လုံးဝ မမြင်ချင်တော့ခြင်းတို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဤမြို့ကို မီးလောင်ကျွမ်းစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြို့သည် မီးလောင်ပြီးသည်နှင့် ပြာတွေသာ ကျန်ရစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏အမြင်မှာ အမှန်တကယ် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဤမြို့နှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်ဉာဏ်များကိုပင်လျှင် ဖျက်ပစ်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ဤသည်မှာမိုးကောင်းကင်မှ စေလွှတ်လိုက်သည့် မီးသည် သောဒုံတစ်မြို့လုံးနှင့် မြို့ထဲမှာရှိသည့် မတရားမှုတို့နှင့် ပြည့်နေသည့် လူများ၊ မြို့ထဲမှာရှိသည့် အပြစ်တရားနှင့်စွန်းထင်းနေသည့် အရာအားလုံးတို့ကို ဖျက်ဆီးရုံတင်မကဘဲ ထို့ထက်ပိုပြီး ဤမီးသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဆိုးယုတ်မှုနှင့် ခုခံဆန့်ကျင်မှု၏ မှတ်ဉာဏ်များကိုလည်း ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ဤသည်မှာ ဤမြို့ကို လောင်ကျွမ်းစေရာ၌ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုသည် လွန်လွန်ကျူးကျူး ဖောက်ပြန်ပျက်စီးလာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က မည်သူဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သူတို့ ဘယ်နေရာမှလာသည်ဆိုခြင်းကို မသိကြပေ။ သင်က ဘုရားသခင်အကြောင်းကို ပြောလျှင် ဤလူတို့က တိုက်ခိုက်ကြမည်၊ အသရေဖျက်ကြမည်၊ ဘုရားကို စော်ကားပြောဆိုကြပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ အစေခံများလာရောက်ပြီး ဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်ကို ဖြန့်သည့်အခါမှာပင် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် ဤလူတို့သည် နောင်တရသည့် လက္ခဏာများကို မပြရုံတင်မကဘဲ သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့် အပြုအမူများကို မစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အစေခံတို့ကို အရှက်အကြောက်မရှိ အန္တရာယ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သူတို့ထုတ်ဖော် ဖွင့်ပြသည့်အရာများသည် ဘုရားသခင်အပေါ် အလွန်အကျူးရန်လိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သူတို့၏ သဘောသဘာဝနှင့် အနှစ်သာရများပင်ဖြစ်သည်။ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် ဤလူတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် ဆန့်ကျင်မှုသည် သူတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် စိတ်သဘောထားကို ဖွင့်ပြခြင်းထက် ပိုကြောင်းတွေ့ရသည်၊ သမ္မာတရားကို နားလည်မှု မရှိခြင်းမှလာသည့် အသရေဖျက်မှု သို့မဟုတ် လှောင်ပြောင်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုထက် ပိုသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ မိုက်မဲခြင်း သို့မဟုတ် ပညာမဲ့ခြင်းတို့က သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့် အပြုအမူကို ဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဤလူများသည် လှည့်စားခံထားရခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပေ။ အလိုက်မှားခြင်းကြောင့်လည်း သေချာပေါက် မဟုတ်ပေ။ သူတို့၏အပြုအမူသည် ဘုရားသခင်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အရှက်မရှိ မကြောက်မရွံ့ မုန်းတီးမှု၊ ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ဆူပူသောင်းကျန်းမှုအဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။ သံသယဖြစ်နေစရာမလိုပေ။ ဤကဲ့သို့ လူသားအပြုအမူမျိုးက ဘုရားသခင်ကို ဒေါသထွက်စေမှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထိပါးခြင်း မပြုရမည့် စိတ်သဘောထားဖြစ်သည့် သူ၏စိတ်သဘောကို ဒေါသထွက်စေမည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမျက်ဒေါသနှင့် သူ၏ဘုန်းအာနုဘော်ကို ဖွင့်ချပြီး တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ အမှန်တကယ် ဖွင့်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်တို့နှင့် ပြည့်လျှံနေသည့် မြို့ကို ရင်ဆိုင်ရပြီးနောက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ဤမြို့ကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းနှင့် ဖျက်ဆီးဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ ဤမြို့မှလူတို့ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ပြုလုပ်ဖို့၊ ဤနေရာက အပြစ်များကို ထပ်ဆင့်ပွားများခြင်းမှ ရပ်တန့်ဖို့ မြို့အတွင်းမှာရှိသည့် လူတို့နှင့် သူတို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို အပြည့်စုံဆုံးနည်းလမ်းနှင့် အမြစ်ဖြတ်ပစ်လိုခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့လုပ်ရန် အမြန်ဆုံးနှင့် အပြည့်စုံဆုံးနည်းလမ်းက လောင်မီးနှင့် လောင်ကျွမ်းစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သောဒုံမြို့ကလူတွေအပေါ် ဘုရားသခင်၏ သဘောထားသည် စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုခြင်းတို့ မဟုတ်ဘဲ သူသည် ဤလူတို့ကို အပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့၊ ရိုက်ချဖို့နှင့် လုံးဝ ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ သူ၏ အမျက်ဒေါသ၊ ဘုန်းအာနုဘော်နှင့် သြဇာအာဏာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်၏ သဘောထားသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျက်ဆီးခြင်းသာမကဘဲ ထာဝရ ချေဖျက်ခြင်းဖြစ်သည့် ဝိညာဉ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သူတို့အတွက် “ပျောက်ကွယ်”သွားဖို့ ဘုရားသခင်၏ ဆန္ဒ၏ အမှန်တကယ် ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် ဖုံးကွယ်ထားပြီး၊ လူသားက မသိနိုင်သော်လည်း ထိုအရာသည် ထိပါးစော်ကားမှုကို သည်းမခံပေ
မိုက်မဲခြင်းအားလုံးနှင့် အသိမဲ့သည့် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ဆက်ဆံမှုက သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံမှုအပေါ်မှာ အဓိက အခြေခံပါသည်။ တစ်ဖက်မှာတော့ သူ၏အမျက်ဒေါသသည် ကျယ်ပြန့်သည့် အချိန်နှင့် အကြောင်းအရာအများစုထဲမှာ ဖုံးကွယ်ထားပါသည်။ ၎င်းကို လူသားက မသိပေ။ အကျိုးရလဒ်အနေနှင့် ဘုရားသခင်က သူ၏အမျက်ဒေါသကို ပြခြင်းကို မြင်ရဖို့ လူသားအတွက် ခက်ခဲပြီး သူ၏အမျက်ဒေါသကို နားလည်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါသည်။ ဤကဲ့သို့ပင် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို အလေးမထားပေ။ လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ နောက်ဆုံးအမှုနှင့် လူသားကို သည်းခံခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ နောက်ဆုံး သနားညှာတာမှုနှင့် သူ၏ နောက်ဆုံး သတိပေးချက်တို့က လူသားတို့ဆီကို ရောက်သည့်အခါမှာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဤနည်းလမ်းကိုပင် အသုံးပြုဆဲဖြစ်ပြီး နောင်တရဖို့ မည်သည့်အားထုတ်မှုမှ မပြုလုပ်ဘူးဆိုလျှင်၊ သူတို့၏ နည်းလမ်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် သူ၏ သနားညှာတာမှုကို လက်ခံခြင်း မပြုလုပ်ဘူးဆိုလျှင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏သည်းခံမှုနှင့် စိတ်ရှည်မှုတို့ကို သူတို့အပေါ်မှာ ချပေးသနားမှာ မဟုတ်တော့ပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် ဘုရားသခင်က သူ၏ သနားညှာတာမှုကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်းသည် ဤအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြီးမှာ သူ၏အမျက်ဒေါသကိုသာ ပို့လွှတ်ပါလိမ့်မည်။ သူ၏ အမျက်ဒေါသကို မတူညီသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ လူတို့ကို အပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီး ဖျက်ဆီးဖို့ မတူညီသည့် နည်းလမ်းများကို သူအသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
သောဒုံမြို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ဘုရားသခင်၏ မီးကိုအသုံးပြုခြင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်တစ်စု သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို လုံးဝအမြစ်ဖြတ်သည့် သူ၏ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။ သောဒုံမြို့၏လူတို့ကို လောင်ကျွမ်းစေခြင်းက သူတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ခန္ဓာများထက်ပိုပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ဤမြို့ထဲက လူတို့သည် လူသားအတွက် မမြင်နိုင်သည့်လောကနှင့် ရုပ်ဝတ္ထုလောကနှစ်ခုစလုံးမှာ ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ သေချာစေရင်း သူတို့၏ ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံး၊ သူတို့၏စိတ်နှင့် သူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာတို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းက ဘုရားသခင်က သူ့အမျက်ဒေါသကို ထုတ်ဖော်သည့်နည်းနှင့် ဖော်ပြသည့်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ဖော်ပြခြင်း ပုံစံက ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ အနှစ်သာရ၏ ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ အနှစ်သာရကို အလိုအလျောက် ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်သည့်အခါမှာ သူသည် မည်သည့်သနားညှာတာမှု သို့မဟုတ် မည်သည့်စာနာသနားမှုမှ မဖော်ထုတ်တော့သကဲ့သို့ သူ၏သည်းခံခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုလည်း ထပ်မပြတော့ပေ။ သူ့ကို ဆက်ပြီး စိတ်ရှည်စေဖို့၊ သူ၏သနားညှာတာမှုကို ထပ်ပေးဖို့၊ သူ၏သည်းခံခြင်းကို နောက်တစ်ခါ ချပေးသနားဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် လူ၊ အရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက် မရှိပေ။ ဤအရာများအစား ဘုရားသခင်သည် ခဏလေးမျှ တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ သူ၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ဘုန်းအာနုဘော်ကို စေလွှတ်ပါလိမ့်မည်။ သူဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း လုပ်လိမ့်မည်။ သူသည် ဤအရာများကို သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနှင့်အညီ လျင်မြန်ပြီး ရှင်းလင်းသည့် ပုံစံနှင့် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ လူသားက ထိပါးခြင်းမပြုလုပ်ရသည့် သူ၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ဘုန်းအာနုဘော်ကို ဘုရားသခင်စေလွှတ်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ လက္ခဏာသွင်ပြင်တစ်ရပ်၏ ဖော်ပြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လူတို့သည် ဘုရားသခင်က လူသားအပေါ် ပူပင်မှုနှင့် စိုးရိမ်မှုအား ပြသခြင်းကို မြင်ရသည့်အခါမှာ သူတို့သည် သူ၏အမျက်ဒေါသကို သတိမပြုမိနိုင်ကြပေ။ သူ၏ ဘုန်းအာနုဘော်ကို မမြင်နိုင်ကြပေ။ သို့မဟုတ် သူ၏ ထိပါးစော်ကားမှုကို သည်းမခံခြင်းကို မခံစားနိုင်ကြပေ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားသည် သနားညှာတာခြင်း၊ သည်းခံခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သက်ပင်ဟုဆိုပြီး လူတို့ကို ယုံကြည်ဖို့ ဤအရာများက ဦးတည်သွားစေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က မြို့တစ်မြို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် လူသားမျိုးနွယ်တစ်စုကို ရွံ့မုန်းခြင်းကို တွေ့ရသည့်အခါ၌ လူသားကို ဖျက်ဆီးခြင်းမှာ သူ၏ အမျက်ဒေါသနှင့် သူ၏ဘုန်းအာနုဘော်တို့က လူတို့ကို သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း စိတ်သဘောထား၏ အခြားတစ်ဖက်ကို အနည်းအကျဉ်းမြင်စေပါသည်။ ဤသည်မှာ ထိပါးစော်ကားခြင်းကို ဘုရားသခင်၏ သည်းမခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိပါးစော်ကားခြင်းကို သည်းမခံသည့် ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားသည် မည်သည့်ဖန်ဆင်းခံ သတ္တဝါမဆို၏ တွေးမြင်ခြင်းထက် သာလွန်ပါသည်။ ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်သည့် သတ္တဝါများကြားမှာ မည်သူကမှ ၎င်းကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပေ။ တဖန် ၎င်းကို အယောင်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အတုခိုးခြင်းလည်း ပြုလုပ်၍ မရနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထား၏ ဤအချက်က လူသားမျိုးနွယ်က အများဆုံးသိသင့်သည့် အရာတစ်ခုပါ။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်သာလျှင် ဤကဲ့သို့စိတ်သဘောထားမျိုးရှိပါသည်။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်သာလျှင် ဤကဲ့သို့ စိတ်သဘောထားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဆိုးယုတ်ခြင်း၊ မှောင်မိုက်ခြင်း၊ ပုန်ကန်ခြင်းနှင့် လူသားမျိုးနွယ်ကို ဖျက်ဆီးပြီး ဝါးမျိုသည့် စာတန်၏ မကောင်းသည့် အပြုအမူများကို စက်ဆုပ်ရွံရှာသည့်အတွက်ကြောင့်၊ သူနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် အပြစ်၏လုပ်ရပ်အားလုံးကို စက်ဆုပ်ရွံရှာသည့်အတွက်ကြောင့်၊ သူ၏ သန့်ရှင်းပြီး ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိသည့် အနှစ်သာရတို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဤကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဖန်ဆင်းခံ သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်သည့် သတ္တဝါတို့က သူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆန့်ကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းများကို သူခံမည်မဟုတ်ဟုဆိုသည့် အရာက ထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူ တစ်ခါက သနားညှာတာမှုပြခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခဲ့သည့်သူပင်လျှင် သူ၏ စိတ်သဘောထားကို ရန်စပြီး သူ၏ စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့် သည်းခံခြင်းနိယာမကို ကျူးလွန်သည်နှင့် သူသည် သနားညှာတာခြင်း သို့မဟုတ် တွန့်ဆုတ်ခြင်း အနည်းငယ်မျှမရှိဘဲ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ထုတ်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ ထိပါးစော်ကားမှုကို သည်းမခံသည့် စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် တရားမျှတသည့် စွမ်းအား အားလုံးနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် အရာအားလုံးအတွက် အကွယ်အကာဖြစ်တယ်
ဘုရားသခင်၏ မိန့်ကြားချက်၊ အတွေးများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ဤဥပမာများကို နားလည်ခြင်းအားဖြင့် ထိပါးစော်ကား၍မရသည့် စိတ်သဘောထားဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို သင်နားလည်နိုင်သလော။ အဆုံးမှာတော့ လူသားက မည်မျှနားလည်နိုင်သည်ပင် ဖြစ်ပါစေ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်၏ အတုမရှိသည့် စိတ်သဘောထား၏ လက္ခဏာသွင်ပြင်တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိပါးစော်ကားခြင်းအပေါ် ဘုရားသခင်၏ သည်းမခံခြင်းက သူ၏ အထူးအနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသက သူ၏ အထူး စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအာနုဘော်က သူ၏အထူးအနှစ်သာရ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသနောက်က သဘောတရားသည် သူသာလျှင်ပိုင်ဆိုင်သည့် ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ဂုဏ်ဒြပ်တို့ကို ထုတ်ဖော်ပြသပါသည်။ ဤသည်မှာ အတုမရှိ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်၏ အနှစ်သာရ၏ သင်္ကေတလည်းဖြစ်ကြောင်းကို ပြောစရာမလိုပေ။ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင် ပင်ကို အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အချိန်ကုန်သည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲခြင်း လုံးဝမရှိသကဲ့သို့ တည်နေရာပြောင်းသည့်အချိန်တိုင်းမှာလည်း မပြောင်းပေ။ သူ၏ ပင်ကိုစိတ်သဘောထားသည် သူ၏ မရှိမဖြစ် အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ သူ့အလုပ်ကို မည်သူ့အပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ သူ၏ အနှစ်သာရသည် မပြောင်းလဲပေ။ သူ၏ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားလည်း မပြောင်းလဲပေ။ လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို ဒေါသထွက်စေသည့်အခါမှာ သူထုတ်လွှတ်သည့်အရာက သူ၏ ပင်ကိုစိတ်သဘောထားဖြစ်ပါသည်။ ဤအချိန်မှာ သူ၏ဒေါသနောက်က သဘောတရားက မပြောင်းလဲသကဲ့သို့ သူ၏အတုမရှိသည့် ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် အခြေအနေကလည်း မပြောင်းလဲပေ။ သူ၏အနှစ်သာရသည် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကြောင့် သို့မဟုတ် သူ့စိတ်သဘောထားသည် မတူညီသည့် သဘောတရားများ ထုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် သူစိတ်ဆိုးလာခြင်း မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း သူ့အပေါ် လူသား၏ ဆန့်ကျင်ခြင်းကြောင့် သူ့စိတ်သဘောထားကို ထိပါးစေပါသည်။ ဘုရားသခင်အပေါ် လူသား၏ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ရန်စခြင်းက ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင် ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ဂုဏ်ဒြပ်အတွက် အလွန်ပြင်းထန်သည့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမြင်မှာ လူသားက သူ့ကို စိန်ခေါ်သည့်အခါ လူသားသည် သူ့ကိုယှဉ်ပြိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ဒေါသကို စမ်းသပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူသားက ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အခါမှာ၊ လူသားက ဘုရားသခင်ကို ယှဉ်ပြိုင်သည့်အခါမှာ၊ အပြစ်တရားက သောင်းကျန်းသည့် အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ လူသားက ဘုရားသခင်၏ ဒေါသကို အဆက်မပြတ် စမ်းသပ်သည့်အခါမှာ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် သူ့အလိုအလျောက်ထုတ်ဖော်ပြီး ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏အမျက်ဒေါသအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ဖော်ပြချက်က မကောင်းသောစွမ်းအား အားလုံးသည် ပျောက်ကွယ်လိမ့်မည်ဆိုသည်ကို သင်္ကေတပြုနေပါသည်။ ရန်ပြုတတ်သည့် အစွမ်းအားလုံးသည် ဖျက်ဆီးခံရမည်ဆိုသည်ကို သင်္ကေတပြုနေပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ အတုမရှိမှု၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ အတုမရှိမှုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်နှင့် သန့်ရှင်းခြင်းကို စိန်ခေါ်ခံရသည့်အခါမှာ တရားမျှတသည့် စွမ်းအားများသည် ပိတ်ဆို့နေပြီး ၎င်းတို့ကို လူသားက မမြင်ရသည့်အခါ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမျက်ဒေါသကို စေလွှတ်ပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ယှဉ်ပြိုင်သည့်၊ သူ့ကိုဆန့်ကျင်ပြီး သူ့ကိုရင်ဆိုင်သည့် အစွမ်းအားလုံးသည် ဆိုးယုတ်၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီး တရားမမျှတသည့် အစွမ်းများပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စာတန်ဆီမှလာပြီး စာတန်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတသည့်အတွက်ကြောင့်၊ အလင်းဖြစ်ပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့စွာ သန်ရှင်းသည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုးယုတ်၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် စာတန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူ ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို သွန်ချခြင်းက သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ ဖော်ပြချက်၏ လက္ခဏာသွင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဒေါသသည် သူ၏ပစ်မှတ်အပေါ်မှာ မစဉ်းမစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းမပါဘဲလုပ်ခြင်းမရှိပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် ဘုရားသခင်က စိတ်တိုရာ၌ လျင်မြန်ခြင်း လုံးဝမရှိသကဲ့သို့ သူ၏အမျက်ဒေါသနှင့် သူ၏ ဘုန်းအာနုဘော်ကို အလောတကြီး ထုတ်ဖော်ခြင်း မပြုလုပ်ပေ။ ထပ်ဖြည့်စွက်ရလျှင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် အတော်ပင်ထိန်းချုပ်ပြီး ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်ရှိသည်။ လူသားက ချက်ချင်း ဒေါသထွက်လာခြင်းမျိုး သို့မဟုတ် သူ၏ ဒေါသကို ဖွင့်ချခြင်းမျိုးနှင့် လုံးဝ နှိုင်းယှဉ်၍မရပေ။ လူသားနှင့်ဘုရားသခင်ကြားက စကားပြောဆိုမှု များစွာကို သမ္မာကျမ်းစာမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ဤလူတို့ထဲက တစ်ချို့၏ စကားလုံးများက မလေးနက်ပေ၊ ပညာမဲ့ပြီး ကလေးဆန်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က သူတို့ကို ရိုက်မချသကဲ့သို့ သူတို့ကို ရှုတ်ချခြင်းမရှိပေ။ အထူးသဖြင့် ယောဘ၏ စမ်းသပ်မှုအချိန်ကာလအတွင်းမှာ ယောဘ၏ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နှင့် အခြားလူများက ယောဘကို ပြောခဲ့သည့် စကားများကို ယေဟောဝါဘုရားသခင်က ကြားပြီးနောက်မှာ သူတို့ကို သူက မည်သို့ ဆက်ဆံခဲ့သနည်း။ သူတို့ကို သူ ရှုတ်ချသလော။ သူတို့အပေါ် ဒေါသထွက်သွားသလော။ ဤကဲ့သို့ တစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ပေ။ ဤကဲ့သို့မလုပ်ဘဲ သူတို့အတွက် အသနားခံတောင်းလျှောက်ဖို့၊ သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ ယောဘကို သူပြောခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အမှားများကို ဗွေမယူခဲ့ပေ။ ဤဖြစ်ရပ်များအားလုံးသည် လက်ရှိအခြေအနေအရ ဖောက်ပြန်ပျက်စီး၍ ပညာမဲ့သည့် လူသားမျိုးနွယ်ကို ဘုရားသခင်က ဆက်ဆံသည့် အဓိက သဘောထားကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းက သူ၏စိတ်ခံစားချက်၏ ဖော်ပြချက် သို့မဟုတ် ဖွင့်ချခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသက လူများနားလည်သကဲ့သို့ ပြည့်ကျပ်ပြီး ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်က သူ၏ကိုယ်ပိုင် စိတ်ခံစားချက်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်၍၊ သို့မဟုတ် သူ၏ဒေါသက အထွတ်အထိပ်ရောက်နေပြီး ဖွင့်ချရတော့မှာဖြစ်သည့်အတွက် သူ၏အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် သူ၏ အမျက်ဒေါသသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ စစ်မှန်သည့် ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ သူ၏သန့်ရှင်းသည့် အနှစ်သာရကို သင်္ကေတနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အမျက်ဒေါသဖြစ်သည်။ ထိပါးစော်ကားမှုများကို သည်းမခံပေ။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသက အကြောင်းတရားများ သို့မဟုတ် စည်းမရှိခြင်းများကို မခွဲခြားဘူးဟု မဆိုပေ။ အကြောင်းတရားများကို မခွဲခြားဘဲ ဒေါသပေါက်ကွဲခြင်းက စည်းမရှိခြင်း၌ အထူးသီးသန့်မူပိုင်ရှိသည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသားတစ်ယောက်က အဆင့်အတန်းရှိသည့်အခါမှာ သူ့စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်နေခြင်းကို သူမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏မကျေနပ်မှုများကို ဖော်ပြပြီး သူ၏ စိတ်ခံစားချက်များကို ဖွင့်ချဖို့ ဖြစ်ရပ်များကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ခြင်းကို နှစ်သက်လိမ့်မည်။ သိသာသည့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သူသည် စိတ်တိုဒေါသထွက်လိမ့်မည်။ သူ၏အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ဖို့နှင့် သူ၏ အဆင့်အတန်းနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများသည် သာမန်လူတို့မှ ကွဲပြားသည်ဆိုသည်ကို အခြားလူများ သိစေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ပါသည်၊ အဆင့်အတန်းမရှိသည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူတို့ကတော့ မကြာခဏ စိတ်လွတ်လွတ်သွားပါလိမ့်မည်။ သူတို့၏ဒေါသသည် သူတို့၏တစ်ဦးချင်း အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်ခြင်းအားဖြင့် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အဆင့်အတန်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်သည် သူတို့၏ စိတ်ခံစားချက်များကို မကြာခဏ ဖွင့်ချပြီး သူတို့၏ မာနကြီးသည့်သဘောများကို ဖွင့်ပြပါလိမ့်မည်။ လူသားသည် အပြစ်တည်ရှိမှုကို ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက် သူ၏ စိတ်ခံစားချက်များကို ဖွင့်ချပြီး ဒေါသထွက်ပါလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ရပ်များသည် လူသားက သူ၏ မကျေနပ်မှုများကို ဖော်ပြသည့် နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်များသည် အညစ်အကြေးများနှင့်၊ မကောင်းကြံစည်ခြင်းများနှင့် လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုများနှင့်၊ လူသား၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုနှင့် မကောင်းမှုတို့နှင့်အပြင် အခြား မည်သည့်အရာမဆိုထက်ပိုပြီး လူသား၏ ခက်ထန်သည့် ရည်မှန်းချက်များနှင့် ဆန္ဒများနှင့် ပြည့်လျှံနေပါသည်။ တရားမျှတမှုသည် ဆိုးယုတ်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့်အခါ၌ လူသားသည် တရားမျှတမှု၏ ဖြစ်တည်မှုကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ စိတ်တိုဒေါသထွက်မှာမဟုတ်ပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် တရားမျှတခြင်း၏ စွမ်းအားကို ခြိမ်းခြောက်ခံရသည့်အခါ၊ ညှဉ်းဆဲခံရသည့်အခါ၊ တိုက်ခိုက်ခံရသည့်အခါ၊ လူသား၏ သဘောထားသည် လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် တွန့်ဆုတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မကောင်းမှု၏ စွမ်းအားများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါမှာ လူသား၏ သဘောထားသည် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ မျက်နှာချိုသွေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏ စိတ်ဖွင့်ချခြင်းသည် မကောင်းမှု၏ စွမ်းအားတို့အတွက် လွတ်လမ်း၊ ထကြွသောင်းကျန်းခြင်း၏ ဖော်ပြချက်တစ်ခုနှင့် ဇာတိပကတိဖြစ်သည့် လူသား၏ ရပ်တန့်၍မရနိုင်သည့် မကောင်းသည့် အပြုအမူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က သူ၏ အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်သည့်အခါမှာ မကောင်းသည့် စွမ်းအား အားလုံးသည် ရပ်သွားပါလိမ့်မည်။ လူသားကို အန္တရာယ်ပြုသည့် အပြစ်တရားအားလုံးသည် ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးသည့် ရန်မူသည့် စွမ်းအားများ အားလုံးသည် သိသာထင်ရှားလာမည်၊ ကွဲပြားလာပြီး ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံရမည်။ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် စာတန်၏ ကြံရာပါအားလုံးသည် အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီး အမြစ်ဖြတ်ပစ်ခံရမှာဖြစ်ပါသည်။ သူတို့၏နေရာမှာ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတို့မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရှေ့ဆက်ပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်သည် စီစဉ်ထားချက်နှင့်အညီ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆက်လက် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသည့်လူများသည် စာတန်၏ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် လှည့်စားခြင်းမှ လွတ်ကင်းပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်သူများသည် ငြိမ်သက်အေးချမ်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် အထောက်အပံ့ကို ခံစားကြရပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် မကောင်းသည့် အစွမ်းများ ထပ်ဆင့်ပွားများခြင်းနှင့် ထကြွသောင်းကျန်းခြင်းတို့မှ တားဆီးပေးသည့် အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တရားမျှတမှုနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများအားလုံး ဖြစ်တည်မှုနှင့် ပျံနှံ့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဖိနှိပ်ခံရခြင်းနှင့် ထိုအရာများကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ခံရခြင်းတို့မှ ထာဝရကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့် အကာအကွယ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သောဒုံမြို့ကို ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီးခြင်း၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ အနှစ်သာရကို သင်တို့ မြင်နိုင်သလော။ သူ၏ဒေါသအတွင်းမှာ အရောအနှော တစ်ခုခုပါသလော။ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသက သန့်စင်သလော။ လူသား၏ စကားကို အသုံးပြုရလျှင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသက ဘာမှ ရောမနေဘူးလား။ သူ၏အမျက်ဒေါသနောက်ကွယ်မှာ လှည့်ကွက်တစ်ခုခု ရှိသလော။ လျှို့ဝှက်ကြံစည်ခြင်းများ ရှိသလော။ ပြောပြ၍မရသည့် လျှို့ဝှက်ချက်များ ရှိသလော။ သင်တို့ကို လေးလေးနက်နက် တည်တည်ကြည်ကြည်နှင့် ပြောပြနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသမှာ သံသယဖြစ်နိုင်သည့် အပိုင်းမရှိပေ။ သူ၏ ဒေါသက သန့်စင်သည်။ ရောစပ်ခြင်းမရှိသည့် ဒေါသဖြစ်ပြီး အခြားရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် ပန်းတိုင် မပါဝင်ပေ သူ၏ဒေါသအတွက် အကြောင်းပြချက်က သန့်စင်သည်၊ အပြစ်မရှိပေ၊ ဝေဖန်၍ မရနိုင်ပေ။ သဘာဝအလျောက်ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် သူ၏ သန့်ရှင်းသည့် အနှစ်သာရကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ဖန်ဆင်းခံမျှ မပိုင်ဆိုင်သည့် အရာဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အတုမရှိ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖန်ဆင်းရှင်၏ သက်ဆိုင်သည့် အနှစ်သာရများနှင့် သူ၏ဖန်ဆင်းခံများကြားမှာ သိသာသည့် ကွာခြားမှုလည်း ဖြစ်သည်။
လူတစ်ယောက်က အခြားလူများရှေ့မှာ သို့မဟုတ် သူတို့နောက်ကွယ်မှာ စိတ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းမှာ မတူညီသည့် ရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိပါသည်။ သူတို့၏ သိက္ခာကို တည်ဆောက်နေခြင်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည် သို့မဟုတ် သူတို့၏ နာမည် သို့မဟုတ် အရှက်မရစေဖို့ ထိန်းသိမ်းရင်း သူတို့၏ ကိုယ်ကျိုးကို ကာကွယ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့လူတို့က သူတို့၏ဒေါသကို ကန့်သတ်ထိန်းသိမ်းကြပြီး တခြားလူတို့က ပိုပြီး မစဉ်းမစားဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်မျှထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ သူတို့ ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ ဒေါသပေါက်ကွဲကြသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် လူသား၏ ဒေါသသည် သူ၏ ပျက်စီးသည့် စိတ်သဘောထားမှ ဆင်းသက်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာပဲဖြစ်ပါစေ၊ ဇာတိနှင့် သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူသား၏ သဘာဝနှင့် အနှစ်သာရများထဲက ဘယ်အရာကမှ သမ္မာတရားနှင့် ထပ်တူညီခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် တရားမျှတခြင်း သို့မဟုတ် တရားမမျှတခြင်းတို့နှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဒေါသစိတ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို အတူတူ မပြောဆိုသင့်ပေ။ ခြွင်းချက်မရှိဘဲ စာတန်အားဖြင့် ဖျက်ဆီးခံရသည့် လူသား၏ အပြုအမူသည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်လိုသည့် ဆန္ဒနှင့် စတင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု၌ အခြေခံပါသည်။ ထို့ကြောင့် သီအိုရီမှာ မည်မျှပင် သင့်တော်သည်ဟု မြင်ရပါစေ လူသား၏ဒေါသကို ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသနှင့် အတူတူပြောဆို၍မရပေ။ ဘုရားသခင်က သူ၏ဒေါသကို စေလွှတ်လိုက်သည့်အခါမှာ မကောင်းသည့် စွမ်းအားများသည် တားဆီးခံရသည်။ မကောင်းသည့်အရာများသည် ဖျက်ဆီးခံရပြီး တရားမျှတခြင်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများက ဘုရားသခင်၏ ဂရုစိုက်မှု၊ အကာအကွယ်တို့ကို ရရှိခံစားရပြီး ရှေ့ဆက်ပြုလုပ်ဖို့ အခွင့်ပေးခံရပါသည်။ တရားမမျှတမှု၊ အဖျက်သဘောနှင့် မကောင်းသည့်အရာများသည် တရားမျှတမှုနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများ၏ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ ပြုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသ၏ ပန်းတိုင်သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အဆင့်အတန်းနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာကို ကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲ တရားမျှတမှု၊ အပြုသဘောဆောင်ခြင်း၊ လှပပြီးကောင်းမွန်သည့်အရာများကို ကာကွယ်ဖို့၊ လူသားမျိုးနွယ်၏ ပုံမှန် ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး နိယာမနှင့် အစီအစဉ်ကျမှုများကို ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ အရင်းအမြစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသသည် အလွန်သင့်လျော်သည်၊ သဘာဝဆန်ပြီး သူ၏စိတ်သဘောထား၏ မှန်ကန်သည့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ဒေါသနောက်မှာ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှ မရှိသကဲ့သို့ လှည့်စားခြင်း သို့မဟုတ် အကွက်ချစီစဉ်ခြင်းတို့ မရှိပေ။ ထို့အပြင် သူ၏ ဒေါသသည် ဆန္ဒ၊ ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ပေးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ဆိုးယုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လူသားမျိုးနွယ်တို့ အားလုံးအသုံးပြုကြသည့်အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ မပါဝင်ပေ။ ဘုရားသခင်က သူ၏ဒေါသကို မထုတ်လွှတ်ခင်မှာ သူသည် အကြောင်းအရာတိုင်း၏ အနှစ်သာရကို လုံးဝရှင်းလင်းစွာ၊ ပြည့်စုံစွာသိမြင်ထားပြီးဖြစ်ပြီး တိကျပြီးရှင်းလင်းသည့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကောက်ချက်ချမှုများ ဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်သည့် အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သူ၏သဘောထားလိုပဲ လုံးဝရှင်းလင်းပါသည်။ သူသည် စိတ်ရှုပ်ထွေးသူမဟုတ်ပေ။ သူသည် မစဉ်းမစားမလုပ်ပေ။ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်ပေ။ ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်သူမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့ထက်ပိုပြီး သူသည် စည်းကမ်းမရှိသူ မဟုတ်ပေ။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ လက်တွေ့ကျသည့် ရှုထောင့်ဖြစ်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်က သူ၏သာမန်တည်ရှိမှုကို ရရှိနေခြင်းက ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ လက်တွေ့ကျသည့် ဤရှုထောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ မပါဘူးဆိုလျှင် လူသားမျိုးနွယ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် နေထိုင်မှု အခြေအနေများထဲ ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ တရားမျှတသည့်၊ လှပပြီး ကောင်းမွန်သည့် အရာအားလုံးသည် ဖျက်ဆီးခံရပြီး ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသမပါဘူးဆိုလျှင် ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် သတ္တဝါတို့အတွက် ဖြစ်တည်မှု နိယာမများနှင့် စည်းမျဉ်းများသည် ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ် လုံးဝ ဖြိုဖျက်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။ လူသားကို ဖန်ဆင်းပြီးကတည်းက ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်၏ သာမန်ဖြစ်တည်မှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို အဆက်မပြတ် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားမှာ အမျက်ဒေါသနှင့် ဘုန်းအာနုဘော်တို့ ပါဝင်သည့်အတွက်ကြောင့် မကောင်းသည့်လူများအားလုံး၊ အရာဝတ္ထုများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏ သာမန်ဖြစ်တည်မှုကို ထိခိုက်ပြီး နှောင့်ယှက်သည့် အရာအားလုံးသည် သူ၏ အမျက်ဒေါသကြောင့် အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခံရခြင်း၊ ဖျက်ဆီးတို့ခံကြရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ထောင်စုနှစ်အချို့ တစ်လျှောက်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လူသားမျိုးနွယ်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ဆောင်မှု၌ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး စာတန်၏ ကြံရာပါများနှင့် လက်ပါးစေများကဲ့သို့ ပြုမူသည့် ညစ်ညမ်းပြီး ဆိုးယုတ်သည့် ဝိညာဉ်အားလုံးကို ရိုက်ချ ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားကို အဆက်မပြတ် အသုံးပြုနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားကို ကယ်တင်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် သူ၏အစီအစဉ်အတိုင်း အမြဲတမ်း ရှေ့ဆက်သွားနေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ တည်ရှိမှုကြောင့် လူသားများကြားက အဖြောင့်မတ်ဆုံးအရာသည် တစ်ခါမှ မဖျက်ဆီးခံရပေ။
ယခု ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ အနှစ်သာရကို သင်တို့ နားလည်ပြီဆိုသောကြောင့် စာတန်၏ ဆိုးယုတ်မှုကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမယ်ဆိုသည်ကို သင်တို့ ပို၍ကောင်းကောင်းပင် နားလည်မှာပင်ဖြစ်သည်။
စာတန်က ကြင်နာတတ်သည်၊ တရားမျှတပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သည်ဟု မြင်ရသော်လည်း အနှစ်သာရမှာ ရက်စက်ပြီး ဆိုးယုတ်ပါသည်
စာတန်သည် လူအများကို လှည့်စားခြင်းမှတစ်ဆင့် သူ၏ နာမည်ကြီးမှုကို ရရှိသည်။ စာတန်က ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ စံပြနှင့် ဦးစီးဦးဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ မကြာခဏ သက်သေထူပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း၏ အောင်လံတံခွန်အောက်မှာ စာတန်သည် လူသားကို အန္တရာယ်ပြုသည်။ သူတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ဝါးမျိုသည်။ လူသားကို ပိတ်ပင်ဖို့၊ လှည့်စားဖို့နှင့် သွေးဆောင်ဖို့ နည်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုသည်။ သူ၏ပန်းတိုင်က သူ၏မကောင်းသည့် အပြုအမူများကို လူသားက လက်ခံပြီး လိုက်လျှောက်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ သြဇာအာဏာနှင့် စိုးပိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်ရာမှာ လူသားကို သူနှင့် ပူးပေါင်းအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လူတစ်ယောက်က သူ၏မကောင်းကြံစည်မှုများ၊ အကွက်ချခြင်းများနှင့် ဆိုးညစ်သည့်ပုံစံများအပေါ် လိမ္မာပါးနပ်လာပြီး စာတန်၏ အရူးလုပ်ခြင်း၊ နင်းချေခံရခြင်းတို့ ဆက်ပြီးမခံချင်တော့သည့်အခါ သို့မဟုတ် စာတန်အတွက် ဆက်ပြီး ကျွန်မခံချင်တော့သည့်အခါ သို့မဟုတ် စာတန်နှင့်အတူ အပြစ်ဒဏ်ခံရပြီး အဖျက်ဆီးမခံချင်တော့သည့်အခါ၊ စာတန်က သူ၏ အရင် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သည့် ပုံစံများကို ပြောင်းလိုက်ပြီး သူ၏ စစ်မှန်သည့် ဆိုးယုတ်၊ ကြမ်းတမ်းရက်စက်၊ အကျည်းတန်ပြီး ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုတ်သည့် မျက်နှာကို ဖွင့်ပြဖို့အတွက် သူ၏ မျက်နှာဖုံးအတုကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပါတော့သည်။ သူ၏ ဆိုးယုတ်သည့် စွမ်းအားများကို ဆန့်ကျင်သည့်သူများနှင့် သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ ငြင်းဆန်သူများအားလုံးကို စာတန်သည် အလွန်ပင် အပြတ်ရှင်းပစ်ချင်ပါသည်။ ဤအချိန်မှာ စာတန်ကို ယုံကြည်၍ရသည်၊ လူကြီးလူကောင်း အသွင်အပြင်ရှိသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆ၍မရတော့ပေ။ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သိုးရေခြုံအောက်မှ သူ၏ တကယ့် ကြောက်စရာကောင်းပြီး မာရ်နတ်ဆန်သည့် အသွင်အပြင်များ ထုတ်ဖော်ခံရပါတော့သည်။ စာတန်၏ မကောင်းသည့် အကြံအစည်များသည် သိသာထင်ရှားလာသည်နှင့်၊ သူ၏ စစ်မှန်သည့် ပုံစံကို ဖော်ထုတ်ပြီးသည်နှင့် သူသည် စိတ်တိုဒေါသထွက်ပြီး သူ၏ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းမှုကို ဖော်ပြတော့သည်။ လူများကို အန္တရာယ်ပြုဖို့နှင့် ဝါးမျိုဖို့ သူ၏ ဆန္ဒသည် ပို၍ပင် ပြင်းထန်လာသည်။ ဤသည်မှာ လူသား၏ နှိုးထမှုကြောင့် အလွန်စိတ်ဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုနှင့်အလင်းကို တောင့်တဖို့နှင့် စာတန်၏ ထောင်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ သူတို့၏ ရည်မှန်းချက်ကြောင့် လူသားကို ပြင်းထန်သည့်အငြိုးဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ သူ၏ဒေါသသည် သူ၏ဆိုးယုတ်မှုကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်သည်။ သူ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် သဘောသဘာဝ၏ တကယ့်ထုတ်ဖော်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ စာတန်၏ အပြုအမူက သူ၏ဆိုးယုတ်သည့်သဘောကို ဖော်ပြသည်။ လူသားအပေါ်မှာ စာတန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဆိုးယုတ်သည့်အပြုအမူများ အားလုံးထဲမှာ သူ့နောက်ကိုလိုက်အောင် လှည့်ဖြားဖို့ သူ၏အစောပိုင်း အားထုတ်မှုမှ သူ၏ မကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်မှုများထဲသို့ လူသားကို ဆွဲသွင်းခြင်းဖြစ်သည့် လူသားကို အသုံးချခြင်းအထိ သူ၏တကယ့် အသွင်အပြင်က ပေါ်လွင်ပြီးနောက်မှာ လူသားအပေါ် စာတန်၏ အငြိုးထားခြင်းနှင့် လူသားသည် သူ့ကို သိမြင်လာပြီး စွန့်ပစ်လိုက်သည်။ စာတန်၏ ဆိုးယုတ်သည့်အနှစ်သာရကို ဖော်ထုတ်ဖို့ မလုပ်နိုင်သူ တစ်ယောက်မှမရှိပေ။ စာတန်သည် အပြုသဘောဆောင်သည့် အရာများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးဆိုသည့်အချက်ကို သက်သေပြဖို့ မလုပ်နိုင်သူ တစ်ယောက်မှမရှိပေ။ စာတန်သည် ဆိုးယုတ်သည့်အရာအားလုံး၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြဖို့ မလုပ်နိုင်သူ တစ်ယောက်မှ မရှိပေ။ သူ၏အပြုအမူတစ်ခုချင်းစီတိုင်းက သူ၏ဆိုးယုတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ သူ၏ဆိုးယုတ်သည့်အပြုအမူများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ တရားမျှတပြီး အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်၏ သာမန်ဖြစ်တည်မှုအတွက် နိယာမနှင့် အစီအစဉ်ကျမှုတို့ကို ဖျက်ဆီးပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရန်လိုကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသက ဖျက်ဆီးပစ်မည့် အရာများဖြစ်ကြပါသည်။ စာတန်က သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဒေါသရှိသော်လည်း သူ၏ဒေါသသည် သူ၏ဆိုးယုတ်သည့် သဘောကို ဖွင့်ချသည့်နည်းဖြစ်ပါသည်။ စာတန်က အလွန်စိတ်တိုလာပြီး ဒေါသထွက်လာသည့်အကြောင်းက ၎င်းတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ပြောပြ၍မရနိုင်သည့် မကောင်းသည့်အကြံအစည်များသည် ပေါ်လွင်သွားသည်။ သူ၏လှည့်ကွက်များသည် လွယ်လွယ်နှင့် မလွတ်နိုင်ပေ။ သူ၏ ကြမ်းတမ်းသည့် ရည်မှန်းချက်နှင့် ဘုရားသခင်ကို အစားထိုးဖို့နှင့် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ပြုမူဖို့ ဆန္ဒသည် ရိုက်ချခံရပြီး ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို ထိန်းချုပ်လိုသည့် သူ၏ပန်းတိုင်သည် ယခု ဘာမှဖြစ်မလာဘဲ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပေ။ စာတန်၏ လှည့်ကွက်များ အကောင်အထည်ပေါ်လာခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပြီး စာတန်၏ ဆိုးယုတ်မှုများ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် ထကြွသောင်းကျန်းခြင်းများကို ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ခြင်းက ဘုရားသခင်၏ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ထုတ်လွှတ်သည့် သူ၏အမျက်ဒေါသပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို မုန်းလည်းမုန်း၊ ကြောက်လည်း ကြောက်ရွံ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသ အသုံးချမှုတိုင်းသည် စာတန်၏ဆိုးညစ်သည့် အသွင်အပြင်အမှန်ကို ဖွင့်ပြရုံတင်မကဘဲ အလင်းအပေါ်မှာ စာတန်၏ ဆိုးယုတ်သည့် ဆန္ဒကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် စာတန်၏ ဒေါသ၏ အကြောင်းရင်းများသည် လုံးဝ ပေါ်လွင်လာပါသည်။ စာတန်၏ ဒေါသ ပေါက်ကွဲခြင်းက သူ၏မကောင်းကြံစည်မှုများ ပေါ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည့် သူ၏ဆိုးယုတ်သည့် သဘောကို အမှန်တကယ် ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှန်ပါသည်၊ စာတန်က အလွန်စိတ်ဆိုးသည့် အခါတိုင်းမှာ ဆိုးယုတ်သည့်အရာများ ပျက်စီးခြင်းကို ကြေညာပါသည်။ အပြုသဘောဆောင်သည့် အရာများအပေါ် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကြေညာပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ထိပါးစော်ကား၍မရသည့် အမျက်ဒေါသ၏ သဘောသဘာဝကို ကြေညာပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို သိဖို့ အတွေ့အကြုံနှင့် စိတ်ကူးထင်မြင်မှုအပေါ်မှာ အမှီမပြုရပါ
ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို သင်ကိုယ်တိုင် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် စစ်မှန်ခြင်းမရှိဘူးဟု သင်ပြောမည်လော။ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသနောက်ကွယ်မှာ လိမ်ညာမှုတစ်ခုရှိသည်၊ သူ့ဒေါသသည် မစစ်မှန်ဘူးဟု သင်ဆိုမည်လော။ သူ၏စိတ်သဘောထားသည် လုံးဝ သေသေချာချာဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘူးဟု ပြောပြီး ဘုရားသခင်ကို သင် အသေရေဖျက်မည်လော။ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီနှင့် ကြုံတွေ့ဆက်ဆံရသည့်အခါမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားသည် တခြားအချက်အလက်များ ကင်းလွတ်ကြောင်း၊ သန့်ရှင်းပြီး အမှားကင်းစင်ကြောင်း သင်သေချာစေရပါမည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဘုရားသခင်က ရိုက်ချခြင်း၊ အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ခြွင်းချက်မရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုစီတိုင်းက သူ၏ပင်ကို စိတ်သဘောထားနှင့် သူ၏အစီအစဉ်နှင့်အညီ တင်းကျပ်စွာ ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဤနေရာမှာ လူသားမျိုးနွယ်၏ အသိပညာ၊ ရိုးရာဓလေ့နှင့် အတွေးအခေါ်များ မပါဝင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုစီတိုင်းက သူ၏စိတ်သဘောထားနှင့် အနှစ်သာရတို့၏ ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီး ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အရာနှင့်မှ ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပေ။ လူသား၏ အယူအဆတို့မှာ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းတို့သာ အမှားကင်းစင်၊ စစ်မှန်ပြီး သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဒေါသနှင့် သူ၏အမျက်ဒေါသတို့သည်လည်း အလားတူပဲ စစ်မှန်သည်ဆိုသည်ကို မည်သူမှ မသိပေ။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်က အဘယ့်ကြောင့် ထိပါးစော်ကားမှုများကို သည်းမခံသနည်း၊ သို့မဟုတ် သူ၏ဒေါသသည် အဘယ့်ကြောင့် သိပ်ကြီးမားသနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းမျိုးကို မည်သူမှ သေချာမစဉ်းစားကြပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် တစ်ချို့က ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဒေါသစိတ်ကဲ့သို့ ဒေါသစိတ်နှင့် အမြင်မှားကြပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ဒေါသကို ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဒေါသနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု နားလည်လွဲကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသက လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် စိတ်သဘောထားကို သဘာဝအလျောက် ထုတ်ဖော်ခြင်းဟုပင် မှားယွင်းစွာ ယူဆကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းက မကျေနပ်ခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဒေါသကဲ့သို့ပင် မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသော လူတို့က စိတ်မချမ်းမြေ့သော အခြေအနေတစ်ရပ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ ဒေါသကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်ကြပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် သူ့စိတ်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြခြင်းဟုပင် ယုံကြည်ကြသည်။ ဤမိတ်သဟာယ ပြီးသည့်နောက်မှာ သင်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားအပေါ် အယူအဆလွဲမှားခြင်းများ၊ စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်များ သို့မဟုတ် အထင်အမြင်သက်သက်များ မရှိတော့ဖို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ၏ စကားများကို ကြားပြီးနောက်မှာ သင်တို့နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ အမျက်ဒေါသကို သင်တို့ အမှန်တကယ် သိမြင်ခြင်းရှိနိုင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသအပေါ် အရင်က မှားယွင်းစွာ နားလည်ထားခြင်းများကို ဘေးကိုဖယ်လိုက်နိုင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ အနှစ်သာရအပေါ် သင်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် မှားယွင်းသည့်ယုံကြည်မှုများနှင့် အမြင်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင်တို့နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထား၏ တိကျသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိနိုင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ် သံသယတစ်ခုမှ မရှိတော့ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ မှန်ကန်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ်မှာ လူသား၏ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုများ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးထင်မြင်မှုများနှင့် မသတ်မှတ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားသည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်ပိုင် မှန်ကန်သည့် အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ လူသားက ပုံသွင်းထားသည့် သို့မဟုတ် ရေးသားထားသည့် အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားသည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားဖြစ်ပြီး ဘယ်ဖန်ဆင်းခံနှင့်မှ ဆက်နွှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပေ။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်က ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပေ။ ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါများကြားမှာ သူသည် အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာလျှင်တောင် သူ၏ ပင်ကို စိတ်သဘောထားနှင့် အနှစ်သာရသည် ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းက အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သိခြင်းမဟုတ်ပေ။ တစ်ခုခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်း မဟုတ်သကဲ့သို့ လူတစ်ယောက်ကို နားလည်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပေ။ လူသားသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို သိဖို့ သို့မဟုတ် လူတစ်ယောက်ကို နားလည်ဖို့အတွက် သူ၏အယူအဆ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းကို ဘုရားသခင်ကို သိဖို့အတွက် အသုံးပြုလျှင် သင်သည် ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကို ဘယ်တော့မှ သိမှာမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းက အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် စဉ်းစားထင်မြင်ခြင်းအပေါ်မှာ အမှီမပြုပေ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ် စိတ်ကူးထင်မြင်မှုကို ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ သတ်မှတ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပေ။ သင်၏ အတွေ့အကြုံနှင့် စဉ်းစားတွေးတောမှုတို့က မည်မျှပင် ပေါများနေပါစေ၊ ၎င်းတို့က အကန့်အသတ်နှင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင်၏ စဉ်းစားတွေးတောခြင်းက အရှိတရားနှင့် ထပ်တူညီခြင်း မရှိပေ။ သမ္မာတရားနှင့် ထပ်တူညီဖို့ဆိုသည်မှာ ပို၍ပင် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ မှန်ကန်သည့် စိတ်သဘောထားနှင့် အနှစ်သာရတို့နှင့် သဟဇာတ မဖြစ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရကို နားလည်ဖို့ သင်၏ စဉ်းစားတွေးတောခြင်းကို အမှီပြုလျှင် သင်ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းက ဘုရားသခင်ဆီက လာသည့် အရာအားလုံးကို လက်ခံပါ။ ပြီးလျှင် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၎င်းကို တွေ့ကြုံခံစားပြီး နားလည်ပါ။ သင်၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်၊ သမ္မာတရားအပေါ် သင်၏ ငတ်မွတ် ဆာလောင်မှုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို အမှန်တကယ်နားလည်ပြီး သိဖို့ သင့်ကို ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပြသည့် နေ့တစ်နေ့ ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်နှင့် ငါတို့ ပြောဆိုခြင်း၏ ဤအပိုင်းကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ရအောင်။
လူသားမျိုးနွယ်သည် ရိုးသားစစ်မှန်သည့် နောင်တရခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံမှုကို ရယူနိုင်သည်
အောက်ပါအချက်များက သမ္မာကျမ်းစာပါ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည့် “နိနေဝေကို ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။
ယောနဝတ္ထု ၁:၁-၂ ယခု ယေဟောဝါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အမိတ္တဲ၏သား ယောနထံ ရောက်ရှိလာပြီး မိန့်ဆိုသည်မှာ၊ ထလော့၊ နိနေဝေမြို့ကြီးသို့ သွားလော့၊ ထိုမြို့၏ ဆိုးညစ်မှုသည် ငါ့ရှေ့သို့ တက်လာသည့်အတွက် ၎င်းကို ဆန့်ကျင်ဟစ်ကြော်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယောနဝတ္ထု ၄ သို့သော် ယင်းက ယောနကို အလွန့်အလွန်ဒေါသထွက်စေပြီး သူသည် အလွန်စိတ်ဆိုးလေသည်။ ထို့နောက် အို ယေဟောဝါ၊ ကိုယ်တော့်ကို အကျွန်ုပ် ဆုတောင်းပါ၏။ ဤသည်မှာ အကျွန်ုပ် ကိုယ်ပြည်၌ ရှိစဉ်အခါက ပြောခဲ့သော ကျွန်ုပ်၏စကားဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ ထိုကြောင့်၊ ရှေ့တော်မှောက်မှ တာရှုမြို့သို့ အကျွန်ုပ် ပြေးခဲ့ပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် ကျေးဇူးပြုတတ်သော ဘုရားဖြစ်၍ သနားကရုဏာရှိပြီး စိတ်ရှည်သောသဘော၊ ကြင်နာစိတ်ကြီးမားပြီး အပြစ်ဒဏ်ပေးမည့်အမှုကို နောင်တရတတ်သောသဘော ရှိတော်မူကြောင်းကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ထို့ကြောင့်၊ အို ယေဟောဝါ၊ ယခု အကျွန်ုပ် အသက်ရှင်ခြင်းထက် သေခြင်းက သာ၍ကောင်းသည့်အတွက် အကျွန်ုပ်အသက်ကို နုတ်ယူတော်မူပါဟု ယေဟောဝါထံ တောင်းလျှောက်လေ၏။ ယေဟောဝါကလည်း၊ သင်သည် စိတ်ဆိုး ကောင်းသလောဟု မေးတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ယောနသည် မြို့ပြင်သို့ထွက်၍ မြို့အရှေ့မျက်နှာဘက်၌ ထိုင်နေ၏၊ ထို့နောက် တဲမိုးကို လုပ်ပြီးလျှင်၊ မြို့ထဲ၌ အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ကို တွေ့မြင်ရသည်အထိ အမိုးအရိပ်တွင် ထိုင်၍နေ၏။ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်သည်လည်း ကြက်ဆူပင်တစ်ပင်ကို ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်၊ ယောန၏ သောကတို့ ပြေစေရန် သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ လွှမ်း၍ အရိပ်ဖြစ်စေတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ယောနသည် ကြက်ဆူပင်နှင့် သက်ဆိုင်၍ အလွန်အားရဝမ်းမြောက်၏။ နောက်တစ်နေ့ မနက်မိုးလင်းသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ပိုးကောင်ကို ပြင်ဆင်ပြီး ကြက်ဆူပင်ကို ကိုက်၍ ညှိုးနွမ်းစေ၏။ နေထွက်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ပြင်းထန်သော အရှေ့လေကို ပြင်ဆင်တော်မူပြီး ယောန၏ခေါင်းကို နေထိခိုက်သဖြင့် သူသည် အားနည်းမောပန်းပြီး မိမိကိုယ်ကို သေစေလိုသောစိတ်ရှိပြီး၊ ငါ့အသက်သေသည်က ရှင်သည်ထက် သာ၍ ကောင်းသည်ဟု ဆိုလေ၏။ ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် ကြက်ဆူပင်အတွက် စိတ်ဆိုး ကောင်းသလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ယောနက အကျွန်ုပ်သည် သေသည့်တိုင် စိတ်ဆိုးကောင်းပါသည်ဟု လျှောက်ဆို၏။ ယေဟောဝါကလည်း၊ သင်သည် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းလည်းမပြု၊ ကြီးထွားစေရန်လည်း မလုပ်ခဲ့ဘဲ၊ တစ်ညချင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး တစ်ညချင်းတွင် သေသော ကြက်ဆူပင်ကို သနားခြင်း ရှိပေ၏။ ငါသည် များစွာသော တိရစ္ဆာန်တို့ကိုမဆိုထားနှင့်၊ မိမိလက်ျာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်ကို မပိုင်းခြားနိုင်သောသူ တသိန်းနှစ်သောင်းထက်မက ရှိသည့် နိနေဝေမြို့ကြီးကို ငါချမ်းသာပေးသင့်သည် မဟုတ်လောဟု မိန့်တော်မူ၏။
နိနေဝေ၏ ဇာတ်လမ်း အနှစ်ချုပ်
“နိနေဝေကို ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း” ဇာတ်လမ်းသည် အတိုချုပ်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထား၏ အခြားတစ်ဖက်ကို အနည်းအကျဉ်း မြင်စေပါသည်။ ထိုအခြားတစ်ဖက်မှာ ဘာပါဝင်သနည်းဆိုသည်ကို တိတိကျကျ နားလည်ဖို့ ကျမ်းစာကို ပြန်သွားပြီး ဘုရားသခင်၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ပြန်ကြည့်ရမည်။
ဤဇာတ်လမ်း၏ အစကို ကြည့်ကြရအောင်။ “ယခု ယေဟောဝါ၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အမိတ္တဲ၏သား ယောနထံ ရောက်ရှိလာပြီး မိန့်ဆိုသည်မှာ၊ ထလော့၊ နိနေဝေမြို့ကြီးသို့ သွားလော့၊ ထိုမြို့၏ ဆိုးညစ်မှုသည် ငါ့ရှေ့သို့ တက်လာသည့်အတွက် ၎င်းကို ဆန့်ကျင်ဟစ်ကြော်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ယောနဝတ္ထု ၁:၁-၂) ကျမ်းစာက ဤအပိုဒ်မှာ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်က ယောနကို နိနေဝေမြို့ကို သွားဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်းကို သိရသည်။ သူက ယောနကို ဤမြို့ကို သွားဖို့ ဘာကြောင့် အမိန့်ပေးခဲ့သနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိပ်ရှင်းလင်းပါသည်။ ဤမြို့အတွင်းမှာရှိသည့် လူတို့၏ ဆိုးယုတ်မှုများသည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ရှေ့ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် သူဘာလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသည်ဆိုကြောင်းကို သူတို့ကို ကြွေးကြော်ဖို့ ယောနကို လွှတ်ခဲ့သည်။ ယောနက မည်သူနည်းဆိုသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ပြောပြထားခြင်း တစ်ခုမှမရှိသော်လည်း ၎င်းက ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင်တို့ ဤလူကို နားလည်ဖို့ မလိုအပ်ပေ။ ဘုရားသခင်က ယောနကို ဘာလုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုသည်နှင့် ဘာကြောင့် ဤအရာမျိုးကို လုပ်သနည်းဆိုသည်ကိုသာ သိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်များက နိနေဝေမြို့သားများဆီသို့ ရောက်သည်
ဒုတိယအပိုဒ်၊ ယောနဝတ္ထု၏ တတိယအခန်းကို ဆက်သွားကြရအောင်။ “ယောနသည် မြို့ထဲသို့ တစ်နေ့ခရီး စတင်ဝင်ရောက်ပြီး၊ အရက်လေးဆယ်ကျော်ပြီးနောက် နိနေဝေမြို့သည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟု ကြွေးကြော်လေ၏။” နိနေဝေမြို့သားများကိုပြောဖို့ ဘုရားသခင်က ယောနကို တိုက်ရိုက်ချပေးလိုက်သည့် စကားလုံးများ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့က ပင်ကိုအတိုင်းပဲ ယေဟောဝါက နိနေဝေမြို့သားများကို ပြောချင်သည့် စကားလုံးများလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့၏ ဆိုးယုတ်မှုများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့ကို ရောက်လာသည့်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဤမြို့မှာရှိသည့် လူတို့ကို စက်ဆုပ် မုန်းတီးပြီး ဤမြို့ကို သူဖျက်ဆီးချင်ကြောင်းကို ဤစကားလုံးများက လူတို့ကို ပြောပြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က ဤမြို့ကို မဖျက်ဆီးခင်မှာ သူသည် နိနေဝေမြို့သားများဆီကို ကြေညာချက်တစ်ခုလုပ်လိမ့်မည်။ သူတို့၏ ဆိုးယုတ်မှုများကို နောင်တရပြီး အသစ်စတင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုကို သူတို့ကို တစ်ပြိုင်နက် ပေးပါလိမ့်မည်။ ဤအခွင့်အရေးက ရက်လေးဆယ်ကြာမည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ဤမြို့ထဲကလူတို့က ရက်လေးဆယ်အတွင်းမှာ နောင်တရခြင်း၊ သူတို့၏အပြစ်များကို ဝန်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ရှေ့မှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်း မရှိလျှင် ဘုရားသခင်သည် သောဒုံမြို့ကို သူလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ ဤမြို့ကို ဖျက်ဆီးပစ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းက ယောဟောဝါဘုရားသခင်သည် နိနေဝေမြို့က လူတို့ကို ပြောချင်သည့်အရာများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းက ရိုးရှင်းသည့် ကြေညာချက်တစ်ခုမဟုတ်သည်မှာ ရှင်းပါသည်။ ၎င်းက ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ဒေါသကို အသိပေးရုံတင် မဟုတ်ဘဲ နိနေဝေမြို့သားများအပေါ် သူ၏ သဘောထားကိုလည်း အသိပေးထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဤရိုးရှင်းသည့် ကြေညာချက်က မြို့ထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေသည့် လူတို့အပေါ် လေးနက်သည့် သတိပေးချက်အဖြစ်လည်း ရည်ညွှန်းပါသည်။ သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့် လုပ်ရပ်များသည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ မုန်းတီးခြင်းကို ရရှိစေကြောင်းကို ဤသတိပေးချက်က သူတို့ကိုပြောပြပြီး သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့် လုပ်ရပ်များသည် မကြာခင်မှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အဆုံးစွန်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုလည်း ပြောပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိနေဝေမှာရှိသည့် လူတိုင်း၏ အသက်သည် အန္တရာယ်ကျရောက်လုဆဲဆဲမှာ ရှိပါသည်။
ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်အပေါ် နိနေဝေမြို့နှင့် သောဒုံမြို့၏ တုံ့ပြန်ချက်၌ သိသာသည့် ကွာခြားချက်
ချေမှုန်းခံရခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို ဆိုလိုသနည်း။ အရပ်သုံးစကားနှင့်ပြောရလျှင် ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သို့သော်လည်း မည်ကဲ့သို့မျိုးနည်း။ မြို့တစ်ခုလုံးကို ချေမှုန်းပစ်ဖို့ မည်သူက လုပ်နိုင်သနည်း။ လူသားအတွက်ကတော့ ဤလုပ်ရပ်မျိုးလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဤလူတို့က မိုက်မဲသူများမဟုတ်ပေ။ ဤကြေညာချက်ကို သူတို့ကြားလိုက်သည်နှင့် ဘာကိုဆိုလိုသည်ဆိုခြင်းကို သူတို့သိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်ဆီမှ လာသည်ဆိုသည်ကို သူတို့သိသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့အလုပ်ကိုသူ လုပ်ဆောင်တော့မည်ဆိုသည်ကို သူတို့သိသည်။ သူတို့၏ဆိုးယုတ်မှုသည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို အမျက်ထွက်စေပြီး သူတို့အပေါ်ကို သူစိတ်ဆိုးသည်၊ ထို့ကြောင့် မကြာခင်မှာ သူတို့သည် သူတို့၏မြို့နှင့်အတူ ဖျက်ဆီးခံရမည် ဆိုသည်ကို သူတို့သိသည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်ကို နားထောင်ပြီးနောက် ဤမြို့မှာရှိသည့်လူတို့က မည်သို့ပြုမူခဲ့သနည်း။ သူတို့၏ဘုရင်မှ သာမန်လူအထိ ဤလူတို့ မည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာမှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း “ထို့ကြောင့် နိနေဝေမြို့သားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး ၎င်းတို့တွင် အကြီးဆုံးသောသူမှ အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင် အစာရှောင်ခြင်းကိုကြေညာပြီး လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်ကြ၏။ နိနေဝေမင်းကြီးထံ သတင်းရောက်ရှိခဲ့သည့်အတွက် သူသည် ရာဇပလ္လင်မှဆင်းကာ သူ၏ ဝတ်လုံတော်ကို ချွတ်ပြီး လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်ကာ ပြာထဲ၌ ထိုင်လေ၏။ လူဖြစ်စေ၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်အုပ် သို့မဟုတ် သိုးနွားအုပ်ဖြစ်စေ မည်သည့်အရာကိုမျှ မမြည်းစေနှင့်။ အစာကို မစား၊ ရေကို မသောက်စေနှင့်။ လူနှင့် သားရဲတိရစ္ဆာန်တို့သည် လျှော်တေအဝတ်ကို ခြုံကြစေ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဘုရားသခင်ကို ဟစ်အော်ကြစေ။ အယောက်တိုင်း မိမိတို့၏ ဆိုးယုတ်သောလမ်းမှလည်းကောင်း၊ မိမိတို့လက်များထဲက အဓမ္မအမှုများမှလည်းကောင်း လှည့်ပြန်ကြစေ။...”
ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကြေညာချက်ကို ကြားပြီးနောက်မှာ နိနေဝေမြို့မှာရှိသည့်လူတို့သည် သောဒုံမြို့မှာရှိသည့်လူတို့နှင့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် သဘောထားကို ပြခဲ့သည်။ သောဒုံမြို့ကလူတို့သည် မကောင်းမှုများ ထပ်ကာထပ်ကာလုပ်ရင်း ဘုရားသခင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤစကားလုံးများကို ကြားပြီးနောက်မှာ နိနေဝေမြို့သားတို့သည် ဤကိစ္စကို လျစ်လျူမရှုခဲ့သကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ခြင်းလည်း မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့အတွက် ကြေညာခဲ့သည်။ “ယုံကြည်” ဆိုသည်မှာ ဤနေရာတွင် ဘာကိုရည်ညွှန်းသနည်း။ ဤစကားလုံးကိုယ်၌မှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လိုက်လျှောက်ခြင်းကိုပြသည်။ ဤစကားလုံးကိုရှင်းပြဖို့ နိနေဝေမြို့သားတို့၏ တကယ့်အပြုအမူကို အသုံးပြုလျှင် ဘုရားသခင်က သူပြောသကဲ့သို့ လုပ်နိုင်ပြီး သူပြောသကဲ့သို့ လုပ်လိမ့်မည်ဆိုသည်ကို သူတို့ယုံပြီး သူတို့သည် နောင်တရဖို့ ဆန္ဒရှိနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ နိနေဝေမြို့၏ လူတို့သည် ကျရောက်လုဆဲ ဘေးဒုက္ခကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြသလော။ သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ထည့်ပေးခြင်းက သူတို့၏ ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ နိနေဝေမြို့သားတို့၏ ယုံကြည်မှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုကို သက်သေပြဖို့ မည်သည်ကို အသုံးပြု၍ရမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက ပြောသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ “လူကြီးလူငယ်အပေါင်းတို့သည် အစာရှောင်ရာ အချိန်ကို ကြော်ငြာ၍ လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်ကြ၏။” ဆိုလိုသည်မှာ နိနေဝေမြို့သားတို့က အမှန်တကယ်ပင် ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဤယုံကြည်မှုမှတဆင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းရောက်ရှိလာပြီး အစာရှောင်ခြင်းနှင့် လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ သူတို့၏ နောင်တရခြင်းအစကို ပြသည့်ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ သောဒုံမြို့ကလူတို့နှင့် လုံးဝကွာခြားပြီး နိနေဝေမြို့သားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုလုပ်ရုံတင် မကဘဲ သူတို့၏အပြုအမူနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်တို့မှတစ်ဆင့် သူတို့၏နောင်တရခြင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသခဲ့ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ၎င်းက နိနေဝေ၏ သာမန်လူတို့သာလျှင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့၏ဘုရင်က ခြွင်းချက်ထဲမှာ မပါပေ။
နိနေဝေဘုရင်၏ နောင်တရခြင်းက ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ချီးမြှောက်ခြင်းကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်
နိနေဝေဘုရင်က ဤသတင်းကို ကြားသည့်အခါမှာ သူ့ပလ္လင်မှ သူထလိုက်သည်။ သူ၏ဝတ်စုံကို ချွတ်လိုက်သည်။ လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်ပြီး ပြာများထဲမှာ ထိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်မှာ သူသည် မြို့ထဲက မည်သူမှ ဘာကိုမှ မစားရ၊ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ၊ သိုးသငယ်များ၊ နွားများကိုလည်း အစာမကျွေး၊ ရေမတိုက်ရဟု ကြေညာခဲ့သည်။ လူသားနှင့် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တို့ အတူတူပင် လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်ကြဖို့ဖြစ်သည်။ လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို လေးနက်စွာ တောင်းပန်တိုးလျှိုးကြသည်။ လူတိုင်းသည် သူတို့၏မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ငြင်းပယ်ပြီး သူတို့လက်ထဲမှာရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်ပစ်ဖို့ကိုလည်း ဘုရင်ကြီးက ကြေညာခဲ့သည်။ ဤလုပ်ရပ်အစဉ်လိုက်ကို ကြည့်လျှင် နိနေဝေ၏ဘုရင်သည် သူ၏ ရိုးသားလေးနက်သည့် နောင်တရခြင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ သူ့ပလ္လင်ပေါ်မှ ထခြင်း၊ သူ၏ဘုရင်ဝတ်စုံကို ပစ်ခြင်း၊ လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်ပြီး ပြာများထဲမှာ ထိုင်နေခြင်းစသည့် သူပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်အစဉ်လိုက်တို့က နိနေဝေ၏ဘုရင်သည် သူ၏တော်ဝင်အဆင့်အတန်းကို ဘေးဖယ်ထားပြီး သာမန်လူများနှင့်အတူ လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သည်ဟု လူတို့ကို ပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နိနေဝေဘုရင်သည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကြေညာချက်ကိုကြားပြီးသည့်နောက်မှာ သူ့လက်မှာရှိသည့် သူ၏မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းများကို ဆက်လုပ်ဖို့ သူ၏ တော်ဝင်နေရာကို မယူထားခဲ့ပေ။ သူကိုင်စွဲထားသည့် သြဇာအာဏာကို ဘေးချထားပြီး ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ရှေ့မှာ နောင်တရခဲ့သည်။ ဤအချိန်ခဏ၌ နိနေဝေဘုရင်သည် ဘုရင်တစ်ပါးအနေနှင့် နောင်တရခြင်းမဟုတ်ပေ။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ သာမန် အရာဝတ္ထုတစ်ခုအနေနှင့် သူ့အပြစ်များကို ဝန်ခံပြီး နောင်တရဖို့ ဘုရားသခင်ရှေ့ကို လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တဖန် သူ့လိုပုံစံမျိုးနှင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်ရှေ့မှာ မိမိ၏အပြစ်များကို ဝန်ခံပြီး နောင်တရဖို့ တစ်မြို့လုံးကို သူပြောခဲ့သည်။ ထပ်ဖြည့်စွက်ရလျှင် သူ့မှာ မည်သို့လုပ်မည်ဆိုသည့် သီးသန့်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျမ်းစာမှာ မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ “လူဖြစ်စေ၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်အုပ် သို့မဟုတ် သိုးနွားအုပ်ဖြစ်စေ မည်သည့်အရာကိုမျှ မမြည်းစေနှင့်။ အစာကို မစား၊ ရေကို မသောက်စေနှင့်။ လူနှင့် သားရဲတိရစ္ဆာန်တို့သည် လျှော်တေအဝတ်ကို ခြုံကြစေ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဘုရားသခင်ကို ဟစ်အော်ကြစေ။ အယောက်တိုင်း မိမိတို့၏ ဆိုးယုတ်သောလမ်းမှလည်းကောင်း၊ မိမိတို့လက်များထဲက အဓမ္မအမှုများမှလည်းကောင်း လှည့်ပြန်ကြစေ။” ဤမြို့၏ အုပ်ချုပ်သူအနေနှင့် နိနေဝေဘုရင်သည် မြင့်မားသည့်အဆင့်အတန်းနှင့် အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး သူဆန္ဒရှိသည့်အရာ ဘယ်အရာမဆို လုပ်နိုင်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကြေညာချက်ကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါမှာ သူသည် ဤအကြောင်းအရာကို လျစ်လျူရှု၍ ရနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် သူ့အပြစ်ကိုသာလျှင် နောင်တရပြီး ဝန်ခံလိုက်၍ရသည်။ မြို့ထဲကလူတို့က နောင်တရဖို့ ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤအကြောင်းကိစ္စကို သူလုံးဝ လျစ်လျူရှု၍ ရနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း နိနေဝေဘုရင်က ဤကဲ့သို့ လုံးဝမလုပ်ခဲ့ပေ။ သူ့ပလ္လင်မှ ထရုံသာမကဘဲ လျှော်တေအဝတ်နှင့် ပြာများကို ဝတ်ဆင်ပြီး ယေဟောဝါဘုရားသခင်ရှေ့မှာ သူ၏အပြစ်များကို ဝန်ခံပြီး နောင်တရခဲ့သည်။ မြို့ထဲမှာရှိသည့်လူတို့နှင့် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအားလုံးကိုလည်း ဤကဲ့သို့လုပ်ဖို့ သူအမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ လူတို့ကို “ကြိုးစားပြီး ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းဖို့” ကိုတောင် သူအမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ရပ်အစဉ်လိုက်မှတစ်ဆင့် နိနေဝေဘုရင်သည် အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက်လုပ်သင့်သည်ကို အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏လုပ်ရပ်အစဉ်လိုက်သည် လူသားသမိုင်းမှာ မည်သည့်ဘုရင်အတွက်မဆို လုပ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပြီး မည်သူမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့သည့် အရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်များကို လူသားသမိုင်းမှာ တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လူသားမျိုးနွယ်၏ အောက်မေ့ခြင်းခံရဖို့၊ အတုခိုးခြင်း ခံရဖို့ ထိုက်တန်ပါသည်။ လူသား၏ အစအဦးကတည်းက ဘုရင်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ခုခံဆန့်ကျင်ရန် သူ၏လူများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ဆိုးယုတ်မှုအတွက် ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ရှာဖွေဖို့ ဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးဖို့၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရယူပြီး ဖြစ်လာတော့မည့် အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ မည်သူကမှ သူ့လူများကို ဦးမဆောင်ခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း နိနေဝေဘုရင်က သူ့လူများကို ဘုရားဆီသို့ ဦးဆောင်ဖို့၊ သူတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ထားခဲ့ပြီး သူတို့လက်မှာရှိသည့် ကြမ်းတမ်းရက်စက်မှုများကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တဖန် သူ၏ပလ္လင်ကိုလည်း ဘေးချထားနိုင်ခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အနေနှင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် ပြန်လှည့်ပြီး နောင်တရခဲ့သည်။ သူ၏အမျက်ဒေါသကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး မြို့မှာရှိသည့်လူများကို အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီး ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်သည်။ ဘုရင်ကြီး၏ အပြုအမူကို လူသားသမိုင်းမှာ ရှားပါးသည့် ဆန်းကြယ်မှုဟုပင် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် လူသားမျိုးနွယ်က ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ သူတို့၏အပြစ်များကို ဝန်ခံခြင်းနှင့် နောင်တရခြင်းတို့၏ စံပြတစ်ခုဟုပင် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
နိနေဝေမြို့သားတို့၏ နှလုံးသားအတွင်းမှာ ရိုးသားဖြူစင်သည့် နောင်တရခြင်းကို ဘုရားသခင် မြင်သည်
ဘုရားသခင်၏ ကြေညာချက်ကို နားထောင်ပြီးနောက်မှာ နိနေဝေဘုရင်နှင့် သူ့လူများသည် လုပ်ရပ်များ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ အပြုအမူနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ သဘောတရားက အဘယ်နည်း။ တစ်နည်းပြောရလျှင် သူတို့၏အပြုအမူအားလုံး၏ အနှစ်သာရက အဘယ်နည်း။ သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အရာကို သူတို့ ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်၏ အမြင်မှာ သူတို့သည် ရိုးသားဖြူစင်စွာ နောင်တရခဲ့သည်။ သူ့ရှေ့မှာ သူတို့၏အပြစ်ကို ဝန်ခံခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို လေးနက်စွာ တောင်းပန်တိုးလျှိုးခဲ့ခြင်းကြောင့်သာလျှင်မဟုတ်ဘဲ သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့် အပြုအမူများကိုလည်း စွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကြားပြီးနောက်မှာ သူတို့သည် အလွန်ပင်ကြောက်လန့်သွားပြီး သူပြောသကဲ့သို့ လုပ်လိမ့်မည်ဆိုသည်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြ၍ ဤအတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အစာရှောင်ခြင်း၊ လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ပြီး ပြာများထဲမှာထိုင်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏နည်းလမ်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့နှင့် ဆိုးယုတ်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ထိန်းသိမ်းဖို့၊ သူ၏ဒေါသကို ထိန်းဖို့ ယေဟောဝါဘုရားသခင်အတွက် ဆုတောင်းဖို့၊ သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် သူတို့အပေါ်ကျရောက်လာမည့် ကပ်ဘေးကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို့ ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးဖို့ သူတို့ဆန္ဒရှိခြင်းကို ဖော်ပြချင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏အပြုအမူအားလုံးကို စူးစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှတစ်ဆင့် သူတို့၏ အရင်က ဆိုးယုတ်သည့် အပြုအမူများကို ယေဟောဝါဘုရားသခင်က စက်ဆုပ်သည်ဆိုခြင်းကို သူတို့နားလည်ခဲ့သည်၊ သူမကြာခင် သူတို့ကို ဘာကြောင့်ဖျက်ဆီးမည်ဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကို သူတို့နားလည်ခဲ့ကြောင်းကို ငါတို့ မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များကြောင့် သူတို့အားလုံးသည် လုံးဝနောင်တရဖို့၊ သူတို့၏ မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ထားခဲ့ပြီး သူတို့လက်ထဲက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကြေညာချက်ကို သူတို့ သိလိုက်သည်နှင့် သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း၏ နှလုံးသားများထဲမှာ အကြောက်တရားကို ခံစားခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်မုန်းသည့် သူတို့၏ ဆိုးယုတ်သည့်အပြုအမူများကို ဆက်မလုပ်တော့သကဲ့သို့ ဤလုပ်ရပ်များကို ဆက်ပြီး မကျူးလွန်တော့ပေ။ ထပ်ဖြည့်စွက်ရလျှင် သူတို့၏ အရင်ကအပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ဖို့နှင့် သူတို့၏အရင်က လုပ်ဆောင်ချက်များအရ သူတို့ကို မဆက်ဆံဖို့ ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဆိုးယုတ်မှုများကို ဘယ်တော့မှ မထိတွေ့ဖို့နှင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ ပြုမူဖို့ ဆန္ဒရှိနေခဲ့ကြပါသည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို သူတို့နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ ဒေါသမထွက်စေလျှင်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ နောင်တရခြင်းက ရိုးသားဖြူစင်ပြီး ပြည့်စုံမှုရှိပါသည်။ သူတို၏နှလုံးသားအတွင်းထဲကလာပြီး ဟန်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်သကဲ့သို့ ယာယီလည်း မဟုတ်ပေ။
နိနေဝေမှာရှိသည့်လူများ၊ အမြင့်မားဆုံးဘုရင်မှ သူ့လူများအထိ၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို စိတ်ဆိုးသည်ဆိုသည်ကို သိရှိခဲ့သည်နှင့် သူတို့၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်း၊ သူတို့၏အပြုအမူအလုံးစုံနှင့် သူတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ရွေးချယ်မှုတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏အမြင်မှာ ရှင်းလင်းမြင်သာသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားသည် သူတို့၏ အပြုအမူအရ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်အခြေအနေက မည်သို့ရှိခဲ့သနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤမေးခွန်းကို သင့်အတွက် ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ ကျမ်းစာမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ “သူတို့သည် မိမိတို့၏ ဆိုးညစ်သောလမ်းမှ လှည့်ပြန်ပြီး ကျင့်သောအကျင့်များကို ဘုရားသခင်သည် မြင်လျှင်၊ ယခင် ပြုမည်ဟု မိန့်ဆိုခဲ့သော မကောင်းသည့်အမှုကို နောင်တရတော်မူပြီး ထိုသို့ မပြုပဲ နေတော်မူ၏။” ဘုရားသခင်က သူ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း သူ့စိတ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးခြင်း မရှိပေ။ သူသည် ရိုးရိုရှင်းရှင်းပင်၊ သူ၏ဒေါသကို ဖော်ပြခြင်းမှ သူ့ဒေါသကို စိတ်ငြိမ်စေလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်နိနေဝေမြို့အပေါ်ကို ကပ်ဘေး သယ်ဆောင်မလာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နိနေဝေမြို့သားများကို ကပ်ဘေးမှ အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဘာကြောင့်မြန်ဆန်သလဲဆိုသည်က ဘုရားသခင်က နိနေဝေမှာရှိသည့် လူတိုင်း၏ နှလုံးသားကို လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည့်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ ဘာကိုကိုင်စွဲထားသနည်းဆိုသည်ကို သူမြင်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့အပြစ်များအတွက် သူတို့၏ ဝန်ခံခြင်းနှင့် နောင်တရခြင်း၊ သူ့အပေါ် သူတို့၏ ရိုးသားသည့် ယုံကြည်ခြင်း၊ သူ၏စိတ်သဘောထားကို သူတို့၏ဆိုးယုတ်သည့်အပြုအမူများက မည်ကဲ့သို့စိတ်ဆိုးစေခဲ့သနည်းဆိုသည့် သူတို့၏နက်နဲသည့် အသိစိတ်ခံစားချက်၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်ဆီမှ ကျရောက်တော့မည့် အပြစ်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကြောက်ရွံ့မှုများဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သူတို့သည် ဤကပ်ဘေးကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့အတွက် သူတို့အပေါ် သူ၏ဒေါသကို အဆုံးသတ်ဖို့ သူ့ကို တောင်းပန်တိုးလျှိုးနေသည့် သူတို့၏နှလုံးသားအတွင်းထဲက ဆုတောင်းသံများကိုလည်း ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်က ကြားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ဤအချက်များအားလုံးကို ကြည့်ရှုလေ့လာသည့်အခါမှာ သူ၏ဒေါသများက နည်းနည်းချင်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည်။ အရင်က သူ၏ဒေါသက မည်မျှပင်ကြီးပါစေ ဤလူတို့၏ နှလုံးသားအတွင်းထဲက ရိုးသားဖြူစင်သည့် နောင်တရခြင်းကို သူမြင်သည့်အခါမှာ သူ့နှလုံးသားက ဤအရာအားဖြင့် ထိတွေ့ခံရပြီး သူတို့အပေါ်ကို ဘေးဒုက္ခသယ်လာဖို့ သူမလုပ်နိုင်တော့ဘဲ သူတို့အပေါ် ဒေါသထွက်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါသည်။ ထို့အပြင် သူတို့အပေါ်မှာ သူ၏သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံမှုကို ဆက်ထားခဲ့ပြီး သူတို့ကို ဆက်လက် လမ်းညွှန်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်အပေါ် သင့်ယုံကြည်ခြင်းက မှန်ကန်သည်ဆိုလျှင် သူ၏ဂရုစိုက်မှုကို မကြာခဏ သင်ရရှိလိမ့်မည်
နိနေဝေသားတို့အပေါ် ဘုရားသခင်က သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောင်းလဲခြင်းက တွန့်ဆုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြတ်သားခြင်းတို့ မပါဝင်ပေ။ အမှန်တကယ်တွင်မူ ဒေါသသက်သက်မှ သည်းခံခြင်းသက်သက်ကို ကူးပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရ၏ မှန်ကန်သည့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တို့၌ မည်သည့်အခါမျှ မပြတ်သားခြင်း သို့မဟုတ် တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပေ။ သူ့လုပ်ရပ်များနောက်က သဘောတရားများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များက အားလုံးရှင်းလင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသည်၊ သန့်စင်ပြီး အပြစ်အနာအဆာ ကင်းမဲ့သည်။ အတွင်း၌ လှည့်ကွက် သို့မဟုတ် အကြံအစည်တို့ ရောထွေးနေခြင်း လုံးဝမရှိပေ။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရမှာ မှောင်မိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုးယုတ်ခြင်းတို့ မပါဝင်ပေ။ နိနေဝေမြို့သားများ၏ ဆိုးယုတ်သည့်အပြုအမူများက သူ့ရှေ့ကို ရောက်လာသည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်က ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တုန်းက သူ၏ဒေါသသည် သူ၏အနှစ်သာရမှ ဆင်းသက်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဒေါသသည် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး သူ၏သည်းခံခြင်းကို နိနေဝေသားတို့အပေါ် နောက်တစ်ကြိမ် ချပေးသနားသည့်အခါ သူဖွင့်ပြသည့်အရာအားလုံးက သူ၏ကိုယ်ပိုင်အနှစ်သာရပဲ ဖြစ်နေပါသေးသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုံးက ဘုရားသခင်အပေါ် လူသား၏သဘောထား ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်ကာလတစ်ခုလုံးအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ထိပါးစော်ကား၍မရသည့် စိတ်သဘောထားက ပြောင်းလဲမသွားပေ။ ဘုရားသခင်၏ သည်းခံသည့် အနှစ်သာရက ပြောင်းလဲမသွားပေ။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းနှင့် သနားညှာတာခြင်း အနှစ်သာရက ပြောင်းလဲမသွားပေ။ လူတို့က ဆိုးယုတ်သည့် အပြုအမူများကို ကျူးလွန်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ထိပါးစော်ကားသည့်အခါမှာ သူ့ဒေါသကို သူတို့အပေါ် ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ လူတို့က အမှန်တကယ် နောင်တရသည့်အခါ ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားသည် ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပြီး သူ့ဒေါသသည် ရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ လူတို့က ဘုရားသခင်ကို ခေါင်းမာမာနှင့် ဆက်ပြီး ဆန့်ကျင်နေလျှင် သူ၏ဒေါသက ရပ်တန့်မည် မဟုတ်ပေ။ သူ၏အမျက်ဒေါသသည် သူတို့ဖျက်ဆီးခံရသည့်အထိ နည်းနည်းချင်း သူတို့အပေါ် ဖိအားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထား၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က အမျက်ဒေါသကို ဖော်ပြနေသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သနားညှာတာမှုနှင့် မေတ္တာကို ဖော်ပြသည်ဖြစ်စေ လူသား၏နှလုံးသားအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်အပေါ် သူ၏ အပြုအမူနှင့် သဘောထားသည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဖော်ပြသည့်အရာကို သတ်မှတ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏အမျက်ဒေါသကို လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာ အဆက်မပြတ် သက်ရောက်စေလျှင် ဤလူ၏နှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။ သူက တစ်ခါမျှ အမှန်တကယ် နောင်တရခြင်း မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ဦးညွတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်အပေါ် မှန်ကန်သည့် ယုံကြည်မှု ပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းကို တစ်ခါမျှ မရရှိပေ။ လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ ဂရုစိုက်မှုကို မကြာခဏလက်ခံရရှိပြီး သူ၏သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းကို မကြာခဏလက်ခံရရှိလျှင် ဤလူသည် သူ့နှလုံးသားမှာ ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်း ရှိပြီး သူ့နှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်ကို မဆန့်ကျင်ပေဆိုသည်မှာ ယုံမှားဖွယ်ရာမရှိပေ။ သူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ မကြာခဏ အမှန်တကယ် နောင်တရသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်းက ဤလူအပေါ်မှာ မကြာခဏ ဆင်းသက်သော်လည်း သူ၏အမျက်ဒေါသ ကျရောက်မည် မဟုတ်ပေ။
ဤအတိုချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များက ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားကို လူတို့မြင်ဖို့၊ သူ၏အနှစ်သာရ၏ စစ်မှန်ခြင်းကို မြင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသနှင့် သူ၏နှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းသည် အကြောင်းမရှိဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုသည်ကို မြင်ဖို့ အခွင့်ပေးပါသည်။ သူ၏ဒေါသနှင့် သူ၏သည်းခံခြင်းဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရ၏ ဤအချက်နှစ်ချက်ကြားမှာ တည်ရှိနေပုံရသည့် ကြီးမားသည့် ကွာဟမှု သို့မဟုတ် ကြီးမားသည့်ခြားနားမှု တည်ရှိနေပုံရသည်ဟု လူတို့ကို ယုံကြည်စေသည့် သူစိတ်ဆိုးသည့်အချိန်နှင့် သူ၏နှလုံးသား ပြောင်းလဲသည့်အချိန်မှာ ဘုရားသခင် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့် သိသာသည့် ကွဲပြားမှုရှိသော်လည်း၊ နိနေဝေမြို့သားတို့၏ နောင်တရခြင်းအပေါ် ဘုရားသခင်၏ သဘောထားသည် ဘုရားသခင်၏ မှန်ကန်သည့် စိတ်သဘောထား၏ အခြားတစ်ဖက်ကို လူတို့ကို မြင်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကို နောက်တစ်ကြိမ်မြင်စေဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရ အမှန်တကယ် ထုတ်ဖော်ခြင်းကို မြင်စေဖို့ လူသားမျိုးနွယ်ကို အမှန်တကယ် အခွင့်ပေးပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်သည် ဘုရားသခင်၏သနားညှာတာမှုနှင့် ချစ်ခင်ကြင်နာမှုသည် ဒဏ္ဍာရီများမဟုတ်သကဲ့သို့ လုပ်ကြံဖန်တီးထားခြင်းများ မဟုတ်ဘူးဆိုသည်ကို အသိအမှတ်ပြုရုံပဲရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ ထိုအချိန်၌ ဘုရားသခင်၏ ခံစားချက်က မှန်ကန်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းက မှန်ကန်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သူ၏သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံမှုကို အမှန်တကယ်ပင် နောက်တစ်ကြိမ် ချပေးသနားခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သူ၏အမျက်ဒေါသကြားမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမကိုက်ညီခြင်း ရှိသလော။ မည်သို့ရှိပါ့မည်နည်း။ ဤသည်မှာ အထူးသဖြင့် ထိုအချိန်၌ ဘုရားသခင်၏ သည်းခံခြင်းက အကြောင်းရင်း ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းရင်းက မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ပြထားသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ “လူတိုင်းက သူ၏မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ထားခဲ့သည်” ဆိုခြင်းနှင့် “သူတို့လက်ထဲက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်ပစ်သည်” ဆိုခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ဤ”မကောင်းသည့် နည်းလမ်း”က မကောင်းသည့်လုပ်ရပ်တစ်ချို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပေ။ လူတို့၏ အပြုအမူနောက်က မကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ “သူ၏ မကောင်းသည့်နည်းလမ်းကို ထားခဲ့ခြင်း” ဆိုသည်မှာ ထိုလူတို့သည် ဤလုပ်ရပ်တို့ကို ဘယ်တော့မှ နောက်ထပ် မကျူးလွန်တော့ဘူးဟု ဆိုလိုပါသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် သူတို့သည် ဤမကောင်းသည့်နည်းလမ်းကို နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မပြုလုပ်တော့ပေ။ သူတို့လုပ်ရပ်များ၏ နည်းလမ်း၊ အရင်းအမြစ်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် သဘောတရားများသည် အားလုံးပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူတို့နှလုံးသားမှာ သာယာကြည်နူးမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိဖို့ ဤနည်းလမ်းများနှင့် သဘောတရားများကို ဘယ်တော့မှ အသုံးပြုမှာမဟုတ်တော့ပေ။ “သူတို့လက်ထဲမှာရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်လွှတ်သည်” မှာရှိသည့် “စွန့်လွှတ်”ဆိုခြင်းက လွတ်ချဖို့ သို့မဟုတ် ဘေးဖယ်လိုက်ဖို့၊ အတိတ်ကို လုံးဝ ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီး ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မကြည့်ဖို့ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နိနေဝေ၏လူတို့သည် သူတို့လက်ထဲက ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည့်အခါမှာ ဤအချက်သည် သူတို့၏ မှန်ကန်သည့် နောင်တကို သက်သေပြသကဲ့သို့ ကိုယ်စားလည်းပြုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့၏ အပြင်ပန်းနှင့် သူတို့၏နှလုံးသားကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရှုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် နိနေဝေမြို့သားတို့၏ နှလုံးသားမှာရှိသည့် မှန်ကန်သည့် နောင်တကို မေးခွန်းမမေးဘဲနှင့် လေ့လာကြည့်ရှုပြီး သူတို့သည် သူတို့၏ မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ထားခဲ့ပြီး သူတို့၏လက်ထဲမှာရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ကြည့်ရှုသိမြင်ပြီးသည့်အခါ သူနှလုံးသားကို သူပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤလူတို့၏ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူနှင့် အကြောင်းအရာများကို လုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် သူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိသည့် မှန်ကန်သည့် ဝန်ခံခြင်းနှင့် နောင်တတို့သည် ဘုရားသခင်အား သူ့နှလုံးသားပြောင်းလဲစေဖို့၊ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြောင်းလဲစေဖို့၊ သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းပြီး သူတို့ကို ပြစ်ဒဏ်မခတ်ဖို့ သို့မဟုတ် မဖျက်ဆီးဖို့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိနေဝေမြို့၏ လူတို့သည် မတူညီသည့် အဆုံးသတ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသက်ကို ပြန်လည် ရွေးနုတ်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်က သူ၏ အမျက်ဒေါသကို ရုတ်သိမ်းခဲ့စေသည့် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံမှုကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
နိနေဝေမြို့သားတို့အပေါ် ဘုရားသခင်က မည်မျှပဲ စိတ်ဆိုးခဲ့ပါစေ သူတို့သည် အစာရှောင်ခြင်းကို ကြေညာခဲ့ပြီး လျှော်တေအဝတ်နှင့် ပြာများကို ဝတ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် သူ့နှလုံးသားသည် တဖြည်းဖြည်းပျော့ပြောင်းလာပြီး သူ့နှလုံးသားကို သူ စတင်ပြောင်းခဲ့ပါသည်။ သူတို့၏မြို့ကို သူဖျက်ဆီးမည်ဆိုသည်ကို သူတို့ကို ကြေညာလိုက်သည့်အခါမှာ၊ သူတို၏အပြစ်များအတွက် သူတို့၏ဝန်ခံခြင်းနှင့် နောင်တရခြင်းတို့ မတိုင်ခင်အချိန်မှာ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို စိတ်ဆိုးနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် နောင်တရသည့် လုပ်ရပ်အစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့် နိနေဝေ၏ လူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်၏ ဒေါသသည် သူတို့အတွက် သနားညှာတာခြင်းနှင့် သည်းခံခြင်းအဖြစ် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတည်းမှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထား၏ ဤအချက်နှစ်ခု တစ်ချိန်ထဲမှာ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မကိုက်ညီမှု တစ်ခုမှမရှိပေ။ ဤမကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းကို ဘယ်လိုနားလည်ပြီး သိရှိနိုင်မည်နည်း။ နိနေဝေမြို့သားတို့က နောင်တရခဲ့သည့်အခါမှာ ဘုရားသခင်သည် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည့် ဤအနှစ်သာရနှစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရ၏ စစ်မှန်ခြင်းနှင့် ထိပါးစော်ကား၍မရနိုင်ခြင်းကို လူတို့ကို မြင်စေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က လူတို့ကို အောက်ပါအကြောင်းများကိုပြောဖို့ သူ၏ သဘောထားကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က လူတို့ကို သည်းမခံခြင်း၊ သို့မဟုတ် သူတို့အပေါ်မှာ သနားညှာတာမှု မပြချင်တာမျိုး မဟုတ်ပေ။ လူတို့က ဘုရားသခင်အပေါ် အမှန်တကယ်နောင်တရခြင်းက ရှားပါးနေခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့က သူတို့၏မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို အမှန်တကယ် ထားခဲ့ပြီး သူတို့လက်ထဲမှာရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်ပစ်ခြင်းက ရှားပါးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ဘုရားသခင်က လူသားကို ဒေါသထွက်သည့်အခါမှာ လူသားသည် အမှန်တကယ် နောင်တရနိုင်ဖို့ သူမျှော်လင့်သည်။ လူသား၏ စစ်မှန်သည့် နောင်တကို မြင်ရဖို့ သူမျှော်လင့်သည်။ ဤကဲ့သို့ဆိုရလျှင် သူသည် လူသားအပေါ်ကို သူ၏သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းကို သဘောထားကြီးစွာနှင့် ဆက်လက် ချပေးသနားမှာဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူသား၏ မကောင်းသည့် အပြုအမူက ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ဖြစ်ပွားစေပြီး ဘုရားသခင်ကို နားထောင်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ အမှန်တကယ် နောင်တရသူများအပေါ်၊ သူတို့၏မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ထားခဲ့ပြီး သူတို့လက်ထဲမှာရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်လွှတ်နိုင်သည့်သူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းတို့ကို ချပေးသနားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သဘောထားသည် နိနေဝေမြို့သားများအပေါ် သူ၏ ဆက်ဆံမှုမှာ အလွန်ပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းတို့ကို ရရှိဖို့ လုံးဝ မခက်ခဲပေ။ သူသည် စစ်မှန်သည့် နောင်တကို တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့က သူတို့၏ မကောင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ထားခဲ့ပြီး သူတို့လက်ထဲမှာရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို စွန့်ပစ်လျှင် ဘုရားသခင်က သူ့နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပြီး သူတို့အပေါ် သူ့သဘောထားကို ပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်က နိနေဝေမြို့သားများအတွက် သူ့နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲခဲ့သည့်အခါမှာ သူ၏သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းသည် လှည့်စားမှုတစ်ခုလော။ မည်သို့ ဟုတ်နိုင်ပါ့မည်နည်း။ သို့ဆိုလျှင် အကြောင်းအရာ တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထား၏ ဤလက္ခဏာသွင်ပြင်နှစ်ရပ်ကြား ပြောင်းလဲခြင်းက သင့်အား ဘာကို မြင်စေသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားသည် အလုံးစုံဖြစ်ပါသည်။ ခွဲထွက်ခြင်း လုံးဝ မရှိပေ။ လူတို့အပေါ်မှာ ဒေါသ သို့မဟုတ် သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းကို သူပြသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့အားလုံးက သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထား၏ ဖော်ပြချက်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားသည် စစ်မှန်ပြီး ထင်ရှားပါသည်။ အကြောင်းအရာများ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး သူ၏အတွေးများနှင့် သဘောထားများကို ပြောင်းလဲပါသည်။ နိနေဝေမြို့သားတို့အပေါ် သူ၏သဘောထား ပြောင်းလဲခြင်းက သူသည် သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနှင့် စိတ်ကူးများရှိကြောင်းကို လူသားမျိုးနွယ်ကိုပြပါသည်။ သူက စက်ရုပ် သို့မဟုတ် မြေရုပ်တုလည်း မဟုတ်ဘဲ အသက်ရှင်သည့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်။ နိနေဝေမြို့သားတို့ကို သူတို့၏ သဘောထားများအရ သူတို့၏ အတိတ်များကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သကဲ့သို့ သူတို့ကို သူ စိတ်ဆိုးနိုင်ပါသည်။ နိနေဝေမြို့သားတို့အပေါ် ကံဆိုးခြင်းများ သယ်ဆောင်လာဖို့ သူဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး သူတို့၏ နောင်တကြောင့် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သူပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ လူတို့က ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားကို သိရန်ကြိုးစားဖို့အတွက် ပုံသေနည်းများသုံးရခြင်းကို နှစ်သက်သကဲ့သို့ စည်းမျဉ်းများကို စက်ယန္တရားဆန်ဆန် အသုံးချဖို့ ပိုနှစ်သက်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဘောင်ခတ်၍ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖို့ ထိုသို့သော စည်းမျဉ်းများကို အသုံးပြုဖို့ ပိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏အတွေးနယ်ပယ်အရ ဘုရားသခင်က စဉ်းစားခြင်းမပြုလုပ်သကဲ့သို့ အခြေအမြစ်ခိုင်လုံသည့် စိတ်ကူးများလည်း မရှိပေ။ အမှန်စင်စစ်မှာမူ ဘုရားသခင်၏ အတွေးများသည် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များထဲက ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ အစဉ်တစိုက် ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ဤအတွေးများက ပြောင်းလဲနေစဉ်မှာ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရ၏ မတူညီသည့် လက္ခဏာသွင်ပြင်များက ထုတ်ဖော်လာပါလိမ့်မည်။ ဤပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်အချိန်ကာလအတွင်း ဘုရားသခင်က သူ့နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲသည့်အချိန်ခဏမှာ သူသည် လူသားမျိုးနွယ်ကို သူ့အသက်၏ဖြစ်တည်မှု အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြပြီး သူ၏ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားက စစ်မှန်ပြီး ထင်ရှားသည်ဆိုသည်ကို ထုတ်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် သူ၏သည်းခံခြင်းနှင့် သူ၏ ချစ်ခင်ကြင်နာမှု၊ သူ၏ သနားညှာတာမှု၊ သူ့အမျက်ဒေါသ ဖြစ်တည်မှုတို့၏ သမ္မာတရားကို လူသားမျိုးနွယ်ကို သက်သေပြဖို့ သူ၏ ကိုယ်ပိုင် စစ်မှန်သည့် ထုတ်ဖော်ခြင်းများကို ဘုရားသခင်က အသုံးပြုပါသည်။ အကြောင်းအရာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအရ သူ၏အနှစ်သာရကို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာမဆို ထုတ်ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ခြင်္သေ့၏ အမျက်ဒေါသ၊ မိခင်တစ်ယောက်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းတို့ကို သူပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို မည်သူ့ကိုမှ မေးခွန်းထုတ်ခြင်း၊ ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပုံစံပျက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်မပြုပေ။ အရာဝတ္ထုများအားလုံးနှင့် အကြောင်းအရာများ အားလုံးထဲမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုသည် အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ သူသည် ဤသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို သဘောသဘာဝ၏ နေရာတိုင်းမှာ ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြပြီး အချိန်တိုင်းမှာ ထင်ရှားစွာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားသည် အချိန် သို့မဟုတ် နေရာနှင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပေ။ သို့မဟုတ် တစ်နည်းပြောရလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားသည် စက်ယန္တရားဆန်ဆန် ဖော်ပြခြင်း မဟုတ်ပေ၊ သို့မဟုတ် အချိန် သို့မဟုတ် နေရာ၏ အကန့်သတ်နှင့် သတ်မှတ်ထားချက်အရ ထုတ်ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါဘဲ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားသည် အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပြီး သူ၏ အမျက်ဒေါသကို ဖော်ပြခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး နိနေဝေမြို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းကို ရပ်လိုက်ခြင်းကို သင်မြင်သည့်အခါ ဘုရားသခင်က သနားညှာတာခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု သင်ဆိုနိုင်မည်လော။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် အနှစ်မရှိသည့် စကားလုံးများသာလျှင် ပါဝင်သည်ဟု သင်ဆိုနိုင်မည်လော။ ဘုရားသခင်က သူ၏ ပြင်းထန်သည့် အမျက်ဒေါသကို ဖော်ပြပြီး သူ၏ သနားညှာတာမှုကို ရုတ်သိမ်းလျှင် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သူသည်စစ်မှန်စွာမချစ်ဘူးဟု သင်ဆိုနိုင်မည်လော။ ဘုရားသခင်က လူတို့၏ မကောင်းသည့်အပြုအမူများကို တုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် ပြင်းထန်သည့် အမျက်ဒေါသကို ဖော်ပြပါသည်။ သူ့အမျက်ဒေါသမှာ မှားယွင်းမှု မပါဝင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားသည် လူတို့၏ နောင်တအားဖြင့် ထိတွေ့ခံရပါသည်။ သူ့နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲခြင်းကလည်း ဤနောင်တပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ထိတွေ့ခံရမှု၊ သူ၏နှလုံးသားပြောင်းလဲမှုနှင့် လူသားအပေါ် သူ၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းသည် အပြစ်အနာအဆာ လုံးဝ မရှိပေ။ သန့်ရှင်းသည်၊ သန့်စင်သည်၊ အထိအခိုက်မရှိပေ၊ စစ်မှန်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သည်းခံခြင်းက သည်းခံခြင်းသက်သက်သာဖြစ်သည်။ သူ၏ သနားညှာတာမှုက သနားညှာတာမှုသက်သက်သာဖြစ်သည်။ သူ၏ စိတ်သဘောထားသည် အမျက်ဒေါသနှင့် သနားညှာတာမှု၊ သည်းခံမှုတို့ကို လူသား၏ နောင်တနှင့် သူ၏ မတူညီသည့် အပြုအမူများနှင့်အညီ ထုတ်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါသည်။ သူ ဘာကိုပင် ထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြသည်ဖြစ်စေ အားလုံးက သန့်စင်ပါသည်။ အားလုံးက တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့အနှစ်သာရသည် ဖန်ဆင်းခြင်းမှာရှိသည့် အရာအားလုံးမှ ကွဲပြားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လုပ်ရပ်များ၏အောက်ခြေရှိ အခြေခံသဘောတရားများကို ဖော်ပြသည့်အခါ၊ ၎င်းတို့သည် မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် အပြစ်အနာအဆာ ကင်းပြီး၊ သူ၏အတွေးများ၊ စိတ်ကူးများနှင့် သူချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုစီတိုင်းနှင့် သူလုပ်ဆောင်သည့် အပြုအမူ တစ်ခုစီတိုင်းသည် မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် အပြစ်အနာအဆာ ကင်းသည်။ ဘုရားသခင်က ထိုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် သူ၏တာဝန်များကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ ပြည့်စုံစေသည်။ သူ၏လုပ်ငန်း၏ရလဒ်များက တိကျပြီး အမှားအယွင်းမရှိပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏အရင်းအမြစ်က အမှားအယွင်းမရှိ၊ အပြစ်အနာအဆာ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် အမှားအယွင်းမပါဝင်ပေ။ အလားတူပင် ဘယ်ဖန်ဆင်းခံမှ မပိုင်သည့် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှုနှင့် သည်းခံခြင်းတို့သည် သန့်ရှင်းသည်၊ အမှားကင်းသည်။ တဖန် တွေးတောသုံးသပ်ခြင်းနှင့် တွေ့ကြုံခံစားခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ပါသည်။
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဖန်ဆင်းရှင်၏ ရိုးသားစစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများ
ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်ရန်မှာ လွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ဟု လူတို့က မကြာခဏ ပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လူမြင်တွေ့နိုင်ရန် မကြာခဏ ခွင့်ပြုသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်ခြင်းသည် ခက်ခဲသောကိစ္စ လုံးဝမဟုတ်ဟု ငါဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားမျိုးနွယ်နှင့် သူ၏ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းကို ဘယ်သောအခါမျှ မရပ်စဲခဲ့ဖူးပေ၊ သူသည် သူ့ကိုယ်သူ လူသားထံမှ ဘယ်သောအခါမျှ မဖုံးကွယ်ဖူးသကဲ့သို့ သူ့ကိုယ်သူလည်း မကွယ်ဝှက်ဖူးပေ။ သူ၏ အတွေးများ၊ သူ၏ စိတ်ကူးများ၊ သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးကို လူသားမျိုးနွယ် တစ်ရပ်လုံးအား ထုတ်ဖော်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်ရန် ဆန္ဒရှိသရွေ့၊ သူသည် နည်းစနစ်များနှင့် နည်းလမ်းများမျိုးစုံဖြင့် ဘုရားသခင်ကို နားလည်သိမြင်လာနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို တမင်ရှောင်သည်၊ ဘုရားသခင်သည် လူ့လောကမှ သူ့ကိုယ်သူ တမင်ဖုံးကွယ်ထားသည်၊ သူ့ကို လူသားနားလည်သိမြင်ရန် ခွင့်ပြုဖို့ ဘုရားသခင်တွင် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဟု လူသားသည် ကြောင်းကျိုးမမြင် ထင်ရသည့်အကြောင်းမှာ- သူသည် ဘုရားသခင် မည်သူဖြစ်သည်ကို မသိသောကြောင့်သာမက ဘုရားသခင်ကို နားလည်ရန် ဆန္ဒလည်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်၊ ထို့ထက်ပို၍ သူသည် ဖန်ဆင်းရှင်၏ အတွေးများ၊ နှုတ်ကပတ်တော်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များတို့ကို စိတ်မဝင်စားသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ... မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောရလျှင် လူတစ်ယောက်က ဖန်ဆင်းရှင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး နားလည်ရန် သူ၏ အားနေသောအချိန်ကိုသာ အသုံးပြုကာ၊ ဖန်ဆင်းရှင်၏ အတွေးများနှင့် သူ့နှလုံးသား၏ အသံတော်ကို အနည်းငယ်သာ အာရုံစိုက်မှု ပြုမည်ဆိုပါက- ဘုရားသခင်၏ အတွေးများ၊ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ထင်ရှားပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာကြောင်း သူတို့ သဘောပေါက်မိရန် ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အလားတူစွာ၊ ဖန်ဆင်းရှင်သည် လူသားအကြားတွင် အမြဲတမ်းရှိသည်၊ သူသည် လူသားနှင့် ဖန်ဆင်းရာ တစ်ခုလုံးအား အမြဲ စကားစမြည် ပြောနေသည်၊ ထို့ပြင် သူသည် နေ့စဉ် အမှုသစ်များ ပြုလုပ်နေသည်ကို သဘောပေါက်မိရန် အနည်းငယ်သာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းရလိမ့်မည်။ သူ၏ အနှစ်သာရနှင့် စိတ်သဘောထားတို့ကို လူသားနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်၊ သူ၏ အတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများကို သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပြည့်စုံစွာ ထုတ်ဖော်ထားသည်၊ သူသည် လူသားမျိုးနွယ်နှင့်အတူ အမြဲတမ်းပါရှိပြီး စောင့်ကြည့်နေသည်။ ငါသည် ကောင်းကင်တွင် တည်ရှိပြီး၊ ငါသည် ငါ၏ ဖန်ဆင်းရာထဲတွင် တည်ရှိသည်ဟု သူသည် လူသားမျိုးနွယ်နှင့် ဖန်ဆင်းရာ အားလုံးတို့ကို သူ၏ အသံတိတ်စကားလုံးများဖြင့် ညင်ညင်သာသာ စကားပြောသည်။ ငါသည် အိပ်ဖန်စောင့်ပေးနေသည်၊ ငါသည် စောင့်ဆိုင်းနေသည်၊ ငါသည် သင်၏ အပါးတွင် ရှိနေသည် .... သူ၏ လက်များမှာ နွေးထွေးပြီး သန်မာသည်၊ သူ၏ ခြေသံတို့မှာ ပေါ့ပါးသည်၊ သူ၏အသံမှာ နူးညံ့ပြီး ယဥ်ကျေးသိမ်မွေ့သည်၊ သူ၏ အသွင်သဏ္ဌာန်မှာ လူသားမျိုးနွယ် အားလုံးကို လက်ခံပွေ့ဖက်ရင်း ဖြတ်သွားလှည့်ပတ်သည်၊ သူ၏ မျက်နှာထားမှာ လှပပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ သူသည် ဘယ်သောအခါမှ ထွက်ခွာမသွားသကဲ့သို့ သူသည် ပျောက်ကွယ်လည်း မသွားဖူးပါ။ သူသည် နေ့ရောညပါ လူသားမျိုးနွယ်ဘေးမှထွက်ခွာသွားခြင်း မရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ သစ္စာရှိသော အဖော်ပင် ဖြစ်သည်။ လူ့လောကအတွက် သူ၏ အစဉ်ချစ်ခင် သစ္စာရှိသော စောင့်ရှောက်ပြုစုခြင်းနှင့် အထူး ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ လူသားအတွက် သူ၏ စစ်မှန်သော အလေးထားမှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်းကောင်း သူနိနဝေမြို့ကို ကယ်တင်သောအခါ၌ နည်းနည်းချင်း ပြသခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်နှင့် ယောနတို့ကြား အပြန်အလှန်အချီအချ စကားပြောခြင်းက သူကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းခဲ့သော လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဖန်ဆင်းရှင်၏ သနားခြင်းကရုဏာကို ပိုမို၍ ဖော်ထုတ်ပြခဲ့သည်။ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ရိုးသားစစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများကို ဤစကားလုံးများအားဖြင့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သဘောပေါက်နားလည်ခြင်း သင်ရရှိနိုင်သည် ....
အောက်ဖော်ပြပါ ကျမ်းပိုဒ်ကို ယောန၀တ္ထုအခန်းကြီး ၄ အခန်းငယ် ၁၀ မှ ၁၁ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ “ယေဟောဝါကလည်း၊ သင်သည် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းလည်းမပြု၊ ကြီးထွားစေရန်လည်း မလုပ်ခဲ့ဘဲ၊ တစ်ညချင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး တစ်ညချင်းတွင် သေသော ကြက်ဆူပင်ကို သနားခြင်း ရှိပေ၏။ ငါသည် များစွာသော တိရစ္ဆာန်တို့ကိုမဆိုထားနှင့်၊ မိမိလက်ျာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်ကို မပိုင်းခြားနိုင်သောသူ တသိန်းနှစ်သောင်းထက်မက ရှိသည့် နိနေဝေမြို့ကြီးကို ငါချမ်းသာပေးသင့်သည် မဟုတ်လောဟု မိန့်တော်မူ၏။” ဤသည်တို့မှာ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ တကယ့်နှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်ပြီး၊ သူနှင့် ယောနတို့ကြား စကားစမြည်ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအပြန်အလှန် စကားပြောခြင်းမှာ တိုတောင်းလင့်ကစား လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဖန်ဆင်းရှင်၏ စောင့်ရှောက်ပြုစုခြင်းနှင့် လူသားအား လက်လျှော့ရန် သူ၏ ဝန်လေးမှုတို့နှင့် ပြည့်နေသည်။ သူ၏ ဖန်ဆင်းရာအတွက် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် ဘုရားသခင် စွဲကိုင်ထားသည့် စစ်မှန်သော သဘောထားနှင့် စိတ်ခံစားမှုများကို ဤနှုတ်ကပတ်တော်များက ဖော်ပြကာ၊ အလားတူ နှုတ်ကပတ်တော်မျိုး လူသားကြားဖူးရန် ကြုံခဲလှသည့် ဤသို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော စကားလုံးများဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် သူ၏ စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်များကို ထုတ်ပြန်သည်။ ဤအပြန်အလှန် စကားပြောခြင်းက နိနဝေမြို့သားများအပေါ် ဘုရားသခင် စွဲကိုင်ခဲ့သည့် သဘောထားတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ သို့ရာတွင် ဤသည်မှာ မည်ကဲ့သို့သော သဘောထားမျိုးနည်း။ ယင်းသည် နိနဝေမြို့သားများ နောင်တမရခင်နှင့် နောင်တရပြီးနောက် သူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်စွဲကိုင်ခဲ့သည့် သဘောထားပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူ့လောကကို တူညီသောနည်းဟန်ဖြင့် ဆက်ဆံပြုမူသည်။ လူတစ်ဦးသည် ဤနှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင် သူ၏ အတွေးများကိုလည်းကောင်း၊ သူ၏ စိတ်နေသဘောထားကိုလည်းကောင်း ရှာတွေ့နိုင်သည်။
ဤနှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင် ဘုရားသခင်၏ အဘယ်သို့သော အတွေးများကို ထုတ်ဖော်ထားသနည်း။ ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုခြင်းက ဘုရားသခင်သည် “နှမြော” ဟူသည့် စကားလုံးကို သုံးထားကြောင်း ချက်ချင်းထုတ်ဖော်သည်၊ ဤစကားလုံး သုံးနှုန်းထားခြင်းက လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော သဘောထားကို ထင်ရှားစေသည်။
တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ် အဆင့်အရ၊ လူတို့သည် “နှမြော” ဟူသည့် စကားလုံးကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်၊ ပထမအနေဖြင့် ချစ်၍ ကာကွယ်သည်၊ တစ်စုံတစ်ခုအပေါ် ကြင်နာမှုခံစားသည်၊ ဒုတိယအနေဖြင့် လွန်စွာချစ်သည်၊ နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်မှာ ယင်းကို နာကျင်စေရန် ဆန္ဒမရှိရုံသာမက ထိုသို့ပြုရန်ပင် မခံမရပ်နိုင်ပေ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် ယင်းက နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်းကောင်း၊ တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုအား လက်လျှော့ရန် ဆန္ဒမရှိခြင်းကို ညွှန်းဆိုသည်၊ ယင်းက လူသားအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာနှင့် သည်းခံခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတွေကြားထဲတွင် အများပြောနေကျ စကားလုံးတစ်လုံးကို သုံးနှုန်းခဲ့သော်လည်း၊ ဤစကားလုံး သုံးနှုန်းခြင်းက လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဘုရားသခင့်နှလုံးသား၏ အသံတော်နှင့် သူ၏ သဘာထားကို ဖော်ထုတ်ပြသည်။
နိနဝေမြို့သည် သောဒုံ၌ ရှိသောသူများကဲ့သို့ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသော၊ ဆိုးယုတ်၍ ရုန့်ရင်းကြမ်းကြုတ်သော လူများနှင့် ပြည့်နေခဲ့လင့်ကစား၊ သူတို့၏ နောင်တရခြင်းက ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီး သူတို့ကို မဖျက်ဆီးရန် ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် သူတို့၏ တုံ့ပြန်ချက်က သောဒုံမြို့သားများနှင့် သိသိသာသာ ကွာခြားသော သဘောထားတစ်ခုကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထို့နောက် ဘုရားသခင့်ထံ သူတို့၏ ရိုးသားသော ကျိုးနွံနာခံခြင်းနှင့် သူတို့၏ အပြစ်များအတွက် ရိုးသားသော နောင်တရခြင်းအပြင်၊ အဖက်ဖက်၌ သူတို့၏ စစ်မှန်၍ လှိုက်လှဲသော အပြုအမူများကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လှိုက်လှဲသော သနားခြင်းကရုဏာကို နောက်တစ်ကြိမ် ထင်ထင်ရှားရှားပြခဲ့ပြီး ယင်းကို သူတို့အပေါ် နှင်းအပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဆုလာဘ်နှင့် လူ့လောကအတွက် သူ၏ သနားခြင်းကရုဏာကို အဘယ်သူမျှ တုပရန်မဖြစ်နိုင်၊ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာ သို့မဟုတ် သည်းခံခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ လူ့လောက အပေါ်သူ၏ ရိုးသားစစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများကို ဖြစ်စေ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမျှ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ကြီးမြတ်သော အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် သင်ယူဆသောသူ၊ သို့မဟုတ် မြင့်မြတ်သော အဆင့်တစ်ခုမှ ကြီးမြတ်သော အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် စကားပြောသော အာဂလူတစ်ဦးပင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးအဆင့်အပေါ်မှ လူသားမျိုးနွယ် သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းရာအပေါ် ဤကဲ့သို့သော ထုတ်ပြန်ချက်မျိုး ပြုလုပ်သောသူ ရှိပါ၏လော။ လူသားမျိုးနွယ်တွင် မည်သူသည် လူ့လောက၏ အသက်ရှင်မှု အနေအထားများကို သူတို့ လက်ဖဝါးလို သိနိုင်သနည်း။ လူ့လောက၏ ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် ဝန်ထုပ်နှင့်တာဝန်ကို မည်သူ ထမ်းဆောင်နိုင်သနည်း။ မြို့တစ်မြို့ဖျက်ဆီးခြင်းကို ကြေညာရန် မည်သူ အရည်အချင်းမီသနည်း။ ထို့ပြင် မြို့တစ်မြို့ကို ခွင့်လွှတ်ရန် မည်သူ အရည်အချင်းမီသနည်း။ သူတို့ကိုယ်တိုင််ဖန်ဆင်းရာကို သူတို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်ဟု မည်သူဆိုနိုင်သနည်း။ ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဆိုနိုင်၏။ ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဤလူသားမျိုးနွယ်အပေါ် သနားခြင်း ကရုဏာထားသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဤလူသားမျိုးနွယ်ကို သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့် ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်း ပြသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဤလူသားမျိုးနွယ်အတွက် စစ်မှန်၍ မချိုးနှိမ်နိုင်သော ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်း စွဲကိုင်ထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင် ဤလူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကရုဏာနှင်းအပ်နိုင်ကာ သူ၏ ဖန်ဆင်းရာအားလုံးကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးနိုင်သည်။ သူ၏ နှလုံးသားသည် လူသား၏ လုပ်ရပ်များ တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ခုန်ပေါက်၍ နာကျင်သည်၊ လူသား၏ ဆိုးယုတ်မှုနှင့် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအပေါ် သူသည် စိတ်ဆိုး၊ သောကရောက်ပြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲသည်၊ လူသား၏ နောင်တနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက် သူသည် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ခွင့်လွှတ်ပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသည်၊ သူ၏ အတွေးများနှင့် စိတ်ကူးများ တစ်ခုစီတိုင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဖြစ်၍ လူသားကို ဗဟိုပြုနေသည်၊ သူ၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့် အရာအားလုံးကို လူသားမျိုးနွယ်အတွက်သာလျှင် ဖော်ပြထားသည်၊ သူ၏ စိတ်ခံစားမှုများ တစ်ခုလုံးသည် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖြစ်တည်မှုနှင့်အတူ ရောယှက်နေသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အဖို့အလို့ငှာ၊ သူသည်သွားလာပြီး အပူတပြင်းလုပ်ဆောင်သည်၊ သူသည် သူ့အသက်၏ အပိုင်းအစတိုင်းကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ထုတ်လွှတ်ပေးသည်၊ သူသည် သူ့အသက်၏ မိနစ်တိုင်း၊ စက္ကန့်တိုင်းကို ဆက်ကပ်ထားသည် …. သူသည် သူကိုယ်တိုင်၏အသက်ကို နှမျှောရကောင်းမှန်း လုံးဝမသိခဲ့ပေ၊ သည့်ထက် သူသည် သူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့သော လူသားမျိုးနွယ်ကို အမြဲနှမျှောပြီး ချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့သည်…. သူသည် ဤလူ့လောကအတွက် သူရှိသမျှအားလုံးကို ပေးအပ်သည်…. သူသည် သူ၏ ကရုဏာနှင့် သည်းခံခြင်းကို အကြွင်းမဲ့နှင့် ဆုလာဘ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်မပါဘဲ ချပေးသည်။ လူသားမျိုးနွယ်က သူ၏ အသက်ထောက်ပံ့ခြင်းကို ရရှိပြီး၊ သူ့မျက်စိရှေ့တွင် ဆက်လက်အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်သာ သူဤသို့ ပြုလုပ်သည်၊ လူသားမျိုးနွယ်သည် တစ်နေ့ သူ၏ရှေ့မှောက်တွင် ကျိုးနွံနာခံကာ၊ သူသာလျှင် လူသား၏ ဖြစ်တည်မှုကို အာဟာရဖြစ်စေပြီး ဖန်ဆင်းရာအားလုံး၏ အသက်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးသောသူဖြစ်ကြောင်း သိရန်အလို့ငှာ သူဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖန်ဆင်းရှင်သည် လူ့လောကအတွက် သူ၏စစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများကို ဖော်ပြသည်
ယေဟောဝါဘုရားသခင်နှင့် ယောနတို့ကြားက ဤစကားစမြည်ပြောခြင်းသည် လူ့လောကအတွက် ဖန်ဆင်းရှင်၏ စစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများ ဖော်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်း သံသယ ဖြစ်စရာ မရှိပေ။ သို့သော်ငြားလည်း “ငါသည် များစွာသော တိရစ္ဆာန်တို့ကိုမဆိုထားနှင့်၊ မိမိလက်ျာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်ကို မပိုင်းခြားနိုင်သောသူ တသိန်းနှစ်သောင်းထက်မက ရှိသည့် နိနေဝေမြို့ကြီးကို ငါချမ်းသာပေးသင့်သည် မဟုတ်လောဟု မိန့်တော်မူ၏။” ဟု ယေဟောဝါဘုရားသခင်က ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ယင်းက- သူ၏ သြဇာအာဏာအောက်၌ ဖြစ်သည့် ဖန်ဆင်းရာအားလုံးအပေါ် ဖန်ဆင်းရှင်၏ သိမှတ်နားလည်ခြင်းအား လူတို့အား အသိပေးသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် နိနဝေအပေါ် ဘုရားသခင်၏ သိမှတ်နားလည်ခြင်းမှာ သာမန်ကာလျှံကာကိစ္စထက် ကျော်လွန်သည်။ (လူတွေနှင့် ခြံမွေးတိရစ္ဆာန်များအပါအဝင်) မြို့အတွင်း၌ရှိသော သက်ရှိအရာများ၏ အရေအတွက်ကို သူသိခဲ့ရုံမက၊ သူတို့၏ လက်ယာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်ကိုမျှ ပိုင်းခြား၍မသိသောသူ အဘယ်မျှလောက် - အတိအကျဆိုရလျှင်၊ ကလေးငယ်များနှင့် လူငယ်များ အဘယ်မျှလောက် ပါဝင်ခဲ့သည်ကိုလည်း သူသိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ လက်ဖျားခါရလောက်သော သိမှတ်နားလည်ခြင်းကို ပြသည့် ခိုင်လုံသော သက်သေပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဤစကားစမြည်ပြောခြင်းက လူ့လောကအပေါ် ဖန်ဆင်းရှင်၏ သဘောထား၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် ဖန်ဆင်းရှင်၏ နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသည့် လူ့လောကအတွက် ကြီးလေးသောတာဝန်ကို လူတို့အားအသိပေးသည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်က “သင်သည် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းလည်းမပြု၊ ကြီးထွားစေရန်လည်း မလုပ်ခဲ့ဘဲ၊ တစ်ညချင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး တစ်ညချင်းတွင် သေသော ကြက်ဆူပင်ကို သနားခြင်း ရှိပေ၏။ ငါသည် များစွာသော တိရစ္ဆာန်တို့ကိုမဆိုထားနှင့်၊ မိမိလက်ျာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်ကို မပိုင်းခြားနိုင်သောသူ တသိန်းနှစ်သောင်းထက်မက ရှိသည့် နိနေဝေမြို့ကြီးကို ငါချမ်းသာပေးသင့်သည် မဟုတ်လော …” ဟု ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ယောနအပေါ် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်၏ ပြစ်တင်စကားများ ဖြစ်သော်လည်း အားလုံးမှန်ပေသည်။
နိနဝေမြို့သားများထံ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကြေညာရန် ယောနသည် တာဝန်ပေးစေခိုင်းခံရခဲ့သော်လည်း၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို သူနားမလည်ခဲ့သည့်အပြင်၊ မြို့သူမြို့သားများအတွက် သူ၏ပူပင်မှုများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များကိုလည်း သူနားမလည်ခဲ့ပေ။ လူ့လောကသည် သူ့ကိုယ်ပိုင်လက်များမှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာသည့်အရာ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဘုရားသခင်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် အပတ်တကုတ် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကို ပြုခဲ့ပြီးပြီ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းက ဘုရားသခင်၏ မျှော်လင့်ချက်များကို သူတို့နှင့်အတူ သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းက ဘုရားသခင်၏ အသက်ဖြည့်စွမ်းမှုကို အကျိုးခံစားခဲ့ကြသည်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက် ဘုရားသခင်သည် ဒုက္ခခံသောအဖိုးအခကို ပေးချေခဲ့ပြီးပြီ ဟူသည်ကို ဤအပြစ်ဖော်ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ ဘုရားသခင်က သူ့အား ပြောလိုခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယောနကိုယ်တိုင်က ကြက်ဆူပင်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့သလောက် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုယ်ပိုင်လက်များ၏ လက်ရာဖြစ်သည့် လူ့လောကကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့သည် ဟူသည်ကိုလည်း ဤအပြစ်ဖော်ဆုံးမခြင်းက ယောနကို ပြောပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နောက်ဆုံးအခိုက်အတန့် မတိုင်ခင်ထိ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ သူတို့ကို လွယ်လွယ်စွန့်ပစ်မည် မဟုတ်ခဲ့ပေ၊ ထို့ပြင် မြို့အတွင်း၌ ကလေးငယ်မြောက်မြားစွာနှင့် အပြစ်မဲ့ ခြံမွေးတိရစ္ဆာန်များလည်း ရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏ လက်ယာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်များကိုပင် မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ကြသော၊ ဤလို ငယ်ရွယ်၍ မသိနားမလည်သော၊ ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းမှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာသူများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ဤသို့ အလျင်စလိုနည်းဟန်မျိုးဖြင့် သူတို့၏ အသက်များကို အဆုံးသတ်ပြီး သူတို့၏ ရလဒ်များကို အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းငှာ ပို၍ပင် မတတ်နိုင်ခဲ့ချေ။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ ကြီးပြင်းလာသည်ကို မြင်တွေ့ရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်၊ သူတို့သည် သူတို့၏ လူကြီးသူမများ၏ လမ်းကြောင်းများအတိုင်း လျှောက်မည်မဟုတ်၊ သူတို့သည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်ကို နောက်ထပ်ပြန်ကြားစရာ လိုမည်မဟုတ်၊ ထို့ပြင် သူတို့သည် နိနဝေ၏ အတိတ်ဖြစ်ရပ်ကို သက်သေခံကြလိမ့်မည်ဟု ဘုရားသခင် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ထို့ထက်ပို၍ နောင်တရပြီးသား နိနဝေကို မြင်တွေ့ရန်၊ ထိုနောင်တရခြင်း နောက်မှလာသော နိနဝေ၏ အနာဂတ်ကို မြင်တွေ့ရန်၊ ပိုအရေးကြီးသည်မှာ နိနဝေသည် ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာအောက်တွင် နောက်ထပ်တစ်ဖန် အသက်ရှင်သည်ကို မြင်တွေ့ရန် ဘုရားသခင် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမြင်တွင် သူတို့၏ လက်ယာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်များကို မခွဲခြားနိုင်သော ထိုဖန်ဆင်းခံ အရာများမှာ နိနဝေ၏ အနာဂတ်ပင် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် နိနဝေ၏ အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ကို သက်သေခံရမည့် အရေးကြီးသောတာဝန်ကို သူတို့ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ နိနဝေ၏ စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသော အတိတ်ကိုလည်း သူတို့ ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သူ၏ စစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများကို ဤသို့ကြေညာရာ၌၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် လူ့လောကတစ်ခုလုံးအတွက် ဖန်ဆင်းရှင်၏ ကရုဏာကို တင်ပြခဲ့သည်။ ယင်းက “ဖန်ဆင်းရှင်၏ကရုဏာ” သည် အနှစ်သာရမဲ့သော စကားရပ်တစ်ခု မဟုတ်သလို၊ ပေါ့တန်သော ကတိတစ်ခုလည်းမဟုတ်ကြောင်း လူ့လောကကို ပြခဲ့သည်၊ ယင်းတွင် ခိုင်လုံသော အခြေခံသဘောတရားများ၊ နည်းလမ်းများနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ပါရှိသည်။ သူသည် မှန်ကန်စစ်မှန်ပြီး မုသားများနှင့် အယောင်ဆောင်မှုများကို မသုံးပေ၊ ထို့ပြင် ဤနည်းအတိုင်းပင် သူ၏ ကရုဏာကို အချိန်တိုင်း၊ ခေတ်ကာလတိုင်းရှိ လူ့လောကအပေါ်တွင် အဆုံးမရှိ ပေးအပ်ထားသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ယနေ့ထိတိုင်အောင် ယောနနှင့် ဖန်ဆင်းရှင်၏ အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းသည် လူ့လောကကို သူဘာကြောင့် ကရုဏာပြသနည်း၊ လူ့လောကကို သူဘယ်လို ကရုဏာပြသနည်း၊ လူ့လောကအပေါ်သူ ဘယ်လောက် သည်းခံသနည်းနှင့် လူ့လောကအတွက် သူ၏ စစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများဟူသည့် ဘုရားသခင်၏ တစ်ခုတည်းသော သီးသန့်နှုတ်ထွက်ထုတ်ပြန်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ လိုရင်းတိုရှင်းကျသော စကားစမြည်ပြောခြင်းက လူ့လောကအတွက် သူ၏ပြည့်စုံသော အတွေးများကို ဖော်ပြသည်၊ ဤသည်မှာ လူ့လောကအပေါ် သူ့နှလုံးသားသဘောထား၏ စစ်မှန်သောဖော်ပြချက်ပင် ဖြစ်သည်၊ ထို့ပြင် ဤသည်မှာ လူ့လောကအပေါ် သူ၏ကြွယ်ဝသော ကရုဏာပေးအပ်ခြင်း၏ ခိုင်လုံသောသက်သေလည်း ဖြစ်လေသည်။ သူ၏ ကရုဏာကို လူ့လောက၏ အသက်ကြီးသော မျိုးဆက်များအပေါ်တွင်သာ ပေးအပ်သည်မဟုတ်၊ မျိုးဆက်တစ်ဆက်မှ နောက်တစ်ဆက်သို့တိုင် ဤသို့အမြဲ ဖြစ်လာပြီးသည့်အတိုင်း၊ ယင်းကို လူ့လောက၏ ငယ်ရွယ်သောလူစုများအားလည်း ချပေးထားလေသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် လူ့လောက၏ အချိုးအကွေ့တစ်နေရာရာနှင့် ခေတ်တစ်ချိန်ချိန်တွင် မကြာခဏ ကျရောက်တတ်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာမှာ ဘယ်သောအခါမှ ရပ်စဲမသွားဖူးပေ။ သူသည် သူ့ဖန်ဆင်းရာ၏ မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုကို သူ၏ကရုဏာနှင့်အတူ လမ်းညွှန်ပြီးဦးဆောင်သည်၊ ဖန်ဆင်းရာမျိုးဆက်တစ်ခုပြီး နောက်တစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပြီး အာဟာရဖြစ်စေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူ့လောကအပေါ် သူ၏စစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများမှာ ဘယ်သောအခါမှ ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “နိနေဝေမြို့ကြီးကို ငါချမ်းသာပေးသင့်သည် မဟုတ်လော” ဟု ယေဟောဝါဘုရားသခင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင်၊ သူသည် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖန်ဆင်းရာကို အမြဲ ချစ်ခင်မြတ်နိုးလာခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဖန်ဆင်းရှင်၏ ဖြောင့်မတ်သော စိတ်သဘောထား၏ ကရုဏာဖြစ်ပြီး၊ ဤသည်မှာ ဖန်ဆင်းရှင်၏ အတုမရှိခြင်းသက်သက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
လောလောဆယ်မှာမူ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ငါတို့၏ မိတ်သဟာယပြုခြင်းကို ဤနေရာမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါမည်။ နောက်တစ်ခုက ဘုရားသခင်၏ နောက်လိုက်များကို ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏နားလည်မှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ် သူတို့၏ နားလည်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံနှင့်အညီ အမျိုးအစားခွဲခြားပါမည်။ သင်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လက်ရှိအဆင့်နှင့် သင်တို့၏ လက်ရှိဝိညာဉ်အသက်တာကို သိနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏အသိပညာနှင့် သူ၏ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ် သူတို့၏နားလည်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင် လူတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် မတူညီသည့် အဆင့်နှင့် ဝိညာဉ်အသက်တာများသည် အမျိုးအစားငါးခုအဖြစ် ယေဘုယျ ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဤခေါင်းစဉ်က အတုမရှိ ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို သိခြင်းအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါ အကြောင်းအရာကို သင်တို့ ဖတ်သည့်အခါမှာ ဘုရားသခင်၏ အတုမရှိခြင်းနှင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်တို့မှာ အသိပညာနှင့်နားလည်မှု မည်မျှအတိအကျရှိသနည်းဆိုသည်ကို သင်တို့ သဘောပေါက်အောင် သေသေချာချာ ကြိုးစားသင့်သည်။ ပြီးနောက် ဘယ်အဆင့်မှာ သင်တို့ပါဝင်နေပုံ၊ သင်တို့၏ ဝိညာဉ်အသက်တာက မည်မျှကြီးမားသနည်းဆိုသည်နှင့် သင်က အမှန်တကယ်တွင် ဘယ်လိုလူဖြစ်သနည်းဆိုသည်ကို အကဲဖြတ်ဖို့ ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။
ပထမအမျိုးအစား။ အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေးအဆင့်
အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေးသည် ဤကမ္ဘာကို ယခုလေးတင်ရောက်လာသည့် အသစ်စတင်မွေးဖွားလာသည့် မွေးကင်းစကလေးဖြစ်ပါသည်။ လူတို့က သူတို့၏အသေးငယ်ဆုံး အရွယ်မရောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအဆင့်မှာရှိသည့်လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအရာမှာ သတိပြုမိခြင်း သို့မဟုတ် အသိစိတ်ရှိခြင်းတို့ အခြေခံအားဖြင့် မပိုင်ဆိုင်ပေ။ သူတို့သည် အရာရာတိုင်းအပေါ်မှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပြီး အသိကင်းမဲ့ပါသည်။ ဤလူတို့က ဘုရားသခင်ကို အချိန်အကြာကြီးယုံခဲ့နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အချိန်အကြာကြီး ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မည်။ သို့သော်လည်း သူတို့၏စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပြီး အသိကင်းမဲ့သည့် အဆင့်နှင့် သူတို့၏ စစ်မှန်သည့် ဝိညာဉ်အသက်တာသည် သူတို့ကို အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေးအဆင့်ကို ရောက်စေပါသည်။ အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေးအခြေအနေ၏ တိကျသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်က ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤလူမျိုးက ဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခဲ့သည်မှာ မည်မျှပင် ကြာပါစေ၊ သူသည် အမြဲတစေ စိတ်တို့အစီအစဉ်မကျ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီး ဉာဏ်နည်းနေပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကို သူဘာကြောင့်ယုံသည်ဆိုသည်ကို သူမသိသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်က မည်သူဆိုသည်ကို သို့မဟုတ် မည်သူက ဘုရားသခင်ဖြစ်သနည်းဆိုသည်ကို သူမသိပေ။ သူသည် ဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်သော်လည်း သူ့နှလုံးသားမှာ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တိကျသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိပေ။ သူနောက်လိုက်နေခြင်းက ဘုရားသခင်ဟုတ်သလောဆိုသည်ကိုလည်း သူမဆုံးဖြတ်နိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်ကို သူအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီး သူ့နောက်ကို လိုက်သလောဆိုသည်ကိုတော့ ပြောမနေပါနှင့်တော့။ ၎င်းတို့က ဤလူမျိုး၏ တကယ့်အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။ ဤလူတို့၏ အတွေးများသည် မရှင်းလင်းပေ။ တဖန် ရိုးရိုးပြောရလျှင် သူတို့၏ယုံကြည်မှုသည် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုပါ။ သူတို့သည် စိတ်ရောထွေးမှုနှင့် စိတ်ဗလာဖြစ်မှု အခြေအနေမှာ အမြဲတမ်း တည်နေကြပြီး စိတ်အစီအစဉ်မကျဖြစ်မှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် အသိဉာဏ်နည်းမှုက သူတို့၏အဆင့်များ၏ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ တည်ရှိမှုကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသကဲ့သို့ မခံစားဖူးပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းအကြောင်းကို သူတို့ကိုပြောခြင်းက အရုပ်စာနှင့်ရေးထားသည့်စာအုပ်ကို သူတို့ကိုဖတ်ခိုင်းသကဲ့သို့မျိုးလောက်ပင် အသုံးဝင်ပါသည်။ သူတို့သည် ၎င်းကို နားလည်မည်လည်း မဟုတ်သကဲ့သို့ လက်ခံမည်လည်းမဟုတ်ပေ။ သူတို့အတွက်က ဘုရားသခင်ကိုသိခြင်းသည် စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်ကို ကြားခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အတွေးများက ရှုပ်ထွေးနေနိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းက အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုကို လုံးဝ ဖြုန်းတီးခြင်းပဲဟု သူတို့ တကယ်ပင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ကြသည်။ ဤသည်မှာ ပထမလူအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေး။
ဒုတိယအမျိုးအစား။ နို့စို့အရွယ် မွေးကင်းစကလေးအဆင့်
အနှီးပတ်ထားသည့် မွေးကင်းစကလေးနှင့်ယှဉ်ကြည့်လျှင် ဤလူအမျိုးအစားက တိုးတက်မှုတစ်ချို့ရှိပါသည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းစွာပင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်အပေါ်နားလည်ခြင်း လုံးဝ မရှိသေးပေ။ သူတို့မှာ ဘုရားသခင်အပေါ် ရှင်းလင်းသည့်နားလည်ခြင်းနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ဘုရားသခင်ကို သူတို့ ဘာကြောင့်ယုံသင့်သည်ဆိုသည်ကို သိပ်မရှင်းလင်းသေးပေ။ သို့သော်လည်း သူတို့နှလုံးသားမှာ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရှင်းလင်းသည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ဖို့က မှန်ကန်သလော ဆိုသည်ကို သူတို့စိတ်မဝင်စားကြပေ။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှတစ်ဆင့် သူတို့ရှာဖွေသည့် ဦးတည်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်က သူ၏ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားဖို့၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိဖို့၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့် ဘဝကို နေထိုင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းကို ရရှိဖို့နှင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးများအောက်မှာ နေထိုင်ဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို သူတို့သိသည့်အဆင့်ကို သူတို့သည် စိတ်မဝင်စားကြပေ။ ဘုရားသခင်ကို နားလည်ခြင်းကို ရှာဖွေဖို့ ပြင်းပြသည့်ဆန္ဒ သူတို့မှာ မရှိသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်က ဘာလုပ်နေသည် သို့မဟုတ် သူဘာလုပ်ချင်ကြောင်းကိုလည်း စိတ်မဝင်စားကြပေ။ သူ၏ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားဖို့နှင့် သူ၏ ကောင်းချီးများကို ပိုပြီး လက်ခံရရှိဖို့ကိုပင် မျက်ကန်းတောတိုး ရှာဖွေကြသည်။ သူတို့သည် လက်ရှိခေတ်၌ အဆရာချီရရှိဖို့နှင့် နောက်လာမည့်ခေတ်မှာ ထာဝရအသက်ရဖို့ အားထုတ်ကြသည်။ သူတို့၏အတွေးများ၊ အချိန်ကုန်ဆုံးမှုများနှင့် စိတ်နှစ်မြှုပ်မှုများ၊ သူတို့၏ ဒုက္ခခံမှုများအားလုံးသည် တူညီသည့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပင် ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် ကောင်းချီးများကို လက်ခံရရှိဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ အခြားဘာကိုမှ သူတို့စိတ်မဝင်စားပေ။ ဤလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်က သူတို့ကို ဘေးကင်းစေနိုင်ပြီး သူ၏ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့အပေါ်ကို ချပေးသနားနိုင်သည်ဆိုသည်လောက်ပင် သေချာပါသည်။ ဘုရားသခင်က လူသားကို ဘာကြောင့်ကယ်တင်ချင်ရသနည်းဆိုခြင်း၊ သို့မဟုတ် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ဘုရားသခင် ရရှိချင်သည့် ရလဒ်ကို သူတို့သည် သိပ်မရှင်းလင်းပေ၊ စိတ်မဝင်စားဘူးဟု ဆိုနိုင်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရနှင့် ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို သိဖို့ ဘယ်တော့မှ အားမထုတ်ကြသကဲ့သို့ ဤသို့လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း မလှုံ့ဆော်နိုင်ကြပေ။ ဤအရာများအပေါ်ကို အာရုံမစိုက်ချင်ကြသကဲ့သို့ သိချင်စိတ်လည်း မရှိကြပေ။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှု၊ လူသားအပေါ်မှာ ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တခြားအရာအားလုံးကို မေးဖို့ ဆန္ဒမရှိကြသကဲ့သို့ ဤအရာများကို မေးဖို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် အဖြစ်မခံကြပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကိစ္စများသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အပေါ် သူတို့၏နှစ်သက်ခံစားမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ဘူးဟု ယုံကြည်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ကျေးဇူးတော်ကို ချပေးသနားနိုင်ပြီး သူတို့၏ ကိုယ်ကျိုးနှင့် ဆက်စပ်သည့်ဘုရားသခင်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ တခြားအရာများအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှု လုံးဝမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်အပေါ် နှစ်တို့မည်မျှကြာပြီး ယုံကြည်ခဲ့ပါစေ၊ သမ္မာတရား၏ လက်တွေ့အရှိတရားကို မဝင်ရောက်နိုင်ပေ။ သူတို့ကို မကြာခဏ ရေတိုက်မည့်သူ သို့မဟုတ် ကျွေးမည့်သူမရှိလျှင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်မှုလမ်းကြောင်းကို ဆက်သွားဖို့ သူတို့အတွက် ခက်ခဲပါသည်။ သူတို့၏ အစောပိုင်း ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့ မခံစားနိုင်လျှင် သူတို့သည် စွန့်ခွာသွားဖို့ အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ ၎င်းက ဒုတိယလူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ နို့စို့အရွယ် မွေးကင်းစကလေးအဆင့်မှာ တည်ရှိသည့် လဖြစ်သည်။
တတိယအမျိုးအစား။ နို့ဖြတ်အရွယ် မွေးကင်းစကလေး သို့မဟုတ် ငယ်ရွယ်သည့် ကလေးအဆင့်
ဤလူအုပ်စုက ရှင်းလင်းသည့် နားလည်သဘောပေါက်မှုတစ်ချို့ ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားခြင်းက သူတို့ကိုယ်တိုင် စစ်မှန်သည့် အတွေ့အကြုံကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟု မဆိုလိုကြောင်းကို ဤလူတို့ သတိမူမိကြသည်။ သူတို့သည် ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်ကို ရှာဖွေခြင်းမှာ ဘယ်တော့မှ မမောပန်းဘူးဆိုလျှင် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားခြင်းအပေါ်၌ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှခြင်း သို့မဟုတ် သူတို့အပေါ်မှာ ဘုရားသခင် ချပေးသနားခဲ့သည့် ကောင်းချီးများအတွက် သူ့ကို ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည် သက်သေခံနိုင်သည်ဆိုလျှင် ဤအရာများက သူတို့သည် အသက်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မဆိုလိုသကဲ့သို့ သူတို့သည် သမ္မာတရား၏ လက်တွေ့အရှိတရားကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်းကို သူတို့သိကြသည်။ သူတို့၏အသိတရားမှ အစပြုရင်း ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ပင် အတူပါရှိခြင်း ခံရမည်ဆိုသည့် ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မျှော်လင့်ချက်များကို လက်သင့်မခံတော့ပေ။ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားရသည့်အခါမှာ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ချင်ကြသည်။ သူတို့၏တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ဖို့၊ အခက်အခဲနှင့် ပင်ပန်းမှုအချို့ကို တောင့်ခံနိုင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခြင်း အဆင့်တစ်ချို့ရှိဖို့ သူတို့ ဆန္ဒရှိနေကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းမှာ သူတို့၏အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုသည် အတော်ပင်စစ်မှန်မှုမရှိခြင်းကြောင့်၊ တစ်ဦးချင်း ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သူတို့ထားရှိသည့် ဆန္ဒများသည် အလွန်ပြင်းထန်လွန်းခြင်းကြောင့်၊ သူတို့၏စိတ်သဘောထားသည် အတော်ပင် လွန်လွန်ကဲကဲ ထောင်လွှားခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ကို သစ္စာစောင့်သိဖို့ သူတို့အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ တစ်ဦးချင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆန္ဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ ကတိများကို ပြည့်စုံစေဖို့ မကြာခဏပင် မတတ်နိုင်ကြပေ။ သူတို့သည် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် အခြေအနေများထဲ မကြာခဏ ရောက်သွားသည်။ ဘုရားသခင်ကို ဖြစ်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးအဆင့်အထိ ကျေနပ်စေဖို့ သူတို့ အလွန်ဆန္ဒရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ သူတို့အစွမ်းရှိသမျှ အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မကြာခဏပင် ကတိသစ္စာပြုကြသော်လည်း သူတို့၏ ကတိများကို ခပ်မြန်မြန်ပင် ခေါင်းရှောင်ကြသည်။ မကိုက်ညီသည့် အခြားအခြေအနေတို့မှာလည်း သူတို့ ပို၍ပင် မကြာခဏ ရောက်ကြရသည်။ ဘုရားသခင်ကို သူတို့ ရိုးသားစွာယုံကြည်သော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့် သူ့ဆီမှလာသည့် အရာရာတိုင်းကို ငြင်းဆန်ကြပြန်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်က သူတို့ကို ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပေးဖို့၊ ဦးဆောင်ဖို့၊ ထောက်ပံ့ဖို့၊ သူတို့ကို ကူညီဖို့ စိုးရိမ်တကြီး မျှော်လင့်ကြသော်လည်း သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ထွက်လမ်းကို ရှာဖွေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို နားလည်ပြီး သိရှိဖို့ ဆန္ဒရှိကြသော်လည်း သူနှင့်နီးစပ်အောင်လုပ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိကြပြန်ပေ။ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အမြဲတမ်း ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ သူတို့၏နှလုံးသားများက သူနှင့်နီးစပ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် သမ္မာတရား၏ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်အပေါ်မှာ သူတို့သည် အပေါ်ယံနားလည်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံတို့ရှိပြီး ဘုရားသခင်နှင့် သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပေါ်ယံအယူအဆရှိကြသော်လည်း မသိစိတ်မှာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်က သမ္မာတရား ဟုတ်သလောဆိုသည်ကို အတည်မပြုနိုင်ကြသေးပေ၊ သို့မဟုတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသေးပေ။ ဘုရားသခင်က အမှန်တကယ် ဖြောင့်မတ်သလောဆိုသည်ကို သူတို့ အတည်မပြုနိုင်ကြသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သည့် ဖြစ်တည်မှုကို မဆိုထားနှင့်၊ သူ၏စိတ်သဘောထားနှင့် အနှစ်သာရ၏ စစ်မှန်ခြင်းကိုတောင် သူတို့ မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပေ။ ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းက သံသယများနှင့် နားလည်မှုလွဲခြင်းများ အမြဲပါဝင်သည်။ စိတ်ကူးထင်မြင်ခြင်းနှင့် အယူအဆများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့ခံစားရခြင်းကြောင့် သူတို့၏ ယုံကြည်မှုကို တိုးတက်စေဖို့၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှာ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံကို တိုးပွားစေဖို့၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှာ သူတို့၏ နားလည်မှုကို အတည်ပြုစစ်ဆေးဖို့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားသည့် ဘဝလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းခြင်းနှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် အကြောင်းတရားကို ပြီးမြောက်စေခြင်း၏ ပကာသနကို ဖြည့်ဆည်းဖို့၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် သမ္မာတရားဟု သူတို့ယုံကြည်သည့် အချို့အရာများကို စိတ်မပါစွာနှင့် ကြုံတွေ့ကြသည်၊ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကောင်းချီးများ ရရှိဖို့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဖို့၊ လူသားမျိုးနွယ်၏ ပိုမိုကြီးမားသည့် ကောင်းချီးများကို သူတို့ခံယူနိုင်ဖို့အတွက် လောင်းကစားတစ်ခုလုပ်ဖို့၊ ဘုရားသခင်ကို သူတို့ရရှိသည့်အချိန်အထိ အနားမယူသည့် ကြီးမားသည့်ရည်မှန်းချက်နှင့် ဘဝ၏ဆန္ဒကို ပြီးမြောက်ဖို့ ဤအရာများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကောင်းချီးများရရှိဖို့ သူတို့၏ ဆန္ဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များသည် သူတို့အတွက် အရေးကြီးလွန်းသည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ အလင်းဖွင့်ပြခြင်းကို ဤလူတို့သည် ရယူနိုင်လေ့မရှိကြပေ။ သူတို့သည် ၎င်းကို အရှုံးပေးစွန့်လွှတ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိသကဲ့သို့ အရှုံးလည်းမပေးနိုင်ကြပေ။ ကောင်းချီးများရရှိဖို့ ဆန္ဒမရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်ကို သူတို့ ရရှိသည့်အချိန်ထိ အနားမယူခြင်းဖြစ်သည့် အချိန်ကြာရှည်စွာ နှစ်သက်ခဲ့ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိလျှင်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ တွန်းအားပျောက်ဆုံးသွားမှာကို ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် လက်တွေ့အရှိတရားကို ရင်မဆိုင်ချင်ကြပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရင်မဆိုင်ချင်ကြပေ။ ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထား သို့မဟုတ် အနှစ်သာရကို သူတို့ ရင်မဆိုင်ချင်ကြပေ။ ဘုရားသခင်ကို သိခြင်း အကြောင်းအရာကို ပြောဖို့ဆိုသည်ကို အသာထားလိုက်ပါ။ ဤသည်မှာ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၊ သူ၏ အနှစ်သာရနှင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားသည် သူတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို အစားထိုးလိုက်ခြင်းနှင့် သူတို့၏ အိပ်မက်များသည် အခိုးအငွေ့လို ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခခံထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့် စုစည်းထားသည့် စင်ကြယ်သည့် ယုံကြည်မှုနှင့် “ကောင်းမှု”ဟု သူတို့ခေါ်သည့်အရာများက ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူတို့၏ သွေး၊ ချွေးများနှင့် သိမ်းပိုက်ထားသည့် သူတို့၏ “ပိုင်နက်”သည် ပြိုကျလုနီးနီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ သူတို့၏ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားမှုနှင့် အားထုတ်မှုများသည် အလဟဿဖြစ်သွားပြီ၊ သုညမှ တစ်ခါ ပြန်စရမည်ဆိုသည်ကို ဖော်ပြနေပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ ခံယူဖို့ သူတို့အတွက် အခက်ခဲဆုံး နာကျင်မှုဖြစ်ပြီး သူတို့ မမြင်ချင်ဆုံး ရလဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် နောက်လှည့်ဖို့ ငြင်းဆန်ရင်းနှင့် ဤမတိုးသာမဆုတ်သာ အခြေအနေမျိုးမှာ အမြဲတမ်း ပိတ်မိနေပါသည်။ ၎င်းက တတိယလူအမျိုးအစားပါ။ နို့ဖြတ်အရွယ် မွေးကင်းစကလေးအဆင့်မှာ တည်ရှိသည့်သူပါ။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားသည့် လူအမျိုးအစားသုံးခု၊ တစ်နည်းပြောရလျှင် ဤအဆင့်သုံးဆင့်မှာ တည်ရှိသည့် လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ဂုဏ်ဒြပ် သို့မဟုတ် သူ၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ် မှန်ကန်သည့် ယုံကြည်ခြင်းကို မပိုင်ဆိုင်ကြသကဲ့သို့ ဤအရာတို့အပေါ် ရှင်းလင်းသည့် တိကျသည့် သိမြင်မှု သို့မဟုတ် အတည်ပြုခြင်းလည်း မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာတရား၏ လက်တွေ့အရှိတရားကို ဝင်ရောက်ဖို့ ဤလူအမျိုးအစားသုံးခုအတွက် သိပ်ခက်ခဲပြီး ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့ယုံကြည်သည့် ပုံစံနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ လွဲမှားသည့် သဘောထားသည် သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သူ့အတွက် မဖြစ်နိုင်စေသည့်အတွက်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သနားညှာတာမှု၊ ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပြမှု သို့မဟုတ် အလင်းပေးမှုကို လက်ခံရရှိဖို့လည်း သူတို့အတွက် ခက်ခဲပါသည်။ ဘုရားသခင်အကြောင်း သူတို့၏ သံသယများ၊ အယူအဆအမှားများနှင့် စိတ်ကူးခြင်းများသည် ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ယုံကြည်မှုနှင့် အသိပညာကို ကျော်လွန်သည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ဘေးမကင်းသည့်လူသုံးမျိုးဖြစ်ပြီး အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည့် အဆင့်သုံးဆင့်လည်းဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်အပေါ်၊ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရ၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိသေသလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင်က သမ္မာတရား ဟုတ်သလောဆိုသည်နှင့် သူ၏ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် စစ်မှန်မှု အကြောင်းအရာများအပေါ်မှာ သံသယစိတ်တစ်ခု ရှိနေပြီး ဤအရာများကို မသေချာနေလျှင် ဘုရားသခင်ဆီကလာသည့် အရာမှန်သမျှကို မည်သို့လက်ခံနိုင်ပါ့မည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနှင့် အသက်ဖြစ်သည်ဆိုသည့် အချက်ကို မည်သို့လက်ခံနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို မည်သို့လက်ခံနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့လက်ခံနိုင်မည်နည်း။ ဤလူမျိုးသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သည့် လမ်းညွှန်မှုနှင့် ထောက်ပံ့မှုကို မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ဤအဆင့်သုံးဆင့်မှာရှိသည့် လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နိုင်ကြသည်၊ ဘုရားသခင်အပေါ် အကဲဖြတ်နိုင်ကြသည်၊ ဘုရားသခင်ကို စော်ကားခြင်း သို့မဟုတ် သစ္စာဖောက်ခြင်းကို အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။ သူတို့သည် အချိန်မရွေး မှန်သည့်လမ်းခရီးကို စွန့်ပစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကို စွန့်ပစ်နိုင်ကြသည်။ ဤအဆင့်သုံးဆင့်မှာရှိသည့် လူတို့သည် အလွန်အရေးကြီးနေသည့် အချိန်ကာလမှာ တည်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှာ မှန်ကန်သည့်လမ်းကြောင်းအတွင်းကို မဝင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
စတုတ္ထအမျိုးအစား။ အရွယ်ရောက်လာသည့် ကလေးအဆင့် သို့မဟုတ် ကလေးဘဝ
နို့ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်မှာ၊ ဆိုလိုသည်မှာ များပြားလှသည့် ကျေးဇူးတော်များကို သူတို့ ခံစားကြရပြီးနောက်မှာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုကြောင်းကို စူးစမ်းရှာဖွေဖို့၊ မတူညီသည့် မေးခွန်းများကို နားလည်သည့် ဆန္ဒရှိဖို့၊ လူသားက အဘယ့်ကြောင့်အသက်ရှင်နေသနည်း၊ လူသားက မည်သို့အသက်ရှင်သင့်သနည်း၊ လူသားအပေါ် ဘုရားသခင်က သူ့လုပ်ဆောင်မှုများကို အဘယ့်ကြောင့်လုပ်ဆောင်သနည်း ဆိုသည့်မေးခွန်းများကို နားလည်ချင်သည့် ဆန္ဒများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဤမရှင်းလင်းသည့်အတွေးများနှင့် ရှုပ်ထွေးနေသည့် အတွေးပုံစံများသည် သူတို့အတွင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာပြီး သူတို့အတွင်းမှာ ဖြစ်တည်နေသည့်အခါ သူတို့သည် ရေလောင်းပေးခြင်းကို အဆက်မပြတ်ရရှိပြီး သူတို့၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ဖြစ်တည်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သမ္မာတရားအပေါ်မှာ သူတို့ ဘာသံသယမှ မရှိတော့ပေ။ တဖန် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုကြောင်းကို သူတို့ တိကျစွာ နားလည်ကြသည်။ ဤအခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်မှာ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာကြပြီး ဘုရားသခင်၏ စိတ်သဘောထားနှင့် အနှစ်သာရနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူတို့၏ မရှင်းလင်းသည့် အတွေးများနှင့် ရှုပ်ထွေးသည့် အတွေးပုံစံများအပေါ် အဖြေတစ်ချို့ကို တဖြည်းဖြည်းနှင့် ရရှိကြသည်။ သူတို့၏ စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သူတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် သိမြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဤအဆင့်မှာရှိသည့်လူတို့သည် မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်းအပေါ် စတင်လျှောက်လှမ်းလာပြီး ကူးပြောင်းခြင်းကာလကို ဝင်ရောက်လာပါသည်။ လူတို့က အသက်ကိုစတင် ရရှိလာကြခြင်းက ဤအဆင့်အတွင်းမှာဖြစ်သည်။ အသက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းသည့် ဖော်ပြချက်များက နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများ၊ ကြံစည်တွေးတောခြင်းများ၊ အယူအဆများ၊ ဘုရားသခင်အပေါ် မရေရာသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကဲ့သို့ လူတို့ သူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိသည့် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများစွာကို တဖြည်းဖြည်း ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြစ်တည်မှု၏ စစ်မှန်မှုကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီး သိမြင်လာရုံသာမကဘဲ သူတို့နှလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်အတွက် နေရာမှန်လည်း ပိုင်ဆိုင်လာကာ၊ ဘုရားသခင်နောက်ကို အမှန်တကယ် လိုက်ခြင်းက သူတို့၏ မရေရာသည့် ယုံကြည်ခြင်းကို အစားထိုးသည်။ ဤအဆင့်အတောအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်အပေါ်၊ သူတို့၏ မှားယွင်းသည့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ၊ ယုံကြည်မှုနည်းလမ်းများအပေါ် သူတို့၏ မှားယွင်းသည့်အယူအဆများကို လူတို့သည် တဖြည်းဖြည်းသိလာကြသည်။ သူတို့သည် သမ္မာတရားကို လိုချင်တပ်မက်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှု၊ အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုနှင့် ပဲ့ပြင်ဆုံးမမှုတို့ကို ကြုံတွေ့ရခြင်းကို တပ်မက်လာကြသည်။ သူတို့၏ စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းကို တပ်မက်လာကြသည်။ ဤအဆင့်အတွင်း ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ ထားသည့် သူတို့၏ အယူအဆများနှင့် ကြံစည်တွေးတောမှုပေါင်းစုံကို သူတို့ တဖြည်းဖြည်း စွန့်လွှတ်လာကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့် သူတို့၏ မမှန်ကန်သည့် အသိပညာကို ပြောင်းလဲ ပြုပြင်လာကြပြီး ဘုရားသခင်အပေါ် မှန်ကန်သည့် အခြေခံကျကျ သိမြင်မှုကို ရရှိကြသည်။ ဤအဆင့်မှာ လူတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အသိပညာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက သိပ်ရှင်းလင်းခြင်း သို့မဟုတ် တိကျခြင်းမရှိသော်လည်း အနည်းဆုံးအနေနှင့် သူတို့သည် သူတို့၏ အယူအဆများ၊ မှားယွင်းသည့် သိမြင်မှုများနှင့် ဘုရားသခင်အပေါ် နားလည်မှုလွဲခြင်းများကို တဖြည်းဖြည်း စတင် စွန့်ပစ်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အယူအဆများနှင့် စိတ်ကူးထင်မြင်ခြင်းများကို ဆက်ပြီး သိမ်းမထားတော့ပေ။ သူတို့သည် မည်သို့စွန့်လွှတ်ရမည်နှင့်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အယူအဆများထဲမှ၊ အသိပညာဆီမှနှင့် စာတန်ဆီမှ တွေ့ရှိရသည့် အရာများကို မည်သို့စွန့်လွှတ်ရမည်ကို စတင် သင်ယူလာကြသည်။ မှန်ကန်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများကို နာခံဖို့ စတင် ဆန္ဒရှိလာကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များဆီက လာသည့်အရာများနှင့် သမ္မာတရားနှင့် ကိုက်ညီသည့်အရာများကိုပင် နာခံဖို့ စတင် ဆန္ဒရှိလာသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကြုံတွေ့ဖို့၊ သူ့နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကိုယ်တိုင်သိပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့၊ သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အခြေခံစည်းမျဉ်းအနေနှင့်၊ သူတို့၏ စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲဖို့အတွက် အခြေခံအချက်များအနေနှင့် ကြုံတွေ့ဖို့ စတင်ကြိုးစားကြသည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းမှာ လူတို့သည် မသိစိတ်မှ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှုနှင့် အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကို လက်ခံကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သူတို့၏ဘဝအနေနှင့် မသိစိတ်မှ လက်ခံကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှု၊ ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကို သူတို့လက်ခံပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကို လက်ခံပြီး သူတို့သည် သူတို့ရဲ နှလုံးသားအတွင်းမှာ ယုံကြည်သည့် ဘုရားသခင်သည် အမှန်တကယ် တည်ရှိကြောင်းကို ပို၍ပို၍ သတိမူမိလာပြီး ခံစားသိရှိလာနိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့မှာ၊ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ဘဝများမှာ ဘုရားသခင်သည် လူသား၏ ကံကြမ္မာကို အမြဲတစေ တာဝန်ယူသည်၊ လူသားကို ဦးဆောင်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကို ပိုပြီး ခံစားကြရသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် သူတို့၏ ဆက်နွှယ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ တည်ရှိမှုကို တဖြည်းဖြည်းနှင့် အတည်ပြုလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင် သတိမပြုမိခင်မှာပင် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှု၌ သူတို့သည် မသိစိတ်မှ အတည်ပြုပြီး ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်နှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို အတည်ပြုလက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ လူတို့က ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို အတည်ပြုလက်ခံပြီး ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အတည်ပြုလက်ခံလိုက်သည်နှင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မရပ်မနား ငြင်းပယ်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အယူအဆများကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အသိပညာကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ စိတ်ကူးထင်မြင်ခြင်းများကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သမ္မာတရားက အဘယ်နည်းဆိုသည်နှင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်က အဘယ်နည်းဆိုသည်ကို မရပ်မနား အားထုတ်ရှာဖွေကြသည်။ ဘုရားသခင်အပေါ် လူတို့၏ အသိပညာသည် ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အချိန်ကာလအတွင်းမှာ အမှန်တကယ်ပင် အပေါ်ယံဆန်ပါသည်။ သူတို့သည် စကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ပင် ဤအသိပညာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းပြဖို့ မတတ်နိုင်ကြသကဲ့သို့ သေသေချာချာ အသေးစိတ် မရှင်းပြနိုင်ကြပေ။ သူတို့မှာ သဘောပေါက်လွယ်သည့် နားလည်မှုသာ ရှိကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤအစပိုင်း အဆင့်သုံးဆင့်ကို အတူထားလိုက်သည့်အခါမှာ ဤအချိန်ကာလမှာရှိသည့် အရွယ်မရောက်သေးသည့် လူတို့သည် ရေလောင်းပေးခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် အထောက်အပံ့ကို လက်ခံရရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ပြီး စတင်အပင်ပေါက်နေပါပြီ။ မြေပြင်မှာမြုပ်ထားသည့် အစေ့တစ်စေ့ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ စိုစွတ်မှုနှင့် အာဟာရဓာတ်များကို ရရှိပြီးနောက်မှာ မြေကြီးကို ထိုးထွက်လာပါလိမ့်မည်။ သူ၏ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခြင်းက ဘဝအသစ်တစ်ခု မွေးဖွားခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဤဘဝအသစ်တစ်ခု မွေးဖွားခြင်းက ဘဝ၏ ညွှန်းဆိုချက်များကို အနည်းအကျဉ်းမြင်စေပါသည်။ အသက်နှင့်အတူ လူတို့သည် ကြီးပြင်းလာမည်။ ထို့ကြောင့် ဤအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း၏ လမ်းမှန်ပေါ်ကို ရောက်အောင် သူတို့ တဖြည်းဖြည်း လုပ်လာကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ အယူအဆများကို စွန့်ပစ်ရင်း၊ ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်မှုကို လက်ခံရရှိရင်းဖြစ်သည်။ လူတို့၏ ဘဝများသည် မလွဲဧကန် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကြီးထွားလာပါလိမ့်မည်။ ဤကြီးထွားခြင်းကို မည်သည့်အခြေခံအချက်အလက်များအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တိုင်းတာသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့အပေါ် သူတို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားအပေါ် သူတို့၏ စစ်မှန်သည့် နားလည်မှုတို့အရ တိုင်းတာပါသည်။ ဤကြီးထွားခြင်း အချိန်ကာလမှာ ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ သိမြင်မှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရကို တိတိကျကျ ဖော်ပြဖို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ စကားလုံးများကို အသုံးပြုဖို့ သူတို့အတွက် အတော်ပင်ခက်ခဲသော်လည်း ဤလူအုပ်စုသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို နှစ်သက်ခံစားခြင်းမှတစ်ဆင့် သာယာမှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ရရှိဖို့ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ ကိုယ့်အသိစိတ်နှင့် လုပ်လိုခြင်း မရှိတော့ပေ။ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည့်သူဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေကြပါသည်။ ဖြည့်စွက်ပြောရလျှင် သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိကြပြီး ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှုနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဤသည်မှာ ကြီးထွားခြင်းအဆင့်၌ လူတစ်ယောက်၏ အမှတ်အသားဖြစ်ပါသည်။
ဤအဆင့်မှာ လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာတစ်ချို့ ရှိသော်လည်း ဤအသိပညာသည် အလွန်မှုန်ဝါးပြီး ထင်ရှားခြင်း မရှိပေ။ ၎င်းကို သူတို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှင်းနိုင်သည့်အချိန်မှာ သူတို့သည် အတွင်းမှာ တစ်ခုခု ရရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ခံစားကြရသည်။ ဘာကြောင့်လဲဟုဆိုရလျှင် ဘုရားသခင်၏ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားအပေါ် သိမြင်ခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်း အတိုင်းအတာ တစ်ချို့ သူတို့ရရှိပြီးသည့် အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးက အပေါ်ယံဆန်ပြီး အခြေခံအဆင့်တစ်ခုသာ ရှိပါသေးသည်။ ဤလူအုပ်စုသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့ဆက်ဆံသည့် တိကျသည့် အမြင်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဤအမြင်ကို သူတို့ကြိုးစားလိုက်လျှောက်သည့် ရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သူတို့ကြိုးစားလိုက်လျှောက်သည့်နည်းလမ်း၌ ဖော်ပြပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်မှာ၊ လူသားအပေါ် သူ၏သတ်မှတ်ချက် အမျိုးစုံနှင့် လူသားအပေါ် သူ၏ထုတ်ဖော်ချက်တို့၌ သူတို့သည် သမ္မာတရားကို မလိုက်လျှောက်သေးလျှင်၊ လက်တွေ့အရှိတရားကို ဝင်ရောက်ဖို့ သူတို့ မလိုက်လျှောက်သေးလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သူတို့ တွေ့ကြုံရသည့်အခါ၌ ဘုရားသခင်ကို သိပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အားထုတ်ရှာဖွေခြင်းမရှိလျှင်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း အဓိပ္ပာယ်ကို ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဆိုသည်ကို သူတို့မြင်ပြီးကြပါပြီ။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့ မည်မျှပင် ခံစားရပါစေ၊ သူတို့၏ စိတ်သဘောထားကို မပြောင်းနိုင်ပုံ၊ ဘုရားသခင်ကို မကျေနပ်စေနိုင်ပုံ၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ကို မသိနိုင်ပုံကို သူတို့သိကြပြီး လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ထဲမှာ ဆက်လက် နေထိုင်နေလျှင် သူတို့သည် ဘယ်တော့မှ ကြီးထွားခြင်း၊ အသက်ကို ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ခြင်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုသည်ကို သူတို့သိကြသည်။ အနှစ်ချုပ်ပြောရလျှင် လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို အမှန်တကယ် တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ခြင်း မရှိဘူးဆိုလျှင်၊ သူ့နှုတ်ကပတ်တော်များမှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်ကို မသိနိုင်လျှင်၊ မွေးကင်းစကလေးအရွယ်မှာပဲ ထာဝရ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး သူ့ဘဝ အရွယ်ရောက်ခြင်း၌ ရှေ့ကို ခြေတစ်လှမ်း ဘယ်တော့မှ လှမ်းမှာမဟုတ်ပေ။ သင်သည် မွေးကင်းစအရွယ် အဆင့်မှာပဲ ထာဝရ တည်ရှိနေလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၏ လက်တွေ့အရှိတရားကို ဘယ်တော့မှ မဝင်ရောက်လျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင့်ဘဝအဖြစ် ဘယ်တော့မှ မထားလျှင်၊ မှန်ကန်သည့်ယုံကြည်မှုနှင့် ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာကို ဘယ်တော့မှ မပိုင်ဆိုင်လျှင်၊ ဘုရားသခင်က သင့်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသလော။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၏ လက်တွေ့အရှိတရားကို ဝင်ရောက်သည့်သူတိုင်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သူတို့ဘဝအဖြစ် လက်ခံသည့်သူတိုင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ပြစ်တင်ဆုံးမမှုနှင့် တရားစီရင်မှုကို စတင်လက်ခံလာသူတိုင်း၊ မိမိ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် စိတ်သဘောထား စတင်ပြောင်းလဲလာသည့်သူတိုင်း၊ သမ္မာတရားကို လိုချင်တပ်မက်သည့်၊ ဘုရားသခင်ကိုသိဖို့ ဆန္ဒရှိသည့်၊ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို လက်ခံဖို့ ဆန္ဒရှိသည့် သူတိုင်း၊ ဤလူတို့သည် အသက်ကို အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည့်သူများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အရွယ်ရောက်နေသည့် ကလေး၊ ကလေးဘဝအဆင့်မှာရှိသည့်သူဖြစ်သည့် စတုတ္ထလူအမျိုးအစား အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။
ပဉ္စမအမျိုးအစား။ အရွယ်ရောက်သည့် ဘဝအဆင့် သို့မဟုတ် လူကြီးအဆင့်
အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားသည့် နောက်ပြန်ဆုတ်မှုများနှင့် ပြည့်နေသည့် ကြီးထွားခြင်းအဆင့်ဖြစ်သည့် ကလေးဘဝ လေးဖက်ထောက်သွားသည့် အဆင့်ကို ကြုံတွေ့ပြီးနောက်မှာ လူတို့၏ဘဝသည် တည်ငြိမ်နေပါပြီ။ သူတို့၏ ရှေ့တက်နေသည့် ခြေလှမ်းများက မရပ်တန့်တော့သကဲ့သို့ မည်သူမှ မတားဆီးနိုင်ပေ။ ရှေ့မှာ ရှိသည့်လမ်းက ကြမ်းတမ်းပြီး မညီမညာဖြစ်နေသော်လည်း သူတို့သည် အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိကြတော့ပေ။ သူတို့သည် ရှေ့မှာစမ်းတဝါးဝါးဖြစ်မနေတော့ပေ၊ သို့မဟုတ် သူတို့၏ ဦးတည်ချက်များ မပျောက်ဆုံးတော့ပေ။ သူတို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အမှန်တကယ် ကြုံတွေ့ခြင်းအတွင်းမှာ နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေပါပြီ။ သူတို့၏နှလုံးသားများသည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်၏ ကြီးမြတ်ခြင်း အားဖြင့် ဆွဲယူခြင်းခံရပါပြီ။ ဘုရားသခင်၏ ခြေလှမ်းများနောက်ကို လိုက်ဖို့၊ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သာရကို သိဖို့၊ ဘုရားသခင်ကို အလုံးစုံသိဖို့ သူတို့ တပ်မက်ကြသည်။
ဤအဆင့်မှာရှိသည့်လူတို့သည် သူတို့ယုံကြည်သည်မှာ မည်သူနည်းဆိုသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိပြီးဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့ ဘာကြောင့်ယုံကြည်သင့်ကြောင်းနှင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်၏ သက်ဆိုင်သည့် ဘဝများ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြသည်။ ဘုရားသခင် ဖော်ပြသည့်အရာတိုင်းက သမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြပါသည်။ သူတို့၏ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိသည့် အတွေ့အကြုံများမှာ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှုနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမမှု မပါလျှင် ဘုရားသခင်ကို သိဖို့၊ ကျေနပ်စေဖို့ လုံးဝ တတ်နိုင်မှာ မဟုတ်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့ကို ဘယ်တော့မှ အမှန်တကယ် လာရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းကို သူတို့သိမြင်ကြသည်။ ဤလူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နှလုံးသားများအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံဖို့ ပြင်းပြသည့် ဆန္ဒတစ်ခုရှိသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းခံနေရစဉ်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့် စိတ်သဘောထားကို မြင်ဖို့၊ ပိုသန့်စင်သည့် ချစ်ခြင်းကို ရယူဖို့၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင်ကို ပိုပြီး အမှန်တကယ်နားလည်ပြီး သိဖို့ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်သူတို့သည် မွေးကင်းစအဆင့်၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားခြင်းနှင့် ပေါင်မုန့်ကိုစားခြင်းနှင့် ဗိုက်ပြည့်ခြင်းအဆင့်ကို လုံးဝ နှုတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို သည်းခံအောင်လုပ်ပြီး သူတို့ကို သနားညှာတာမှုပြစေဖို့ လွန်ကျူးသည့် မျှော်လင့်ချက်များကို သူတို့ မထားကြတော့ပေ။ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရပ်တန့်မသွားမည့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို လက်ခံရရှိဖို့၊ မျှော်လင့်ဖို့ ယုံကြည်မှုရှိကြပါသည်။ သူတို့၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့် စိတ်သဘောထားနှင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခွဲခွာစေပြီး ဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်စေဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်သည့် သူတို့၏အသိပညာ၊ သူတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု သို့မဟုတ် သူတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်၊ ဤအရာများ အားလုံးသည် သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ သိပ်ရှင်းလင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးအဆင့်မှာရှိသည့်လူတို့သည် မရေရာသည့် ယုံကြည်မှုအဆင့်ကို၊ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့မှီခိုသည့် အဆင့်ကို၊ စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသည့် အရွယ်မရောက်သည့်ဘဝအဆင့်ကို၊ ဝေဝါးခြင်း အဆင့်ကို၊ စမ်းတဝါးဝါးအဆင့်ကို၊ မကြာခဏ လိုက်စရာမရှိသည့် မည်သည့်လမ်းမှမရှိသည့်အဆင့်ကို၊ ချက်ချင်းပူ၊ ချက်ချင်းအေးသည့်နှစ်ခုကြားပြောင်းလဲခြင်း၏ မတည်ငြိမ်သည့် အချိန်ကာလကို၊ မျက်လုံးတစ်လုံးမှိတ်ပြီး ဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်သည့် အဆင့်ကို လုံးဝ နှုတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့လူမျိုးက ဘုရားသခင်၏ ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် အလင်းပေးခြင်းကို မကြာခဏ လက်ခံရရှိသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ မှန်ကန်သည့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းတို့ မကြာခဏ ပြုလုပ်သည်။ ဤအဆင့်မှာ နေထိုင်သည့်လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် သူတို့လုပ်သည့်အရာတိုင်းမှာ သမ္မာတရား၏ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှာဖွေနိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဆန္ဒကို မည်ကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းရမည်ဆိုသည်ကို သူတို့သိသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းလမ်းကိုလည်း သူတို့ရှာတွေ့ပြီးဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့် သူတို့၏အသိပညာကို သက်သေခံဖို့ စတင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခြင်း အချိန်ကာလအတွင်း၌ သူတို့မှာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အပေါ်၊ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဖန်ဆင်းခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အပေါ်၊ လူသားမျိုးနွယ်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို တဖြည်းဖြည်းနားလည်ပြီး သိမြင်ခြင်းရှိကြသည်။ ဖြည့်စွက်ပြောရလျှင် အနှစ်သာရနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားအပေါ် နားလည်မှုနှင့် သိမြင်မှုကိုလည်း သူတို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရရှိကြသည်။ ဤအသိပညာကို မည်သည့်လူသား၏ အယူအဆ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးထင်မြင်မှုမှ အစားမထိုးနိုင်ပေ။ ပဉ္စမမြောက်အဆင့်မှာ လူတစ်ယောက်၏ဘဝသည် လုံးဝ အရွယ်ရောက်သွားပြီ သို့မဟုတ် ဤလူကို ဖြောင့်မတ်သည် သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ဤကဲ့သို့လူမျိုးသည် ဘဝမှာ ရင့်ကျက်ခြင်းအဆင့်ကို တစ်ဆင့်လှမ်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ဖို့နှင့် ဘုရားသခင်နှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင် ရပ်ဖို့ ဤလူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့ကို လာရောက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့လူမျိုးသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မြောက်မြားစွာတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်သည့်အတွက်၊ မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသည့် စမ်းသပ်မှုများကို တွေ့ကြုံခဲ့ပြီး၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်း ဖြစ်ရပ်များ၊ ဘုရားသခင်ဆီက တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကို မရေမတွက်နိုင်အောင် ကြုံတွေ့ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏ အပ်နှံခြင်းသည် နှိုင်းယှဉ်၍မရဘဲ လုံးဝပြည့်စုံပါသည်။ ဘုရားသခင်အပေါ် သူတို့၏အသိသည် မသိစိတ်ထဲမှ ရှင်းလင်းပြီး တိကျသည့် အသိပညာဆီသို့၊ အပေါ်ယံမှ လေးလေးနက်နက်ဖြစ်ခြင်းသို့၊ မှုံဝါးဝေဝါးခြင်းမှ တိကျသေချာပြီး ရှင်းလင်းမှုဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် အစွမ်းကုန် စမ်းတဝါးဝါးဖြစ်ခြင်းနှင့် တက်ကြွမှုမရှိသည့် ရှာဖွေခြင်းမှ အားစိုက်စရာမလိုသည့် အသိပညာနှင့် တက်ကြွသည့် သက်သေခံခြင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ဤအဆင့်မှာရှိသည့်လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရား၏ လက်တွေ့အရှိတရားကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ပေတရုကဲ့သို့ စုံလင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အခြေချပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ လူကြီးအဆင့်ဖြစ်သည့် အရွယ်ရောက်ခြင်းအဆင့်၌ နေထိုင်သည့်သူဖြစ်သည့် ပဉ္စမလူအမျိုးအစားဖြစ်ပေသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်
အရှေ့သို့- အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၁)
နောက်တစ်ခုသို့- အတုမရှိ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် (၃)